विविध | KTM Khabar
बञ्चरोले कपाल काट्ने विचित्रको सैलुन (भिडियो)
१७ बैशाख । सर्पले मसाज गर्ने, अण्डाले मेकअप गर्ने जस्ता दुनियाका अनेक खालका कृत्यहरुका बारेमा त सुन्नुभएकै होला । र, अहिले चाहीँ बञ्चरोले कपाल काट्ने अनौठो कृयाकलापको समाचार बाहिर आएको छ । वास्तवमा रुसी हेयर ड्रेसर डानिल इस्टोमिनले कैँचीले होइन बञ्चरोले कपाल काटिदिन्छन् । उनको सैलुनमा बञ्चरोले कपाल कटाउने ग्राहकहरुको भीड हुन्छ । आफुलाई बञ्चरोले कपाल काट्न निकै सजिलो हुने डेनियल बताउँछन् । उनीकहाँ आउने ग्राहक पनि नडराईकन बञ्चरोमा टाउको थाप्छन् । ड ...
गजब तथ्यः नाक कोट्याएर खानुका फाईदै फाईदा
काठमाडौं, वैशाख १६ । मानिसहरु सानो बच्चा हुँदा नाक कोट्याउने र ‘स्नोट’ खाने गर्दछन् । कसै–कसैमा यो बानी ठूलो हुँदा जाँदासमेत छुट्न सक्दैन । जसलाई समाजमा एकदमै फोहरी बानीकोरुपमा हेरिन्छ । तर, जेसुकै होस् हालै भएको एक अध्ययनले त्यसरी नाक कोट्याएर खानाले मानव शरीरमा बहुउपयोगी फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अध्ययन अमेरिकाको ‘नेसनल सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी इन्फरमेसन’ले परमाणविक जीव विज्ञानसम्बन्धी सूचना खोजका ...
भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता, बिजेतालाई प्रमाणपत्रसहित ७५ हजार
१६ बैशाख । मान्छेको मात्र होइन कुकुरको सौन्दर्य प्रतियोगिता भएको त सुनिएको थियो । तर पाकिस्तानमा चाहीँ भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ । पाकिस्तानको उत्तरी स्वात जिल्लाको सदरमुकाम मिंगोरामा भएको तिन दिने भैँसी सौन्दर्य प्रतियोगितामा किसान तथा भैँसी प्रजननकर्ताहरु आ आफ्ना भैँसी लिएर सहभागी भए । भैँसीको नश्ल सुधारलाई बढावा दिनका लागि उक्त प्रतियोगिता भएको बताइएको छ । प्रतियोगितामा भैँसीको सुन्दरता तथा उसको दुध दिने क्षमता दुबैलाई ध्यान दिइएको थियो ...
हेरौँ नेपालको इतिहासका निकै नै दुर्लभ र लोभलाग्दा तस्बिरहरु...
१५ बैशाख । सन् १९१५ मा सिंह दरबार लाजिम्पाटमा राखिएका गाडिको एक झलक दुई पैसा पर्ने नेपालको हुलाक टिकटः १९७४ वागमति नदिको एक झलक १९९० को भूकम्प अघिको भीमसेन स्तम्भ वि.सं.१९७२ मा विर अस्पताल । ...
सम्भोगको आवाजले टेनिस खेल नै स्थगित भएपछि...
१५ बैशाख । सम्भोगका बेला एकजना महिलाले निकालेको ठूलो आवाजका कारण चलिरहेको टेबलटेनिस खेल नै स्थगित गर्नुपरेको छ । घटना अमेरिकाको हो । अमेरिकाको फ्लोरिडमा चलिरहेको सारासोटा ओपन टेनिस अन्तरगतको एक खेल सम्भोगका बेला महिलाले निकालेको आवाजका कारण केहीबेर स्थगित भएको छ । प्रतियोगिताअन्तरगत फ्रान्सेस टिओफे र मिचेल क्रुगरबीच खेल चलिरहेको थियो । खेल चलिरहेको बेला एक्कासी सेक्स गर्नेबेला निकाल्ने आवाज सुनियो । टिओफेले सुरुमा त्यो आवाज सुनेछन् र उनले निकै आश ...
३७ वर्षमा ३८ बच्चा !
१५ बैशाख । १३ वर्षमा पहिलोपटक आमा बनेकी एक महिलाले ३७ वर्षकी हुँदासम्म ३८ वटा बच्चा जन्माइसकेकी छिन् । सामान्य महिलाले कल्पना पनि गर्न नसक्ने यो प्रजननशीलताले युक्त महिला युगाण्डाकी हुन् । मरियम नबातान्जी नामकी ती महिलाको सानै उमेरमा बिहे भयो । उनी १३ वर्षमै पहिलो बच्चा जन्माइन् । युगाण्डाको मुकोनो जिल्लाको कबिम्बिरी गाउँमा बस्ने मरियमलाई सबैले बच्चा जन्माउने मेसिन भन्छन् । उनले ६ पटक जुम्ल्याहा, चार पटक तिम्ल्याहा तथा तिन पटक चम्ल्याहा बच्चा जन् ...
एक घरमा १०० किलो सुन फेला...
१५ बैशाख, काठमाडौं । फ्रान्समा एक व्यक्तिका नातेदारले दिएको घरमा लुकाएको अवस्थामा ठूलो मात्रामा सुन फेला परेको छ । उनका नातेदारले विशाल घर विरासतका लागि छाडेका थिए जसलाई बेच्ने तयारी ती व्यक्तिले गरेका थिए । घरका वारिसले फर्निचर, बाथरुम तथा कार्पेको मुनि लुकाइएको एक यस किलो सुन फेला पारेका छन् । जसको मूल्य करिब ३७ लाख डलर अनुमान गरिएको छ । घर बेचविखनको काम गन मध्येका निकोलस फियरफार्टले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई बताए अनुसार त्यहाँ सुनका ५ हजार सिक्क ...
दुनियाको अन्तिम सेतो गैँडा जोडियो डेटिङ एपमा
१४ बैशाख, काठमाण्डौ । विश्वको दुर्लभ प्रजातिको सेतो गैँडाको अन्तिम भाले सदसय अब डेटिङ एपमा पनि जोडिएको छ । केन्यामा गैडा रक्षाको लागि काम गर्ने वन्यजन्तुकर्मीहरुले वन्यजन्तु सुरक्षाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्धेश्यका साथ यो सेतो गैँडालाई डेटिङ एप टिन्डरमा जोडेका हुन् । यो सेतो भाले गैँडाको उमेर ढल्किरहेको छ र ऊ केन्याको जंगलमा आफ्ना दुई पोथी साथीहरुसँग बसिरहेको छ । उक्त गैँडाको प्रजननका लागि अहिलेसम्म गरिएका प्रयासहरु सफल हुन सकेका छैनन् । यो ...
बेलायत र रुसबीच ‘बिरालो लडाइँ’
उसै त बेलायत र रुसबीच सम्बन्ध चिसै छ । त्यो चिसोपनामा दुई बिरालोको बीच भएको लडाइँले रौनक थपिदिएको छ । वास्तवमा बिरालो सम्बन्धी एक उपाधि कब्जा गर्ने विषयमा रुस र बेलायत आमने सामने भएका छन् । यसमा दुबै देशका समर्थकहरु दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । आ(आफ्नो बिरालोलाई जिताउनका लागि सोसल साइटदेखि लिएर कैयन् हतकण्डा अपनाइएको छ । वास्तवमा बेलायतमा दुइदिने बिरालो प्रदर्शनीको आयोजना भएको छ । उक्त प्रदर्शनी अन्तरगत आयोजित वल्र्ड वेष्ट क्याट अर्थात् विश्वको सर ...
एक महिला, जो गर्भवती अवस्थामै भइन् फेरि गर्भवती, यो मानव जीवनकै दुर्लभ घटना हो । चिकित्सकका अनुसार विगत १०० वर्षमा यो छठौं घटना हो । एक ब्रिटिश महिलाका जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिने अवस्थामा थिए, त्यही बेला उनी फेरि गर्भवती भइन् र एकसाथ तीन जना बच्चा जन्माइन्। जब कुनै महिला गर्भवती भएको दुई हप्ता वा एक महिना भित्र फेरि गर्भवती हुन्छिन् भने बिज्ञानको भाषामा ‘सुपरफोएटेशन’ भनिन्छ। प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डा साइमन फिशेल भन्छन्, ‘यो नहुनुपर्ने थियो तर भयो ।’ यस्तो ...
३६ वर्ष लगाएर गाउँमा पानी ल्याउने यी व्यक्ति, जसले तीनवटा पहाड फोडे
बैशाख १२ – चीनको गुइजहाउ प्रान्तमा रहेको सानो गाउँको जीवनस्तरलाई सुधार्नका लागि ह्वाङ दफाले १० किलोमिटर लामो पानीको नहर बनाउन तीनवटा पहाड फोडे जसका लागि उनलाई ३६ वर्ष लाग्यो । कोआवाङ्बा गाउँका प्रमुख ह्वाङ दाफाले सन् १९५९ देखि उक्त योजना सुरु गरेको र यसका लागि उनले आफ्नो जीवनको ३६ वर्ष कडा परिश्रममा लगाएर पूरा गाउँलेका लागि २४ औं पानीको सुविधा प्रदान गरे । उक्त नहर गाउँमा आउनुपूर्व कोआवाङ्बाको वरिपरि र त्यहाँका बासिन्दाका लागि पर्याप्त पानी ...
अपत्यारिलो र दुर्लभ घटनाः गर्भवती महिला पुनः गर्भवती, तीन सन्तान जन्माइन्
लन्डन, वैशाख १२ । मानव जातिको इतिहासमा कहिलेकाहीँ अपत्यारिलो र दुर्लभ घटना हुन्छन् । यस्तै दुर्लभ घटना एक बेलायती महिलाको जीवनमा भएको छ । जोलेनी ब्रोडका अनुसार उनले गर्भवती भइसकेपछि पुनः अर्कोपटक गर्भधारण गरेकी हुन् । ‘मेरो गर्भमा दुई शिशु थिए, पछि तेस्रो पनि भएछ,’ उनले भनिन् । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार तेस्रो शिशुको जन्म अन्य दुई शिशु जन्मिएको दुई हप्तापछि भएको हो । जुम्ल्याहा शिशु जन्मिएको दुई हप्तापछि तेस्रो शिशुको जन्म भएको बताइए ...
दाँतैले ६ वटा इँटा उठाउने यी मानिस हेर्नहोस् भिडियो
१२ बैशाख । हालैका दिनहरुमा पाकिस्तानका एक युवक सोसल मिडियामा खुबै चर्चामा छन् । उनको यो प्रसिद्धिको कारकतत्व चाहीँ उनका शक्तिशाली दाँत हुन् । सैयद ताहिर नामका २१ वर्षे ती ठिटाले आफ्ना दाँतले ६ वटा इँटा उठाउँछन् । दाँतमा इँटा अठ्याएर उनी केहीबेर हिँड्छन् पनि । कसैले ताहिरको उक्त अद्भुत क्षमताको भिडिय ...
चुम्बन गरेर कार पाउने अनौठो प्रतियोगिता
वास्तवमा कार किन्नु एउटा ठूलै लगानी हो । पुरस्कारका रुपमा कार पाइने लक्की ड्रमा मानिसहरु लोभिएको देखिएकै छ । कारको सपना नहुने को होला र ? तर सपना सबैको पूरा हुँदैन । हालै सोसल मिडियामा कार जित्ने एक अनौठो मामिलाले खुबै चर्चा पायो । उक्त प्रतियोगितामा पैसा खर्च गर्नु थिएन, केवल चुम्बन गरे पुग्दथ्यो । त्यो पनि लगातार ५० घण्टा । उक्त प्रतियोगिता जितिन् ३० वर्षकी दिलिनी जयसूर्याले । ती महिलाले यो सावित गरिन् की यदि कुनै कुराको अठोट लिनेहो भने असम्भव ...
एउटा रसगुल्लाको विवादमा बिहे नै रद्द
११ बैशाख । बेहुला बेहुली जग्गेमा बसिसकेपछि पनि केही विवाद निस्किएर बिहे नै रद्द भएका घटना कहिलेकाहीँ सुनिन्छन् । यसरी बिहे रद्द गराउने घटना मामूली भने हुँदैनन् र कारण पनि ठूलै हुन्छन् । तर छिमेकी देश भारतमा चाहीँ एउटा रसगुल्लाको विवादमा भैरहेको बिहे नै रद्द भएको छ । घटना भारत उत्तर प्रदेशको हो । एउटा अतिरिक्त रसगुल्लाको विवादमा बेहुला र बेहुली पक्षबीच झगडा हुँदा बिहे नै रद्द भएको हो । घटना गत अप्रिल १४ गतेको हो । उन्नाओ जिल्लास्थित कुर्मापुर गाउँ ...
निकै सेक्सी युवतीसँग यी पुरुषको फोटोहरु बारम्बार किन भाइरल ? वास्तविकता के हो ?
बैशाख १० – सोसल साइटमा आजकाल यो फोटो निकै भाइरल भइरहेको छ । पहिलो पटक यी तस्बिरहरु हेरेपछि कसैलाई पनि विश्वास नलाग्ला कि यो फोटो पछाडिको वास्तविकता के हो । यस्तोमा हामी तपाईंलाई बताउँदै छौं कि यी सबै फोटो एक जोडीको हो जसलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले निकै मन पराएका छन् । कम्बोडियामा बस्नेले केही समय अघि आफ्नो फेसबुकमा थुप्रै फोटो सेयर गरेकी छिन् । उनले यी फोटोलाई सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘यो हो मेरो छोटो परिवार’ । यद्यपी, मानिसहरुलाई ...
बेहुलीका पहिरनलाई किन दिइयो फाँसी ?
लेबनानमा बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा संसोधनको माग गर्दै एउटा अभियान चलिरहेको छ । प्रदर्शनकारीहरुले त्यसका लागि तटमा रहेका खजूरका रुखहरुमा ३० भन्दा धेरै बेहुली पहिरनलाई फाँसीको डोरीमा लट्काएका छन् ।प्रदर्शनकारीहरुले बेरुतको एक चर्चित समुद्री तटमा एउटा डरलाग्दो दृश्य सिर्जना गर्ने कोसिस गरेका छन् । लेबनानमा विद्यमान कानून अनुसार बलात्कारीले यदि आफैले बलात्कार गरेकी पीडित महिलासँग बिहे गरेमा उसको अपराध माफ हुन्छ र सजाय भोग्नु पर्दैन । यस्तो क्रुर र अ ...
ट्रम्प विरुद्ध अंतरिक्षमा विरोध, गालीसहितको अंतरिक्ष यात्राको पूरा भिडियो हेर्नुस्
काठमाडौं, बैशाख १०। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लक्षितगरी अंतरिक्षमा अश्लिल शब्दमा लेखिएको प्लेकार्डसहितको विरोध गरेका छन् । गत विहिबार राति रसियाको ‘अटोनोमाउस स्पेस एजेन्सी नेटवर्क’ले पहिलो अंतरिक्ष यात्री युरी गागरिनको सम्झनामा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गाली गरीएको व्यानर अंतरिक्षमा पठाइएको हो । साथै एजेन्सीले चन्द्रमामा पाइला टेक्ने छैँठौ व्यक्ति एडगर मिसेलबाट पाएको प्रेरणाले व्यानर बनाएकोसमेत उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाका् ४५औँ र ...
यहाँ छन् सुन्दर महिला जो कहिल्यै बुढी देखिँदैनन् सुन्दरताले सबैलाई आकषिर्त गर्दछ । दुनियामा सबैभन्दा सुन्दर महिला कहाँ बस्छन् रु यसको उत्तर फरक फरक होला । तर हामीले जुन महिलाहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, उनीहरु साँच्चीकै दुनियाका सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् जो कहिल्यै बुढी हुँदैनन्, रोगी हुँदैनन् । बुढ्यौली उमेरको प्रभाव पर्दैन उनीहरुमा अनि डेढ सय वर्षसम्म बाँच्दछन् । उत्तरी पाकिस्तानको काराकोरम पहाडको हुन्जा उपत्यकामा बस्ने हुन्जा समुदायका महिलाहरु दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् भन्दा फ ...
नवजात शिशु जमिनमुनि गाडेको तीन दिनपछि निकाल्दा जिउँदै भेटिएपछि...
काठमाडौं, वैशाख ९ । नवजात शिशु जमिनमुनि गाडेको तीन दिनपछि निकाल्दा जिउँदै भेटिएको छ । गत विहीबार दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुल नेटल प्रान्तमा रहेको पडडक सहरकी २४ वर्षीया एक महिलाले आफ्नो नवजात शिशु जमिनमुनी गाडेकी थिइन् । काठ फर्निचरमा मजदुरी गर्ने ती महिलाले एक शिशुलाई यसअघि नै जन्म दिइसकेकी थिइन् । दोस्रो शिशु जन्मिएपछि बाबु–आमाको डरले काठ कारखानाकै जमिनमा माटो र काठका टुक्राहरुले आफ्नो शिशुलाई पुरेर छोडेकी थिइन् । गाडेको तीन दिनपछि काठ फर्निच ...
चोरले मोबाइल हैन, मोबाइल टावर नै चोरेपछि...
८ बैशाख । चोरले मोबाइल फोन चोरी गर्नु त नौलो होइन । तर जब चोरले रातारात मोबाइल नेटवर्कको टावर नै चोरिदिन्छ, तब मामिला बढि नै गडबड हुन्छ । क्यानडाको विनिपेग सहरमा हालै यस्तै चोरीको एक घटनाले पूरै सहरलाई नै हैरान पारिदिएको छ । त्यहाँको एगलेक क्षेत्रमा चोरले रातारात २० मिटर अग्लो मोबाइल फोन टावर नै गायब पारिदिएका छन् । चोरले मोबाइल टावरका सप्पै सामान तथा उपकरणहरु चोरेर लगे । अर्को दिन बिहानैबाट जब उक्त इलाकामा मोबाइल फोनले काम नै गरेन तब जनताहरुले म ...
यस्तो मन्दिर, जहाँ ऋण पनि पाइन्छ
८ बैशाख । मन्दिर भन्ने बित्तिकै फूल, प्रसाद, अक्षता चढाएर भगवानको पुजाआजा गर्ने र आशिर्वाद माग्ने वा मन शान्ति पार्ने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ । तर एउटा यस्तो मन्दिर पनि छ जहाँ भगवानबाट आशिर्वाद मात्र पाइँदैन मन्दिरबाट ऋण पनि पाइन्छ । भारतको हिमाचलस्थित सिमला, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहैल स्पितीमा छ । त्यहाँ आवश्यक परेका मानिसहरुले सजिलै सँग कर्जा लिन पाउँछन् । मन्दिरबाट ऋण लिने परम्परा सदियौँ पूरानो हो । मन्दिरले दिने ऋण एक वर्षमै चुक्ता गर्नुपर्दछ । त्य ...
११ सय वर्ष पहिले मरेकी महिलाको खुट्टामा एडिडास जुत्ता फेला परेपछि...
७ बैशाख । एडिडास कम्पनीको स्थापना ९२ वर्ष पहिले अर्थात् सन् १९२४ मा भएको हो । तर ११ सय वर्ष पहिले मरेकी एक महिलाको खुट्टामा समेत ‘एडिडास जुत्ता’ फेला परेपछि त्यसले तहल्का मच्चाएको छ । मंगोलियामा ११ सय वर्ष पहिले मृत्यु भएकी एक महिलाको शव अर्थात् ममी फेला परेको छ । उक्त ममीको सरीरमा यस्ता केही चिजहरु फेला परेका छन् जुन देखेर वैज्ञानिकहरु पनि अचम्ममा परेका छन् र ती चिजहरुले सोच्न बाध्य पारेका छन् । उक्त मानव अवशेषको खुट्टामा वैज्ञानिकहर ...
घनाजंगलमा बस्दै आएको एक परिवारका हेर्नुहोस् १९ दुर्लभ तस्बीर
७ बैशाख । अमेरिकाको अलास्काबाट करिब २५० माइल (४०० किलो मिटर) टाढा रहेको नोउटना नदी छ । जंगलको बिचमा रहेको सो क्षेत्रमा जाने आँट जो कोहिको हुँदैन । दुनियाले जाने आँट नगर्ने त्यस ठाउँमा एउटा एच्ले थरको परिवार बस्दै आएको छ । त्यस स्थानबाट नजिक भनेको करिब १०० माइल टाढा रहेको रूबी शहर हो । उनीहरू बस्ने त्यो विकट र अनकन्टार क्षेत्रमा पछिल्लो १८ बर्षमा केही औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरुले मात्र भ्रमण गरेका छन् । एक वर्षमा करिब ११ महिना संसारिक मोहमाया बा ...
सलमानको घाटीमा जुत्ताको माला परेपछि...
७ बैशाख । चलचित्रको प्रचार शैली निक्कै महंगो हुन थालेको छ, बलिउड नायकका लागि । चलचित्र प्रदर्शनको बेला आमिर खानले नयाँ(नयाँ फण्डा देखाउन थालेपछि अन्य कलाकार समेत प्रचारको नयाँ शैली खोज्नमा ब्यस्त छन् । पछिल्लो समय नायक सलमान खानले पनि नयाँ चलचित्रको पोष्टर फरक शैलीको बनाएका छन् । सलमान अभिनित नयाँ चलचित्र ‘ट्युबलाइट’को फस्टलुक रिलिज भए लगत्तै चलचित्रभित्र सलमानको चरित्र के भनेर अहिले टिप्पणी सुरु भएको छ । पछिल्लो समय जारी पोष्टरमा चेक ...
७ बैशाख । जलवायु परिवर्तनको निकै नराम्रो असर अहिले विश्वका नदीहरुमा पनि देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण क्यानडाको एउटा नदी ४ दिनमै चक्रक्कै सुकेको छ । क्यानडामा वग्ने स्लिम्स नदी केवल ४ दिनमै सुकेर लोप भएको हो । अनुसन्धानकर्ताहरुले यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले प्रकृतिको यो आश्चर्यजनक घटनालाई रिभर पाइरेसी अर्थात् नदीको चोरी भन्ने नाम दिएका छन् । क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो हिमनदी कास्काउल्सबा ...
बिहेमा बेहुलाले यस्तो माग राखेपछि...
६ बैशाख । बिहे भन्ने कुरा जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भएरै होला बिहेका विषयमा विभिन्न रितिरिवाज चर्चामा आउँछन् अनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई यादगर बनाउनका लागि मानिसहरुले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हाम्रो देश तथा छिमेकी भारतमा समेत बिहेमा दाइजो प्रथा कायम छ । यस्ता बाबुआमाहरु पनि छन् जसले दाइजोका लागि आफ्नो छोराको मोलमोलाई गर्छन् । अनी यस्ता बाउआमाहरु पनि छन् जसले दाइजो दिने औकात नभएकै कारण छोरी पाउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । भारतीय समाजमा कलंकक ...
कुकुरको मुल्य हवाइजहाज भन्दा पनि महंगो कुकुरको मूल्य कतिसम्म पर्ला रु तपाइँहामीले अहिलेसम्म हजार तथा लाखसम्म पर्ने कुकुरका बारेमा सुनेका थियौँ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो कुकुर पनि छ जसको मूल्य हवाइजहाज भन्दा पनि बढ्ता छ । यो कुकुरको भाउ २५ देखि ५० करोड रुपैयाँ सम्म पर्दछ । यो मूल्यमा त एउटा सानो हवाइ जहाज नै किन्न सकिन्छ । भारतको जयपुर सहरको दशहरा मैदानमा गत शनिवार केनल क्लब राजस्थानले एउटा कुकुर प्रदर्शनीको आयोजना गरेको थियो । उक्त प्रदर्शनीमा देश विदेशका विभिन्न ४० नश्लका २ सय भन्द ...
जहाँ कोही बच्चाहरु प्रधानमन्त्री, त कोही कम्पनीका मालिक
यो गाउँमा गएको बेला तपाइँलाई यदि कसैले राष्ट्रपति बाख्रा चराउन गएको छ, प्रधानमन्त्री घरायसी सामान लिन बजार गएको छ भनेर भन्यो भने अचम्म नमान्नुहोला । किनकी भारतको राजस्थानस्थित बुँदी गाउँका बच्चाहरुमा कोही राष्ट्रपति छन्, कोही प्रधानमन्त्री त कोही विभिन्न मोबाइल कम्पनीका मालिक । खासमा यो गाउँका मानिसहरुलाई आफ्ना छोराछोरीको नाम राख्दा विभिन्न पदकोे नाम, मोबाइल कम्पनीको नाम तथा अदालतको नाम समेत राख्ने ठूलो शौख छ । यो जिल्लामा उच्च पदहरु, कार्यालयहरु ...
व्यक्तिको मृत्युको समय पनि गर्भमा नै तय हुन्छ ?
बैशाख ५ – तपाईंले अभिमन्युको कहानी त सुन्नुभएको होला कि उनले आमाको गर्भभित्रै चक्रव्यूहलाई तोड्न सिकेका थिए । यसले यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ कि जीवनको क्रम आमाको गर्भबाट नै सुरु हुने गर्दछ । यस्ता थुप्रै कुरा ज्योतिष, पुराण र चाणक्य नीतिमा पनि गरिएका छन् । चाणक्यका अनुसार जब जीवको प्रवेश आमाको गर्भमा हुन्छ, त्यतिबेला नै उनको जन्मको समय निश्चित हुने गर्दछ । अर्थात्, कसैले शुभ मुहूर्त हेरेर शल्यक्रियामार्फत बच्चालाई जन्म गराउृन चाहे भने पनि त् ...
निमको रुखबाट बियर निस्किएपछि...
४ बैशाख । रुखले हामीलाई ताजा अक्सिजनका साथै फल, फूल तथा घाँस दिन्छ । तर के कुनै रुखले बियर दिएको सुन्नुभएको छ रु रुखबाट खोँटो निस्किएको त सुनिएकै हो, तर भारतमा भने एउटा निमको रुखबाट बियर निस्किरहेको छ । राजधानी नयाँदिल्लीको दिल्ली युनिभर्सिटीस्थित नर्थन क्याम्पसमा रोपिएको एक निमको रुखबाट बियर निस्किरहेको छ । केही समय पहिले देखिनै उक्त रुखबाट बियर जस्तै स्वाद आउने पदार्थ निस्किरहेको थियो । उक्त पदार्थ पिउँदा बियर पिए जस्तै नशा लाग्ने बताइएको छ । द ...
छापामार शैलीमा विप्लबको प्रतिरोध अभियानका, हेर्नुहोस् दर्जन तस्बीर !
४ बैशाख, बुटबल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ‘एकिकृत जनजागरण तथा प्रतिरोध अभियान’ तीव्र पारेको छ । आउँदै गरेको स्थानिय चुनावको खारेजीको माग गरेको नेकपाले चुनाव प्रतिरोध तथा जनताहरुमा जागरण गराउने उद्देश्यले ३ महिने अभियान अन्तर्गत गत चैत २४ गतेदेखी आगामी असार ५ सम्म यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । यता लुम्बिनी व्यूरोले पनि आफ्नो मातहतका जिल्लामा अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको खारेजीको माग राख्दै आएको नेकपाले यो व्यवस्थाले गर ...
बिहेपछि तीन दिनसम्म ट्वाइलेट जान नपाइने विचित्र चलन !
३ बैशाख । यो दुनियामा संस्कार पनि कस्ता कस्ता ? हुँदा हुँदा बिहे गरेपछि ट्वाइलेट नै जान नपाइने । इण्डोनेसियाको टिडन्ग नामक आदिवासी समुदायमा यस्तो विचित्रको परम्परा कायम छ । उक्त समुदायमा बिहे गरेको तिन दिनसम्म बेहुला बेहुलीलाई शौचालय जाने अनुमति दिइँदैन । सुन्दा निकै अनौठो, अप्रिय तथा कष्टकर लाग्दछ । तिन दिनसम्म ट्वाइलेट जान नपाउँदा भर्खर बिहे गरेका लोग्नेस्वास्नीको हालत के होला रु दया लागेर आउँछ । तर आखिर रितिरिवाज न भयो, सबैले मान्नैपर्ने । बिह ...
बाघको आक्रमणमा अनुहार गुमाएका ५ व्यक्ति को तस्बीर हेर्नुुस्
३ बैशाख, एजेन्सी । बंगलादेशका हाश्मोत अली जसलाई २० बर्ष पहिले बाघको आक्रमण गरि अनुहारको मासु खाइदिएको थियो । उनको को आधा भन्दा बढी भाग बाघले आक्रमण गरि खाइदिएको थियो । २० बर्ष अघि साथीहरुसँग मह काड्न मेंग्रोव जंगल गएका उनि मह काडेर फर्किएपछि राती डुंगामा सुतिरहेको बेला बाघले आक्रमण गर्दा उनको अनुहारको मासु खाइदिएको थियो । साथीहरुसँग सुतेका उनले बाघले आक्रमण गरेपछि चिच्याएका थिए । चिच्याए लगतै साथीहरुले घरेलु हतियार सहित बाघमाथि आक्रमण गरेपछि बाघ ...
गणेश भगवानको संसारकै सबैभन्दा महंगो मुर्ति , मूल्य कति ?
एजेन्सी, १ बैशाख। संसारकै सबैभन्दा महंगो मुर्ति कसको होला रु गणेश भगवानको । भारतको गुजरातको सूरत शहर हीरा नगरीको रूपमा चिनिने यो मुर्ति मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा नै फेला परेको हो । ६०० करोडको गणेश जीको मुर्ति १२ बर्ष देखि सूरतका प्रसिद्ध हीरा व्यापारी कनुभाई आसोदरियाको घरमा रहेको भारतिय मिडियाले जनाएको छ । जुन मुर्तिको हीरा नगरीमा दर्शन गर्न पाइन्छ । यो मुर्ति किन्नको लागि भरतिय नागरिकले ६०० करोड सम्म दिएको तर यो परिवारले बेच्न भने नमानेको ...
आफैं नछान्नुस् फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर
तपाइँ फेसबुकमा यस्तो प्रोफाइल पिक्चर राख्दै हुनुहुन्छ ?, उक्त प्रोफाइल पिक्चर निकै प्रभावकारी होस् र अरुहरुमाझ आफुलाई प्रभावशाली रुपमा पेश गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? भने प्रोफाइल पिक्चर छनोट गर्ने काम आफुले नगर्नुहोस् । प्रोफाइल पिक्चर छनोट गर्ने काममा तपाइँले एउटा यस्तो व्यक्तिको सहयोग लिनुहोस् जसले तपाइँलाई चिन्दैन । अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्सका शोधकर्ताहरुले फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चरको विषयमा एक अध्ययन गरेका छन् ।उक्त अध्ययन अनु ...
नयाँ वर्षको वार्षिक राशिफल
२ बैशाख । वार्षिक भविष्यको चर्चा गर्दा जगलाग्नलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षको जगलग्न कुम्भ हो । लग्नेश शनि एकादश स्थानमा आम्दानीको हिसाबले राम्रो भए पनि वर्षारम्भमा शनि वक्र्र भएकोमा लग्नमा केतु तथा सप्तममा राहु भएकाले पुँजी परिचालन अव्यवस्थित हुने, वैदेशिक व्यापार घाटा अप्रत्यासित रुपले बढ्ने, समाजमा अराजकता फैलिने संभावना रहन्छ । मेषमेष राशिलाई यस वर्ष अढैया शनिको प्रभाव केही समयको लागि हटेको अवस्था छ । वर्षारम्भको समय शुक्र, सूर्य, ...
७ दिन सम्म यसो गर्नुभयो भने कहिले पैसाको कमि हुने छैन !
३१ चैत । यदि तपाईले जति जे गरे पनि पैसा जोगाउन सकिरहेको छैन भने यसो गर्नुहोस। घरको मुख्य ढोकामा शनिबारको दिन सर्स्युको तेलको दीपक बाल्नुहोस्। दीपक निभीसकेपछि यदि तेल बाकी रह्यो भने उक्त तेललाई सान्ध्यको समयमा पिपलको वृक्षमा चढाईदिनुहोस। ७ शनिबारसम्म लगातार यसो गर्नाले धनको कमि हुदैन। यसो गर्नाले तपाइको हातमा पैसा सधै टिकीरहन्छ। ...
यी ३ बार कहिल्यै नकाट्नु दारी र कपाल, काट्यो भने के हुन्छ ? २९ चैत । धर्मशास्त्रमा जीवनका नियमहरु उल्लेख छन् । त्यसमा दारी र कपाल काट्न नहुने दिन समेत उल्लेख छ । यी दिनमा दारी कपाल काट्दा अशुभ हुने मानिन्छ । यी दिनमा नकाट्नुस् कपाल शास्त्रका अनुसार मंगलवार, विहीवार र शनिवार कपाल काट्नु हुँदैन । यसले अशुभ गराउने विश्वास छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पनि मंगलबार मंगलको दिन हो । शरीरमा पनि मंगलको निवाश हुने यो दिनमा कपाल काट्नु राम्रो मानिन्छ । मंगलबार र शनिबार कपाल काट्दा अशुभ प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । शास्त्र ...
आइन्सटाइनको ५५ लाखमा बिकेको चिट्ठीमा के छ ? काठमाडौं, चैत २६ । भौतिकशास्त्रका महान् वैज्ञानिक अर्ल्बट आइन्सटाइनले लेखेकोे एक चिट्ठी गत साता करिब ५५ लाख रुपैयाँ ९५३ हजार ५०३ अमेरिकी डलर०मा लिलामीमा बिक्री भएको छ । लाइभ साइन्समा प्रकाशित समाचारअनुसार सन् १९५३ मा भौतिक विज्ञानको अध्यापन गरिरहेको समयमा आइन्सटाइनले उक्त चिट्ठी एक लेखक एल कन्र्भसलाई लेखेका थिए । उक्त चिट्ठी ‘नेट डी स्यान्र्डस् हाउस’ले लिलामी बढाबढमार्फत् बेचेको हो । ‘नेट डी स्यान्र्डस् हाउस’काअनुसार गत मा ...
विचित्रको आलु, खादा उमेर बढ्दैन !
काठमाडौँ । यदी तपाई आफ्नो उमेर लुकाउनु हुन्छ । अथवा जवान देखिनका लागि पार्लरमा गएर हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ । अब हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दिन सकिएका छन् । किनकी आज हामी यस्तो आलुको बारेमा जानकारी दिँदैछौ । जुन आलु खाँदा सँधै जवान देखिन्छ । यो आलु खाँदा तपाईंको उमेर बढ्दैन । यसले तपाईंलाई विरामीबाट पनि बचाउँछ । यो आलु बजारमा पाइने सामान्य आलु भन्दा अलि फरक किसिमको छ । यो आलुको रंग वैजनी हुन्छ । यसलाई बनाउन पाँच साल लागेको छ । यो पाँच स ...
वाइफाइ पासवर्ड यसरि सजिलै थाहा पाउनुहोस् चैत २६ । अहिलेको हाइटेक जमानामा सबैसँग स्मार्टफोन हुन्छ नै । स्मार्ट फोन भएपछि थ्री जी वा वाइफाइबाट इन्टरनेट चलाउने कुरा कुनै नयाँ कुरा भएन । तर कहिले काँहि बाहिर निस्किँदा वा आफ्नो इन्टरनेटले काम नगर्दा नेट चलाउन नपाएर छटपटी हुने गर्छ । द्यचबखभ च्भकभबचअजभचक ग्लअयखभच ज्ष्तभिचुक ँष्लब िक्भअचभत च्भखभबभिम यल ज्ष्क म्भबतजदभमयस्तै अवस्थामा कसैको वाइफाइ पासवर्ड थाहा पाउन पाए १ पक्कै रमाइलो हुन्छ । कलेज, मल वा सिनेमा हलमा वाइफाइका ओपन नेटवर्क हुने गर्छन ...
कम्प्युटर प्रयोेगकर्ताहरुका लागी यो तस्बीर नौलो होईन, के हो यसको रहस्य ?
वासिंटन, चैत २५ । कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरुका लागि यो तस्वीर नौलो होइन, तर यसको वास्तविकता र रहस्यबारे निकै कमलाई मात्र जानकारी हुन सक्छ । सन् २००१ मा रिलिज भएको माइक्रोसफ्टको अपरेटिङ्ग सिस्टम ‘विन्डोज एक्सपी’मा यो तस्वीर ‘डिफल्ट डेक्सटप इमेज’ का रुपमा राखिएको हो । त्यसैले विश्वभर कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले आफ्नो कम्प्युटरको डेक्सटपमा यो तस्वीर देखेका छन् । लामो समयसम्म यो तस्वीरका बारेमा धेरैलाई भ्रम थियो । कुन ठाउँको तस्वीर ...
गन्हाउने जुत्ताको घिनलाग्दो प्रतियोगिता !
गन्हाउने जुत्ता कसलाई पो मन पर्छ र ? जुत्ता गन्हाउने मान्छे सम्झँदै घीन लाग्छ । कहिलेकाहीँ जुत्ता गन्हाएका कारणले नै लाजमर्नु हुन्छ । तर यो दुनियामा यस्तो ठाउँ पनि रहेछ जहाँ जुत्ता गन्हाउनेहरुले वाहवाही कमाए । नेशनल रटन स्निकर कन्टेस्ट नामक उक्त प्रतियोगितामा एक से एक दुर्गन्धित जुत्ताधारीहरुले भाग लिएका थिए । अनि प्रतियोगितामा निणर्णायकको भूमिकामा चाहीँ नासाका रसायन इन्जिनियर जर्ज अल्डि्रक थिए । उनले प्रतियोगीहरुका गन्हाउने जुत्ता एक एक ग ...
दुनियाका सबैभन्दा महंगा हिरा
हालै हंगकंगमा एक दुर्लभ गुलाबी हिरा ७ करोड १० लाख डलर अर्थात् झण्डै साढे ७ अर्ब डलरमा लिलामी भएको छ । हिराको बिक्रिमा यो एक नयाा विश्व रेकर्ड पनि हो । अण्डाकारको पिंक स्टार नामक उक्त गुलाबी हिरा ५९.६ क्यारेटको छ । सन् २०१३ मा यो बिक्रिको लागि राखिएको थियो तर यसको मूल्य चुकाउन अहिलेसम्म कोही पनि तयार भएको थिएन । ब्लू मुन : नोभेम्बर २०१५ मा एक औाठीमा लगाइएको १२.०३ क्यारेटको ब्लू मुन नामक हिराको लिलामी भयो । हंगकंग्का व्यवसायी जोसेफ लू ल ...
चिनियाँ नागरिक जो २५६ बर्ष बाँचे, २०० बच्चालाई जन्म दिएर मरे
२२ चैत, एजेन्सी । सामान्यतया मानिस बढीमा ८०-१०० वर्ष बर्षसम्म बाच्न सक्छ, तर एक यस्ता व्यक्तिको बरोमा सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुन्छ, जो २५६ बर्षसम्म जिउँदो रहे । सन् १९३३ मा अमेरिकी पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्समा एक चिनियाँ इतिहासकार वु चंग जीको एक अध्ययनबारे प्रकाशित गरेको थियो । प्रकाशित अध्ययनमा चीनका ली चिंग यूनले सन् १९३३ मे ६को समयलाई मृत्युको समयसम्म २५६ बर्षको जीवन व्यतीत गरेका थिए । लि चिंग यूनको जन्म चीनको सेजिया शहरमा सन् १६७७ मा भएको थियो । ...
‘सुसाइड ट्रि’ जसले हरेक हप्ता १ जनाको ज्यान लिन्छ !
चैत २२ । शोधकर्ताका अनुसार विश्वमा सबैभन्दा विशाक्त विरुवामध्ये सबैभन्दा विशालु ‘सरवेरा ओडोलम’ हो । सरबेरा ओडोलम नामक यो एक किसिमको लहरे विरुवा हो । जुन हेर्दा एकदमै सुन्दर र मनमोहक देखिन्छ । तर यसले कति जनाको ज्यान लिन्छ सायद कसैले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न । भारत सहित दक्षिण एसियाका अन्य केहि देशमा पाइने यो विरुवा यति धेरै विषाक्त छ कि कहिले काहि यसको प्रयोग कसैको ज्यान लिनको लागी गरिन्छ । यस रुखले हरेक हप्ता कम्तिमा एक ...
गलत ठाउँमा पार्किङ गर्दा ३२ लाख जरिवानामा परेपछि...
चैत २२ । बलमिच्याइँ गरी गलत ठाउँमा गाडी पार्किङ गर्नेहरुका लागि यो सबक बन्न सक्दछ । बेलायतमा एक महिला सवारी चालकले पटक पटक गलत ठाउँमा सवारी साधन पार्क गरेबापत एकमुष्ट २४ हजार ५ सय पाउण्ड अर्थात् झण्डै ३२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । स्कटल्याण्डको डुन्डीमा २८ वर्षकी कार्ली म्याकीले आफ्नो गाडी गलत ठाउँमा पार्किङ गर्दा एक निजी कम्पनीले झण्डै २ सय पटक जरिवानाको रसीद थमाएको थियो । तर उनले स्कटल्याण्डमा प्राइभेट कम्पनीले लगाएको ...
कस्तो विचित्र ? बियर पिउन जिराफ बारमा !
चैत २२ । रक्सी पिउनका लागि मानिसहरु बार तथा रेष्टुरेन्ट धाउने गरेको त देखिएकै हो । त्यसैले मानिस रक्सी खानका लागि रेष्टुरेन्ट तथा बार धाउने कुरा कुनै समाचारमा लेखिरहनु परेन । तर जब मानिसको साटो कुनै जंगली जनावर रक्सी खानका लागि बारमा धाउँछ, तब त्यो महाआश्चर्य हुन्छ र पक्कैपनि ठूलै समाचार बन्दछ । जोहानेसबर्गको लायन पार्कमा रहेको छ उक्त जिराफ । जिराफलाई बियर यति मिठो लाग्छ की ऊ दिनहुँ पार्क नजिक रहेको एउटा बारमा मूड फ्रेस बनाउनका लागि छिर्ने गर्दछ ...
भारतीय महासागरमा विचित्र’को आइल्यान्ड, जहाँ मानिस गए मारिदिन्छन्, हेर्नुहोस् ८ तस्बीर
काठमाडौं, २२ चैत । भारतको दक्षिण–पूर्व भारतीय महासागरमा एक त्यस्तो द्वीप (आइल्यान्ड) रहेको छ, जहाँ अन्य मानिसलाई घुम्न जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मानवशास्त्रीहरुले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानवजाति ‘संसारकै असभ्य’ र ‘अन्तिम दुर्लभ’ मानवजाति भनेर घोषणासमेत गरिदिएका छन् । विगतमा त्यहाँ अध्ययन र घुम्नका लागि गएका मानिसहरु कोहि फर्कन सफल नभएपछि भारत सरकारको सीमा तटरक्षक (कोस्टल गार्ड)हरुले पटक–पटक सम्पर्क गर्ने कोसिस गरे ...
फेसबुकमा जथाभावी पोष्ट गर्नेहरु सावधान ! एउटी महिलालाई ५ करोड जरिवाना
फेसबुकमा जथाभावी पोष्ट गर्नेहरु सावधान ! फेसबुकमा हचुवाका भरमा गलत कुरा लेखेर अरुको चरित्रहत्या गर्ने एक महिलालाई अदालतले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवानाको फैसला गरेको छ । घटना अमेरिकाको हो । अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनास्थित एक अदालतले आफ्नो पूर्व साथीलाई छोरा मारेको आरोप लगाएर फेसबुकमा पोष्ट एकजना महिलामाथि ५ लाख डलर जरिवानाको फैसला गरेको छ । आफ्नो बारेमा गलत अफवाह फेसबुकमा फैलाइएको थाहा पाएपछि डायलले ह्यामोन्डलाई बेइज्जती गरेको, मनोवैज्ञानिक रुपम ...
के सेक्स चाहना बढी हुनु कुनै रोग हो ?
प्रश्न: म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई सेक्सप्रति बढी नै चाहना हुन्छ । यस्तो चाहना ९ कक्षा पढ्दादेखिकै हो । म अहिले बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु । अझै पनि त्यस्तै हुन्छ । दिनमा दुई–तीन पटक हस्तमैथुन गर्छु । मलाई युवती देख्नासाथ उत्तेजना आउँछ अनि हिँड्दा पनि लाज लाग्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । के सेक्स चाहना बढी हुनु कुनै रोग हो ? हस्तमैथुन धेरै गरे त्यसको नकारात्मक असर पर्छ यौनचाहना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एउटा विशेषता हो र स ...
यी हुन् जुत्ता पालिस गरेर दैनिक १ लाख कमाउने ब्यक्ति
जस्तो काम उस्तै कमाइ भन्ने उखानै छ । तर यो उखानलाई चुनौति दिँदै एक जना व्यक्तिले अरुका जुत्ता पालिस गरिदिएर दिनमा १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । जुत्ता पालिस गरेर दिनकै एक लाख कमाउने भाग्यमानी नेपालका चाहीँ होइनन् । उनको कमाउने काइदा पनि गज्जबको छ । उनले आफ्नो खुल्ला पसलको अगाडिबाट हिड्ने मानिसहरुको जुत् ...
पाहुनाको हातमा थुकिदिएर स्वागत गर्ने चलन !
चैत १६ । आमरुपमा घरमा आउने पाहुनालाई आदर सत्कार सहित स्वागत सम्मान गरिन्छ । नयाँ नयाँ खानेकुरा दिइन्छ जसबाट पाहुनाले पनि राम्रो मानोस् । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ पाहुनालाई थुकेर स्वागत गरिन्छ । मसाई जनजातिमा पाहुनाको स्वागत यस प्रकारले गरिन्छ कि यो समुदायमा मानिसहरु एक अर्काको हातमा थुकेर अभिवादन गर्छन् ।हामीकहाँ थुक्नु भनेको कसैप्रति घृणाभाव जनाउनु वा दुत्कार्नु भन्ने बुझिन्छ । पाहुनालाई थुक्नु भनेको उसको अपमान गर्नु हो । तर के ...
प्रयोगशाला विज्ञान तथा प्रविधि मेलामा १७ देशले भाग लिने
१४ चैत, भियतनाम – भियतनामको राजधानी हानोइमा आगामी बुधबारदेखि शुरु हुन गै रहेको वैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रविधि मेलामा विश्वका बिभिन्न मुलुक तथा क्षेत्र समेत सत्र स्थानका एकसयबीस वटा वैज्ञानिक संगठन तथा कम्पनीहरु सहभागी हुने भएका छन् । यसै महिनाको २९ देखि ३१ तारिख गरी तीन दिन सम्म चल्ने उक्त मेलामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुल ...
विसं २०९९ मा नेपाल कस्तो होला ? जवाफ खोज्दै अध्यक्ष ओली
१४ चैत, काठमाडौं । यस शताव्दीको अन्त अर्थात विक्रम संवत २०९९ सालसम्म नेपाल कस्तो होला ? एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्धत सभा मार्फत यसको जवाफ खोज्ने भएका छन् । विद्धत सभामा समाजिक न्यायसहितको आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने उपायका बारेमा छलफल गर्न लागिएको ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले बताए ।आफ्ना आलोचक लेखक बुद्धीजीवीहरुलाई ‘इन्भर्टेड कमावाला बुद्धीजीवी’ र ‘फर सी बुद्ध ...
जब अण्डाबाट निस्कियो हिरा !
सुुनको फुल पार्ने कुखुरीका कहानी त तपाइँले खुुबै सुन्नुभएको होला । त्यो कहानी मात्र न थियो । कुखुराले सुनको अण्डा पारेको अहिलेसम्म कसैले भेटेको थिएन । तर त्यो कहानीलाई एक कदम पछि पार्दै कुुखुरा निकै अगाडि बढेको छ । अर्थात् कुखुराले सुनको होइन हिराको अण्डा पारेको छ । बेलायतमा भएको छ यो घटना । ३९ वर्षकी स्याली थोम्पसनले आफुले खानका लागि उमालेको अण्डाभित्र हिरा फेला पारेको दाबी गरेकी छिन् । निकट भविष्यमै बिहे गर्न आँटेकी स्यालीले हालै एक बिहान जब अण ...
कस्तो अचम्म ! यो ढुंगा हावामा अडिएको छ
चैत ९ - आज हामी यस्तो ठाँउको बारेमा जानकारी दिदैछौँ जहाँ हावामा ढुंगा अडिएको छ । सुन्दा यो कुरा केही चमत्कारी र अविश्वनिय लाग्छ । तर यो सत्य कुरा हो । सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाहको डण्छ वर्ष द्दद्ध मार्च को शुरू हुन लागेको छ । यसका लागि यहाँ दुनियाभरीका मानिसहरु आउन लागेका छन् । यो ठाँउमा यस्तो चमत्कारी पथ्थर छ जो विना कुनै साहरा जमिन देखि २ फिट उचार्इमा अडिएको छ । यो ढुंगा मानिसहरुका लागि कुनै आश्चार्य भन्दा कम छै ...
गर्मीमा घरलाई सितल राख्नुपर्छ ? तर कसरी
खुला ठाँउमा त चर्को गर्मी झेल्नैपर्छ । घरमा प्रवेश गर्दा पनि गर्मीले उकुस मुकुस हुनुपर्दा दिक्क लाग्छ । यसले शरीरमा आलस्यता समेत पैदा गर्छ । त्यसैले गर्मी सिजनमा घरलाई सितल तुल्याउनुपर्छ । तर, कसरी ? – झ्याल, ढोका खुला राख्नुपर्छ, यद्यपी साँझको समयमा भने बन्द गर्नु पर्छ । किनभने यो समयमा मच्छड छिर्न सक्छ । – झ्यालको पर्दा पातलो, पारदर्शी हुनुपर्छ । उज्यालो रंगको पर्दा उपयोगी हुन्छ । बेड कभर पनि सकेसम्म उज्यालो रंगको भए राम्रो । – ...
तपाइको भाग्य कति बर्षदेखि चम्कन्छ ? जन्ममिति बाट थाहा पाउनुहोस् ९ चैत - न्यूमरोलोजी अर्थात अंक ज्योतिष मार्फत पनि भविष्यको बारेमा निकै कुरा जानकारी लिन सकिन्छ । अंक ज्योतिषको माध्यमबाट कयौं समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ, साथै यस्ता कुरा पनि जान्न सकिन्छ कि तपाइको भाग्योदय कुन बर्षदेखि सुरु हुन्छ । यस्ता कुरा जान्नको लागि तपाईलाई तपाइको जन्म मिति थाहा हुनुपर्छ, ...
… यसकारण मैले पोर्नलाई अंगालें
बेलायतकी चर्चित पोर्न स्टार कर्ली रे, आफूले काम गर्ने क्षेत्रप्रति मानिसहरुको धारणासँग सहमत नभएको बताउँछिन् । पोर्न क्षेत्रसँग मानिसहरुले जुन नकारात्मक धारणा राख्छन् त्यो पूर्ण रुपमा गलत भएको उनको ठहर छ । उनले बीबीसीसँग यो क्षेत्रमा रहेर आफूले कसरी फाइदा उठाइरहेकी छिन् भन्ने बारे कुराकानी गरेकी छिन् । कर्ली रेको कहानी उनकै मुखबाटः मेरा साथीहरुले मलाई जेड नामले बोलाउँछन् । यद्यपी, ट्वीटर अकाउन्टमा मेरा फलोअर्सले मलाई कर्ली रे नामबाट चिन्छन् । म २३ ...
खुुट्टा बटारेरै विश्व कीर्तिमान, हेर्नुहोस् भिडियो
गिनिज बुकमा नाम लेखाउनका लागि धेरै ठूलो काम गर्नुपदैन रहेछ । बेलायतको लण्डनका एक १४ वर्षे किशोरले आफ्ना खुट्टा फनक्क पछाडि फर्काइदिए र गिनिज बुकमा नाम लेखाइहाले । सन् २०१५ को माइनक्राफ्ट कन्फ्रेन्सका क्रममा उनको क्षमताको आविष्कार भएको थियो । त्यतिबेला उनले खुट्टा बटार्नेे विधामा गिनिज बुकधारी मोसेस लानहामको फोटो देखे ।म्याक्सवेल डे नामका यी किशोरका अद्धितीय रुपमा लचकदार खुट्टा उनका पहिचान हुन् । उनलाई आफुले त त्यसभन्दा बढि नै खुट्टा बटार्न सक्छु ...
६ वर्षे बालकको टाउकोमा ४ इन्चको खाल्डो !
कम्बोडियाको गरिब परिबारमा जन्मेका एक ६ वर्षीय बालकको टाउकोको बिचमा चार इन्चको खाल्डो परेको छ । खाल्डो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले उनकी आमा असाध्य चिन्तित बनेका छिन् । बच्चा हुर्किने क्रमसँगकै टाउकोको खाल्डो गहिरो र फराकिलो बन्दै गएको छ । अहिले यो खाल्डो उनको निधारबाट फैलिएर टाउकोको पछाडि खप्परको फेदसम्म पुगेको छ ।फियक्त्रा पोभकी आमा स्रे ७ महिनाकी गर्भवती हुँदा नै डाक्टरहरुले भनेका थिए कि बच्चाको टाउको असामान्य छ । जन्मिँदा उनको टाउको ...
बिना मेकअप कसरी सुन्दर देखिने ? कसरी छालालाई मुलायम र चम्किलो बनाउने ? यसका काइदा छन् । यद्यपी केहि सर्त भने पालना गर्नुपर्छ । आफ्नो छालाको हेरचाह गरेर मेकअप बिना सुन्दर देखिन सकिन्छ । जति समय कस्मेटिक उत्पादन खरिद गर्न र लगाउन खर्च गरिन्छ, त्यस समय छालाको हेरचाहमा लगाउनुपर्छ । स्तरिय फेसवास प्रयोग गरेर दिनमा दुई पटक राम्ररी अनुहार सफा गरौं । यसले प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गर्छ ।१. दिनमा दुई पटक अनुहार धुने – अनुहार दिनमा ...
हात्ती सबैभन्दा कम सुत्ने स्तनधारी जनावर : अध्ययन
काठमाडौं, फागुन १९ । अफ्रिकाका जंगलीहात्ती सबैभन्दा कम सुत्ने स्तनधारी जनावर रहेको पाइएको छ । वैज्ञानिकहरुले जनावरहरुमा सुत्ने बानी पत्ता लगाउन गरेको अध्ययनमा यो तथ्य पत्ता लागेको हो । भीमकाय शरीरका कारण यो सम्भव भएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । चिडियाखानाका हात्ती भने दैनिक ४ देखि ६ घन्टा सुत्ने गरेको पाइएको छ । तर, आफ्नो प्राकृतिक आवास जंगलमा भने हात्तीलाई दैनिक २ घन्टा सुत्नु पर्याप्त देखिएको हो । हात्तीको सुँडमा लगाइएको एक विशेष उपकरणबाट ५ मिनेट ...
२ वर्षभित्रै भान्साबाट ग्यास हटाउन यसरी हुनेछ सम्भव
१९ फागुन, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार नेपाली उपभोक्ताको भान्साबाट २ वर्षभित्रै एलपीजी ग्यास हटाउने उद्घोष गरे । लोडसेडिङ घटेपनि सबै ठाउँमा नहटेकाले धेरैले यसलाई पत्याएका छैनन् । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि दुईवर्षभित्रै सबै नेपालीको घरमा खाना बनाउने विद्युतीय इन्डक्सन चुल्होसहितका उपकरण भित्रिने बताउँछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी २ वर्षपछि विजुलीका ग्राहकले ग्यास प्रयोग गरिराख्नुपर्ने अवस् ...
पुरुषको तुलनामा महिला किन बढि बोल्छन् ? समाजमा महिलालाई होँच्याउने गरी कुरौटोको उपमा दिइएको हुन्छ । महिलाहरु धेरै बोल्छन् भन्ने गुनासो गर्छन् प्रायः पुरुषहरु । पुरुषको यस्तो आलोचना सुन्दा महिलावादीहरु त्यसलाई महिला हिंसाको रुपमा अथ्र्याउँदा हुन् । तर वैज्ञानिक अध्ययनले समेत महिलाहरु पुरुषको तुलनामा बढि बोल्ने देखाएको छ । ऋाखिर महिलाहरु किन यति धेरै बोल्दछन् ? के तपाइँलाई थाहा छ, महिलाहरु ठ्याक्कै कति बोल्छन् ? वैज्ञानिकहरुका अनुसार महिलाहरु पुरुषको तुलनामा धेरै बोल्नुको जैविक कारण छ । ...
फेसबुक धम्कीको कारण जेल सजाय
न्होमपेन्ह, १३ फागुन । क्याम्बोडियाको स्थानीय एक अदालतले शुक्रबार एकजना २७ वर्षीय युवकलाई दुई वर्षको कारावासको सजायँ सुनाएको छ । फेसबुकबाट क्याम्बोडियाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् सेनलाई धम्की दिएको आरोपमा उनलाई सो जेल सजाय भएको हो । गत हप्ता भएको अदालतको फौजदारी सुनुवाइमा पूर्वी प्रे भेङ्ग प्रान ...
मान्छेको लासबाट बहुमूल्य हिरा, एक कम्पनीको यो अनौठो काम !
१० फागुन । यो कुरा सुन्दैमा पत्यार लाग्दैन । मानिस मरिसकेपछि उसको लासको केही काम लाग्दैन । त्यसैले संस्कार अनुसार जलाउने वा गाड्ने तथा अन्य तरिकाले अन्त्येष्टि गरिन्छ । तर अब भने मान्छेको लास यसरी खेर जाने छैन । मान्छेको लासबाट बहुमूल्य हिरा उत्पादन हुन थालेको छ । एउटा यस्तो प्रविधि तयार भएको छ जसले मानिसको मृत शरीरलाई हिरामा बदल्नेछ । यसमाथि एउटा कम्पनीले काम गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीको नाम अलगोरदान्ज हो । यसको नेपाली अर्थ हुन्छ सम्झना । यो कम्पन ...
अनौठो चिडियाखानाः जहाँ जनावरलाई होइन, मानिसलाई राखिन्थ्यो ८ फागुन । विभिन्न खाले जंगली जनावरलाई राखिने चिडियाखानाको नाम लिँदा नै बच्चाहरु खुसी हुन्छन् । नहोउन् पनि किन रु त्यहाँ अनेकथरीका जंगली चराचुरुंगी तथा जनावर देख्न जो पाइन्छ । तर के तपाइँले एउटा यस्त चिडियाखानाको बारेमा सुन्नुभएको छ, जहाँ जनावर होइन कि मानिसलाई राखिन्थ्यो रु सायद सुन्नुभएको थिएन होला । युरोपमा यस्ता कैयन् चिडियाखान थिए जहाँ मानिसहरुलाई कैद गरेर राखिन्थ्यो । त्यहाँ महिला तथा बच्चाहरुलाई बन्दी बनाएर राखिन्थ्यो । जिउको रंग अत्यधिक का ...
यस्ता सपनाले गर्छन् अशुभ संकेत !
एजेन्सी । रामायण र महाभारत लगायतका विभिन्न धर्म ग्रन्थमा सपनाको अर्थबारे चर्चा गरिएको छ । सपनाले भविष्यमा हुने घटनाको संकेत गर्ने विश्वास छ । केही सपनाले भविष्यमा सुखद संकेत गर्छन् भने कतिपय सपनाले अशुभ संकेत पनि गर्छन् । स्वप्न शास्त्रका उल्लेख भए अनुसार यी १० सपना अशुभ घटनाको संकेत गर्छनः१. यदि सप ...
सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दैछः एमाले सचिव ज्ञवाली युएई । नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेकोे आरोप लगाएका छन् । प्रवासी नेपाली मञ्च युएईको दोस्रो परिषद् भेलालाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले बर्तमान सरकार निर्बाचनबाट भाग्न खोजे व्यापक दबाव सिर्जना गरेर भए पनि निर्बाचन गराइ छाड्ने बताएका हुन् । संबैधानिक आयोगले तयार पारेको स्थानीयतहको पुनर्संरचना प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएकोमा आपत्ति जनाउदै ज्ञवालीले भने, ‘य ...
भ्यालेन्टाइनका लागि भारतबाट ५० लाखको गुलाब ल्याइँदै
२२ माघ, काठमाडौँ । प्रेमको प्रतीक मानिने रातो गुलाब यस वर्षको लागि भारतबाट ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरिने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनले नधानेपछि हरेक वर्ष भारतबाट फूल आयात हुँदै आएको छ । ल्याइएका फूलमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा र अन्य बाँकी देशका मुख्य सहरमा खपत हुने गरेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमारकसजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पुष्पखेती गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भ ...
आज सरस्वती पूजाः कसरी उत्पन्न भइन् सरस्वती ?
१९ माघ, काठमाडौं । आज सरस्वती पूजाको दिन हो । सरकारले आजको दिन शैक्षिक संस्थाहरुमा विदा दिएको छ । सरस्वती ज्ञान-विज्ञान, कला-शिल्प, संगीतकी देवी हुन् । माघ महिनाको शुक्लपक्षको पञ्चमीलाई वसन्त पञ्चमीको रुपमा मनाइन्छ । माता सरस्वतीकी जन्मोत्सव । यसलाई हामी सरस्वती पूजाको रुपमा मनाउने गर्छौं । विधि-विधानपूर्वक पूजा गर्नाले विद्या, वाणी र प्रशिद्धिको आर्शिवाद प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । सरस्वती पूजाको दिन सबै शिक्षण संस्थामा शिक्षक एवं विद्यार्थीले ...
विश्व बजारमा बिकेको ‘द सेम’ नेपाल भित्रियो काठमाडौं १९ माघ । ‘द सेम’ कोरियाको प्रख्यात कस्मेटिक उत्पादन हो । यो कोरियाको होन्क्को कस्मेटिकसको उत्पादन हो। विश्व बजारबाट यसले राम्रो प्रसंसा बटुलेको छ। बेलायत, सिङ्गापुर, जापान, हडकड, मलेसिया, चाइना लगायतका देशमा यसको खुबै चर्चा चलेको छ। द सेमले विश्वबजारमा चर्चा बटुलेपछि नेपाली कस्म ...
६ महिना नपुग्दै जन्मिएका जुम्ल्याहा बालिकाको मृत्युमाथि रोमाञ्चक जित
आमाको पेटमा बच्चा धर्तीमा आउन सरदर ९ महिना लाग्छ । तर, एक आमाले साढे पाँच महिनामै बच्चा पाइन्, त्यो पनि एउटा नभएर जुम्ल्याहा । सुखद आश्चर्य के भने दुवै बच्चा जिवित छन् । यतिबेला आमाको काखमा उफ्रिरहेका जुम्ल्याहा दिदी-बहिनी एन्नाबेल र इमोगेन वेयरको अनुहारमा विजयीभाव झल्किन्छ । नझल्कियोस् पनि किन ? उनीहरुले मृत्युसँगको कठिन युद्धमा चमत्कारिक विजय हासिल गरेका छन् । जन्म हुँदा एन्नाबेल मात्र एक पाउन्डकी थिइन् भने इमोगेन त्योभन्दा अलिकति धेरै थिइन् । ...
कुन बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन ? थाहा पाउनुस् ।
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्व ...
घर बसीबसी इन्टरनेटको सदुपयोग यसरी गर्नुस सूचना प्रविधिको विकाससँगै घर-घरमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न थालेको छ । यद्यपि यसको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो । नेपालमा धेरै मानिसहरु इन्टरनेटमा फेसबुक र यूट्युव हेर्नमै सीमित छन् । जबकि इन्टरनेटमा हामीलाई काम लाग्ने अनगिन्ति चिजहरु पाइन्छन् । यहाँ हामी तपाईंलाई घरमा बसी-बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट सिक्न सकिने कुराहरुको बारेमा अवगत गराउँदैछौ । डान्सअहिलेको जमानामा डान्सको ठूलो क्रेज छ । डान्स सिक्नका लागि धेरै ट्रेनिङ सेन्टरहरु ...
सुगाजस्तो देखिन के मात्र गरेनन् यी महाशयले
यी महाशयलाई बहुला कुकुरले टोकेको होइन । खाली एउटा विचित्रको सौखले यिनलाई पागलजस्तै बनाएको छ । उनी हुन्टे, ड रिचर्ड्स । उनको सौख हो-सुँगाजस्तो अनुहार बनाउने । उनले लामो समयदेखि एउटा सुँगा पालेका छन् । र, आफू पनि सुँगाजस्तै देखिन चाहन्छन् । आफ्नो सौख पूरा गर्न ५५ वर्षका रिचर्ड्सले के मात्र गरेनन्। अनुहारभरी उनले सुँगाको जस्तो रंगीविरंगी भुवा लगाएका छन् र एक सय १० वटा टाटु खोपेका छन् । यसैगरी अनुहारमा उनले ५० वटा ‘पियर्सिङ’ नै गरेका छन् ...
विश्वकै सबैभन्दा लामो ‘लिंगधारी’, पोर्नस्टार बन्ने धोको मेक्सिकोका ५४ वर्षीय रोबर्टो इस्क्वीभेल काब्रेराले जीवनमा कहिल्यै सेक्सको मज्जा लिन पाएका छैनन् । कारण, उनको लिंग यति लामो छ कि कसैले आँट्नै सक्दैन । घुँडासम्म आउने १८.९ इन्चको लिंग बोकेर बाँचिरहेका रोबर्टोलाई कुनै दुःख मनाउ भने छैन । शल्यक्रिया गरेर उनको लिंग घटाउन सकिन्छ भनेर डाक्टरहरुले भनिरहेका छन्, तर उनी चाहँदैनन् । खासमा उनलाई गर्व छ । सन् २००९ मा आफ्नो लिंगको आधिकारिकता पुष्टी गर्ने क्रममा लम्बाई नापिरहेको उनको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएक ...
उकालो लाग्दै राजधानीको तापक्रम
काठमाडौं, माघ ६ । माघ १ गते शुन्यमा झरेको राजधानीको तापक्रम पछिल्ला दिनमा निरन्तर बढिरहेको छ। १ गते यो वर्षकै सबैभन्दा कम ०।४ डिग्री पुगेको राजधानीको न्युनतम तापक्रम बुधबार १।६ डिग्री पुगेको थियो भने बिहीबार २ डिग्री पुगेको छ। १ गते १६ डिग्रीसम्म पुगेको अधिकतम तापक्रम बुधबार २०।२ डिग्री पुगेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका बरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले बिहानैदेखि राम्ररी घाम लागेकाले न्यानो हुँदै गएको बताए। ‘अब केही दिन यस्तै हुन्छ&rs ...
बैतडीको ग्वाल्लेक क्षेत्रः पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तब्य
हेमराज जोशी|| ५ माघ, काठमाडौ । सामान्य चिनारी: ग्वाल्लेक बैतडी सदरमुकामबाट १५ कि मि दक्षिण-पुर्बमा पर्ने प्राकृतिक बिबिधतायुक्त धार्मिक शिखरको नाम हो । यो शिखरको फेदिसम्म नै सडक पुगेकोछ । शिखरलाई पबित्र स्थान मानिएकोले ग्वाल्लेकधाम को नामले यो भेगभरि नै सुपरिचित भएकोछ । यो पबित्र धामको वरपर २७८८.२७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बनक्षेत्रभित्र विभिन्न बनस्पति प्रजातिहरु , बन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, महत्वपुर्ण जडिबुटिहरुको प्राचुर्यता छ । एक अध्ययन अनुसा ...
१० चर्चित हलिउड चलचित्रहरु काठमाडौं, ४ माघ । यी हुन् सबैभन्दा धेरै हेरिएका हलिउडका चर्चित १० चलचित्रहरुः १. ह्यारी पोटरह्यारी पोटर चलचित्र सिरिज हो । ह्यारी नाम गरेको एकजना केटा जोसँग जादुको शक्ति हुन्छ । यो संसारकै अहिले सम्मको सबै भन्दा बढि हेरिएको चलचित्रमा पर्दछ । २. द गड फादरइटालियन–अमेरिकन परिवारको अपराधको कथामा आधारित यो चलचित्रलाई धेरैले मन पराएका थिए । यो चलचित्र पनि सबै भन्दा धेरै हर्ने चलचित्रमा पर्दछ । ३. होम अलोनसन् १९९० मा प्रदर्शन भएको चलचित्र होम अलोन ...
एक दम्पत्ती जो कहिल्यै एक अर्कालाई छुँदैनन अमेरिकाको मिनेसोटामा बस्दै आएका दम्पत्ती जोहाना वाटकिन्स र स्कट आपसमा निकै प्रेम गर्छन, एउटै घरमा बस्छन् तर उनीहरु कहिल्यै आमुन्ने–सामुन्ने हुँदैनन् । दम्पत्ती भएर पनि उनीहरु एक अर्कालाई छुँदैनन, एउटै कोठामा बस्दैनन, यहाँसम्म कि, पतिको श्वास पनि पत्नीका लागि मृत्युतुल्य हुन्छ तर पनि आपसमा अगाढ प्रेम गर्छन् । यो दम्पत्तीको यस्तो बाध्यता एउटा रोगका कारण निम्तिएको हो । जोहानालाई रोग प्रतिरोधी क्षमतासँग सम्बन्धित एक दुर्लभ रोग लागेको छ । चिकित् ...
नायब सुब्बा तयारीका दुई पुस्तक
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात् नायब सुब्बाको विज्ञापन खुलाइसकेको छ । लोकसेवा परीक्षा पास गरी नायब सुब्बा बनेर सरकारी जागिर खाने ध्याउन्नमा रहेकाहरु अहिले परीक्षाको तयारीमा व्यस्त छन् । तपार्इ पनि नायब सुब्बाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने परीक्षा तयारी कसरी गर्ने रु भन्ने जानकारी सहितका उपयोगी दुई पुस्तक बजारमा आएका छन् । लोकसेवा आयोगका विभिन्न तहका परीक्षा तयारी सम्बन्धी पुस्तकका लेखक तथा लोकसेवा त ...
यस्ता छन् तिलको लड्डुका फाइदा
काठमाडौं । आज माघे संक्रान्ति, घरघरमा तिलको लड्डु खाने दिन । तिलको लड्डु अर्थात् तिलौरी भन्ने बित्तिकै धेरैको मुख रसाउँछ । तिलको लड्डु स्वादिलो त हुन्छ नै, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै गुणकारी मानिन्छ । हेर्दा साना देखिए पनि तिलौरी खानुका फाइदा अनेक छन् । त्यसैले हाम्रो समाजमा परापूर्व कालदेखि माघे संक्रान्तिको अवसरमा तिलको परिकार खाने चलन छ । तिलको परिकार खानुका फाइदा यस्ता छन्ः खराब कोलेस्ट्रोल हटाउँछ तिलमा मोनो स्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हुन्छ, ज ...
बलिउड क्यालेन्डरमा सन्नीदेखि आलियासम्मको बोल्ड अवतार
बलिउडका ख्यातिप्राप्त फोटोग्राफर डब्बु रतनानीको क्यालेन्डर रिलिज भएको छ । क्यालेन्डरमा २४ जना बलिउड स्टारका तस्वीर संग्रहित छन् । क्यालेन्डरका लागि सन्नी लियोनी, विद्या बालन, आलिया भट्टलगायत अभिनेत्रीले बोल्ड फोटोसुट गराएका छन् । सनी लियोनी सुनौलो र कालो ज्याकेटमा बिन्दास देखिएकी छिन् । उनको वक्षस्थलको मध्यभाग खुल्ला छ । यसैगरी आलिया स्वीमिङ पुलमा देखिएकी छिन् भने विद्यालय ज्याकेट लगाएकी छिन् । क्यालेन्डरमा अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शाहरु ...
सकसै सकसमा नेपाली चलचित्र
पछिल्लो सयम निक्कै सफल मानिएको चलचित्र छक्का पञ्जाको प्रर्दशनसँगै नेपाली चलचित्र बजारमा पाइरेसीको चर्चा चुलिएको छ । यसअघि भुवन केसीको सफल मानिएको चलचित्र ड्रिम्स पनि पाइरेसीको मारमा परेको थियो । जसले गर्दा निर्माताका ओठ तालु सुकेका छन् । तर यसको प्रमुख जिम्मेवार को हो त ? गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । देश विदेशका हलहरुमा छक्का पञ्जा चलिरहेको बेला यसको पाइरेसी भयो । जसले गर्दा आशा गरिए अनुसारको दाम हात पर्न सकेन । पाइरेसीका कारणहरु नेपाली ...
रामेछापका ७४ वर्षीय रामबहादुर कक्षा ८ मा पढ्दै
रामेछाप, पुस २५ – पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने प्रेरणा रामेछाप गर्जाङ–२ धौले निवासी रामबहादुर कार्कीबाट लिन सकिन्छ । ७४ वर्षको उमेरमा उहाँ नातिनातिना उमेरका केटाकेटीसँगै चटेश्वरी उच्च मावि कक्षा ८ मा नियमित विद्यालय जानुहुन्छ । र नेपाली अंग्रेजीलगायतका विषय बिषय रुचीका साथ पढ्नुहुन्छ । इ ...
हलिउड अवार्डमा प्रियंकाको आकर्षक पहिरन
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा रेड कार्पेटमा सधै नै आकर्षक देखिन्छिन् । पहिरनदेखि स्टाइलको मामालामा उनी सधै सजग छिन् । बलिउडका चर्चित अवार्डमा भाग लिइरहेकी प्रियंका अहिले हलिउडका चर्चित अवार्डहरुमा सहभागी भैरहेकी छिन् । अमेरिकाको लस एन्जल्समा आयोजित ‘गोल्डेन ग्लोब्स २०१७’को रेड कार्पेटमा बलिउड सुन्दरी हट बनेर पुगिन् । अवार्ड आयोजना हुनु भन्दा २ दिन अगाडि चोपडा कस्तो पहिरन लगाउने भन्ने बिषयमा चिन्तित थिइन् । राल्फ लाउरेनले तयार पारेको पहि ...
तीनवटा स्क्रिन भएको ल्यापटप निकट भविष्यमै
उपभोक्ताले निकट भविष्यमै तिनवटा स्क्रिन भएको ल्यापटप प्रयोग गर्न पाउने छन् । गेमिंग कम्प्युटर निर्माता कम्पनी रेजरले अमेरिकाको लस भेगासमा आयोजित कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स शो मा तीनवटा स्क्रिन भएको ल्यापटप निर्माण गर्ने परियोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रोजेक्ट भेलेरी नामक उक्त परियोजनाको अवधारणा अनुसार कम्पनीले फोर के रिजोलुसनयुक्त तीनवटा स्क्रिन भएको विश्वकै पहिलो ल्यापटप तयार पार्नेछ । ल्यापटपमा सेन्ट्रल डिस्प्लेभन्दा अलग थप दुईवटा स्क्रिन स्लाइड रहन ...
विदेशमा रहदै आएका आफन्तसित सस्तोमा कुरा गर्ने तरिका ! काठमाडौं, पुस २३– अर्घाखाँचीको खन बडाचौरका रविलाल खनाल १३ वर्ष अघि २५ वटा खाम बोकेर युएई जानुभएको थियो । रोजगारीका लागि गएका रविलालले चिठ्ठी लेखेर तिनै खाममा परदेशका सुख दुःख परिवारसम्म पठाउनु हुन्थ्यो । त्यस्ता चिठ्ठी पत्र घरपरिवार, आफन्त र छरछिमेकका खबर बोकेर ओहोर–दोहोर हुन्थे । तर चिठ्ठी ओहोर दोहार हुन लामो समय लाग्थ्यो । खबर थाहा पाउन महिनौं सम्म कुर्नु पथ्र्यो । कतिपय समय त चिठ्ठी पत्र भन्दा पहिले मान्छे आइपुग्थे । एक दशक अघिसम्म ...
अतिथि कलाकारसँग बोल्दाबोल्दै टिभी प्रस्तोताको स्तन फुत्त बाहिर निस्किएपछि................
टेलिभिजनमा लाइभ कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा एक स्पेनिस प्रस्तोता ‘वार्डरोव मालफङ्सन’ को शिकार बनेकी छिन् । अतिथि कलाकारसँग बोल्दाबोल्दै उनको स्तन फुत्त बाहिर निस्केको लाखौं दर्शकले टेलिभिजनमा देखे । बार्सिलोनाकी ४४ वषिर्या सोनिया मोनरेले लगाएको पहिरन नै निकै दयनिय थियो । पेटसम्म काटिएको कालो गाउनमा उनको वक्षस्थलको ठूलो हिस्सा पहिलेदेखि नै खुल्ला थियो । सोनिया कुराकानीमा मग्न रहँदा उनको गाउन सरेर एकापट्टकिो स्तन बाहिर निस्कियो । शुरुमा ...
ओम पुरीको जीवनकथाः मजदुरदेखि अभिनेतासम्म
अभिनेता ओम पुरीको शुक्रबार हृदयघातबाट मृत्यु भयो । उनी ६६ वर्षका थिए । ओम पुरीलाई भारत सरकारको तर्फवाट नागरिकलाई दिने चौथो सवैभन्दा सम्मानित पुरस्कार पद्यश्री दिइएको थियो । उनैसाग जोडिएका केही रोचक जानकारी यस्तो छः – पटियालमा जन्मिएका ओम पुरीको पूरा नाम ओम राजेश पुरी थियो । सन् १९५० अक्टोबरमा उनी पञ्जावी परिवारमा जन्मिएका थिए । उनको बुबा भारतीय रेल्वे तथा आर्मीमा कार्यरत थिए । – ६ वर्षको उमेरमा ओम पुरीले चियाको कप धुने काम गर्थे । उनक ...
विचित्र देशः जहाँ हत्या गरेवापत सरकारले दिन्छ पुरस्कार मानिसको हत्या गर्नु ठूलो अपराध हो, जसको गम्भीर सजायँ भोग्नुपर्छ । कानुनले मानव हत्यालाई सख्त रुपमा बन्देज गरेको हुन्छ र सरकारले हत्यारलाई खोजीखोजी पक्रिएर जेलमा हाल्दछ । जन्मकैदसम्मको सजायँ छ, हामीकहाँ । तर यो दुनियाँमा यस्तो देश पनि छ, जहाँ सरकारले नै मानिसको हत्या गर्ने छुट दिन्छ र हत्यारालाई सजायँ दिनुको साटो उल्टै पुरस्कार दिन्छ । हो, हत्यारालाई दण्डको साटो पुरस्कार दिने व्यवस्था एसियाली मुलुक फिलिपिन्समा रहेको छ । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड् ...
सिएनएनको नजरमा नेपालका ५ जिम्मेवार होटल काठमाडौं, पुस २१ – नेपाल विदेशी पर्यटकको आकर्षणको रुपमा रहँदै आएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालको पर्यटन तथा पर्यटकीय सम्भावना र गन्तव्यका बारेमा समाचार सम्प्रेशण गर्ने गरेका छन् । यही क्रममा अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले नेपालका पाँच जिम्मेवार होटलका बारेमा फिचर प्रकाशन गरेको छ । सिएनएनले नेपाललाई हिमालको स्वर्गको रुपमा परिभाषित गर्दै पाँच जिम्मेवार पर्यटक होटल बारे लेखेको हो । पत्रकार जेनी मार्शले पर्यटकलाई जिम्मेव ...
करमा कलाकार बनेकी गौरी मल्लसँग रगतले लेखिएका प्रेमपत्रका कुरा
काठमाडौं, पुस २० – नेपाली चलचित्रको अघिल्लो पुस्ताका दर्शकका लागि अत्यन्तै प्रिय नाम हो, गौरी मल्ल । नेपाली सिने नगरीमा उनको अभिनयको प्रशंसा उच्च छ । काठमाडौं बाँसबारीमा जन्मेकी गौरीले २०४३ सालमा सन्तान चलचित्रबाट आफ्नो कलाकारिता सुरु गरेकी हुन् । त्यसयता गौरीले दर्जनौँ चलचित्रमा आफ्नो सशक्त भूमिका निभाएकी छन् । कलाकारिता यात्राको बीचमा केही समय पलायन भए पनि उनी फेरि नेपाली चलचित्र र कलाकारीतामा फर्केकी छिन् । उनको आगमन पनि सुखद नै भएको छ । ...
ओशोभक्त स्वामी भन्छन्ः धोती र टोपी दुबै होस् ! आँप र स्याउ दुबै फलोस् ! नेपाल चीनभन्दा राम्रो थियो,
२० पुस, सिड्नी । नागार्जुनस्थित ओशो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक-समावेशी प्रणाली तत्काल आवश्यक नरहेको बताएका छन् । नेपालमा राजनीतिक अराजकता बढेको र नेपाली जनतामा चरम निराशा छाएको उनको विश्लेषण छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बेला स्वामी आनन्द अरुणको यस्तो राजनीतिक अभिव्यक्ति आएको हो । उनी हाल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीसँगै अष्ट्रेलिया भ्रमणमा छन् । नेपाली अगुवाहरुको बाक्लो उपस्थि ...
अक्षयले चर्को पारिश्रमिक मागेपछि रोकियो ‘क्रयाक’को छायांकन
२० पुस, काठमाण्डौ । बलिउडका चल्तीका नायकले महंगो पारिश्रमिक मागिदिन्छन् । साहरुख खान, सलमान खान, आमिर खानले त महंगो पारिश्रमिक मात्र लिदैनन्, मुनाफाको प्रतिशत पनि लिन्छन् । यसैले, यी ३ खानलाई लिएर हरेक निर्माताले चलचित्र बनाउन सक्दैनन् । ३ खानपछि अहिले नायक अक्षय कुमार पनि महंगो पारिश्रमिकका कारण चर्चामा छन् । चलचित्र ‘जोली एलएलबी २’मा उनले दिनको १ करोड लिएर काम गरेका थिए । उनलाई यो चलचित्रबाट ४५ करोड मिलेको थियो । उनै, अक्षयले ...
समाचार वाचन गर्दा गर्दै पेन्टी देखिएपछि।।।।।।।।
१९ पुस,काठमाण्डौ । इटालीकी एक समाचारवाचिकाले समाचार वाचन गरिरहेकै बेला आफ्नो भित्री वस्त्र देखाएकी छिन् । उनले देखाएको भित्री वस्त्र पेन्टी हो । यद्यपि उनले जानाजानी पेन्टी देखाएकी होइनन् । इटालियन टेलिभिजन च्यानल टीजी फाइभमा रात्रीकालीन समाचार बुलेटिन प्रस्तुत गरिरहेकी समाचार वाचिका कोस्टान्जा कालाब्रिजले भित्री वस्त्र देखाएकी हुन् । लाइभ समाचार वाचन गरिरहेको बेलामा उनी आफैँ समाचारको विषय बनिन् जुन उनी र उनको करियरका लागि अत्यन्तै लज्जास्पद विषय ...
आमिर खानदेखि संजय दत्तसम्मः कपिल शर्माको शोमा कहिले देखिएनन् ? यी १० सेलिब्रिटी
पुस १९, एजेन्सी । कपिल शर्माको शो बलिउड फिल्मको प्रोमोशनका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्लेटफर्म बनिसकेको छ । सलमान खान, शाहरुखदेखि अमिताभ बच्चनदेखि अक्षय कुमारसम्म बलिउडका थुप्रै चर्चित स्टार्स यो कार्यक्रममा आफ्ना फिल्मको प्रचार गरिसकेका छन् । तर सेलिब्रिटीको यो भिडमा यस्तो नाम पनि छ जो अहिलेसम्म कपिलको कुनै पनि कार्यक्रम (कमेडी नाइट्स विद कपिल’ र ‘द कपिल शर्मा शो’) मा देखिएका छैनन् । उदाहरणका लागि आमिर खानलाई लिनुहोस् । सन् २०१३ देख ...
यी समाचार वाचिकाले अकस्मात देखाइन् भित्रीवस्त्र (भिडियो )
कार्यस्थलमा आइपर्ने केही अप्रीय दुर्घटना तथा नमीठो अनुभवको कुनै उदाहरण दिनुछ भने सायद यी सुन्दरी समाचार वाचिका काफी छिन् । इटालीकी यी समाचार वाचिकाले दर्शकहरुलाई वास्तविक न्यूज फ्लास प्रस्तुत गरिन् । त्यो ब्रेकिंग न्यूज भने उनी आफैं थिइन् । लाइभ समाचार वाचन गरिरहेको बेलामा उनले अकस्मात आफ्नो भित्री वस्त्र देखाउन पुगिन् । छोटो स्कर्ट लगाएकी ती समाचार बाचिकाले गोडा फट्याउँदा भित्री वस्त्र देखिएको उनलाई पत्तै भएन । डेस्कमुनि गोडा रहेका कारण दर्शकले ...
बिहेको अनौठो शर्त: प्रेमीले जुनतारा होइन, व्हेल माछाको दाँत झार्नुपर्छ १८ पुस काठमाण्डौ । बिहेअघि प्रेममा प्रायः प्रेमीहरुले चन्द्रमा तथा तारा झारिदिने कुरा गर्दछन् । तर दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ छ, जहाँ बिहेका लागि केटाहरुले केटीका अगाडि जुनतारा होइन माछाको दाँत झार्नुपर्छ । माछाका दाँत झार्न नसकेमा केटाले चाहेकी बधु पाउँदैन । फिजीमा चल्दै आएको तबुआ नामको उक्त परम्पराअनुसार आफूले बिहे गर्न चाहेको केटीको बुवालाई व्हेलमाछाको दाँत दिएमात्र केटाले उक्त केटीसँग बिहे गर्न पाउँछ । ‘एउटी केटीसँग बिहे गर्नका लागि समुद ...
महिला सहचालकका थरिथरी अनुभव: केटी पनि खलासी भनेर हाँस्छन् ।
काठमाडौं, पुस १८ । ‘नयाँ बसपार्क, बसुन्धरा, महाराजगन्ज।।।।’ भन्दै गाडीको ढोका ढ्यापढ्याप पार्ने पुरुषको भिडमा महिला अनुहार रु देख्नेहरु अचम्म मान्छन् । ‘लौ केटी पनि खलासी’ उनीहरु आपसमा कुरा गर्छन् । ‘अझ विद्यालय र कलेजका विद्यार्थी त हामीलाई देखेर मरिमरि हाँस्छन्’ महानगर यातायातमा सहचालकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएकी ईसिका ९सीता० मगरले भन्नुभयो । उहाँले पहिला चक्रपथ गुड्ने एउटा गाडीमा सहचालकको रुपमा काम गर्दा तलबै ...
१९९६ मा महाकाली यसरी कब्जा गरेको थियो भारतले । किन राष्ट्रघाती भनिन्छ महाकाली सन्धिलाई ?
पुस १८, काडमाण्डौ ।२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो । एमाले सरकार विघटनसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’मा हस्ताक्षर भयो । २०५२ माघ १५ (१९९६ जनवरी २९) ...
नयाँ बर्षको पहिलो दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ७ काम १७ पुस, काठमाण्डौ। आजबाट सन् २०१७ साल अर्थात नयाँ अंग्रेजी बर्षको सुरुवात भइसकेको छ । यस अवसरमा धेरैले नयाँ कामको सुरुवात, नयाँ संकल्प, केही विशेष काम गरेर यस दिनलाई बिशेष बनाउने गरिन्छ । यद्यपी, यस्ता सात काम छन्, जुन तपाईले आजको दिन नगर्नु भए पुरै बर्ष राम्रो बन्नसक्छ । खाली हात – नयाँ बर्षक ...
श्रीमती प्रहरीसँग लागेपछि राजदूतको ज्यान गयो
१६ पुस, काठमाडौं । ब्राजिलमा रहेका गि्रसका राजदूत किरिआकोस अमिरिदिस सोमबारदेखि बेपत्ता भए । आफ्ना श्रीमान कार लिएर निस्किएको र सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उनकी पत्नीले प्रहरीमा रिपोर्ट लेखाइन् । विहीबार राजदूत अमिरिदिसको शव रियो दि जेनेरियो शहरभन्दा बाहिर भागमा सडकको फ्लाइओभर मुनि जलेको कारभित्र भेटियो । ब्राजिलमा कूटनीतिज्ञहरुको हत्याले सुरक्षाकर्मीलाई चिन्ता बढाइरहेको थियो । तर, यो घटनामा अन्ततः प्रहरीकै संलग्नता भेटियो, जसको प्रेम सम्बन्ध उनै राजद ...
‘भर्जिन’ पार्टनर रुचाउदैनन् आजकालका युवायुवती !
एक नयाँ शोधका अनुसार आजकालका युवायुवती ‘भर्जिन’ पार्टनरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहँदैनन् । नटिंगम, ब्रिस्टल र स्वानजी युनिभर्सिटीका अनुसन्धाकर्ताले यस्तो बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार आजकालका एक्ला युवा यस्तो पार्टनरको खोजीमा हुन्छन् जो अनुभवी हुन्छन् । यो अनुसन्धान जर्नल अफ सेक्स रिसर्चमा सार्वजनिक गरिएको छ जस अनुसार महिला वा पुरुष दुबै ‘भर्जिन’ सँग सम्बन्ध सुरु गर्न डराउँछन् । यद्यपी, उनीहरु त्यस्ता मानिसहरुसँग पनि सम्बन ...
डब्लुडब्लुईको करियरमा एकपटक मात्र हारेका अण्डरटेकरको काँक्रोले सातो लान्छ !
अण्डरटेकरलाई काँक्रोसँग डर लाग्छ, थाहा पाउनुस् रहस्यमयी उनका रोचक तथ्य डेडम्यान भनिने अण्डरटेकर रोयल रंबलमा धमाकेदार प्रवेश गर्दैछन् । अण्डरटेकरको जीवन सधैं रहस्यमयी रहेको छ । उनको जीवनसँग जोडिएका केही तथ्यबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ । – सबैभन्दा डरलाग्दो रेसलरमध्येका एक अण्डरटेकरलाई एउटा कुरासँग मात्र डर लाग्छ, त्यो हो– काँक्रो । – डब्लूडब्लुईलाई दिएको यो अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘मैले यदि कतै काँक्रो देखें भने, म अर ...
उपभोक्ताले मन पराएनन् महंगा स्मार्टफोन !
स्मार्टफोनको दुनियाँमा एप्पलको जादू सन् २०१६ मा केही घटेको देखिएको छ । सन् २००७ मा आइफोन लन्च भएपछि एप्पलले स्मार्टफोनको दुनियाँमा यस्तो जादु गरेको थियो कि, मानिसहरु एप्पलका प्रडक्टहरुका लागि रातभर लाइनमा उभिएर पर्खन्थे । तर स्मार्टफोनको दुनियाँका लागि सन् २०१६ यदी स्मरणीय बन्यो भने सामसुंगको ग्यालेक्सी नोट सेभेनको ब्याट्रीको समस्या कारण बन्यो, जसले विश्वभर एक नयाँ समस्या खडा गरिदियो । गिजबटका अनुसार कुनै स्मार्टफोनको हार्डवेयरमा समस्या आयो भने क ...
यौन सम्बन्ध राख्न चाहने महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार !
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ । १. महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् ...
जति धेरै सेक्स गर्यो, त्यती धेरै ‘मेमोरी पावर’ !
महिलाहरूले जति धेरै सेक्स गर्‍यो त्यति धेरै दिमागको ‘मेमोरी पावर’ बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययनले महिलाहरूलाई फाइदा हुन थालेको दाबी गरिएको छ । यो नयाँ अध्ययन मान्ट्रियलको मैकगिल यूनिवर्सिटीको रिसर्चसले धेरै सेक्स गर्ने महिलाको मेमोरी पावर बढेको दाबी गरेको हो । अध्ययनका अनुसार सेक्सपछि महिलालाई धेरै शब्दहरू दिमागमा रहीरहने जनाइएको छ । धेरै सेक्स गर्दा पीवीआई ९पेनिस वजाइनल इंटरकोर्स० एक स्वस्थ जवान महिलाको मेमरी फंक्शनलाई ...
पोष्टपेड प्रयोगकर्ताले रिचार्ज सिस्टमबारे जान्नुपर्ने १० कुरा !
५ पुस, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको पोष्टपेड चलाउनेहरुलाई बिलिङ प्रणाली नबुझ्दा धेरै समस्या पर्छ । क्रेडिट रकम, रिचार्ज सिस्टम लगायतका बारेमा धेरै जना अनविज्ञ जस्तै छन् । यसका केही महत्वपूर्ण कुराहरु केही छन्, जसले यसबारे बुझ्न सजिलो हुनेछ । नेपाल टेलिकमले मोवाइल सेवाको लागि प्रि-पेड र पोष्ट पेड गरी दुईवटा बिलिङ प्रक्रिया अपनाएको छ । प्रि-पेड बिलिङ प्रक्रिया अन्तर्गत कल गर्दा समयमा नै कुल बिल रकम हिसाब गरी ब्यालेन्स रकमबाट कट्टा गरिन्छ । १. कहिले तय ...
ट्वीटरले पनि ल्यायो लाइभ भिडियो ब्रोडकास्ट
माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरले नयाँ लाइभ भिडियो ब्रोडकास्ट फिचर ल्याएको छ । पेरिस्कोपमा आधारित उक्त फिचर एप्पल तथा एन्ड्रोइड दुबै स्मार्टफोनमा उपलब्ध रहेको र अब प्रयोगकर्ताले आफ्ना फलोअर्ससँग आफ्ना लाइभ भिडियो प्रत्यक्ष रुपमा शेयर गर्न सक्ने बताइएको छ । विश्वमा के ट्रेण्डिंग भैरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन ट्वीटर सबैभन्दा लोकप्रिय माध्यम भैरहेको अवस्थामा ट्वीटरको लाइभ भिडियो ब्रोडकास्ट फिचर निकै लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यात्मक रुपमा ट ...
सुन्दर युवती ट्राफिक हुने देश !
५ पुस, काठमाडौं । तपाईले सुन्दर युवती देख्नु भएको होला। उनीहरूको इच्छा के हुन्छ त्यो थाहा नहुन सक्छ। पक्कै सोच्नु भएको होला सुन्दर युवतीहरू मोडल, कलाकार वा अन्य केही बन्न रुचाउँछन्। तर एउटा यस्तो देश छ जहाँका सुन्दर युवतीहरू कलाकार मोडल बन्न छोडेर ट्राफिक प्रहरी बन्न रूचाउँछन्। क्रुर तानाशाह किम जोग-उनको देश उत्तर कोरियाका सुन्दर युवतीहरू ट्राफिक प्रहरी बन्न रूचाउँछन् किनकी, यस कम्युनिस्ट देशमा यस्तो जागिरका लागि सुन्दर युवतीहरूलाई छानिने गरेको अ ...
काउलीमा भेटियो डरलाग्दो सर्प !
यती बेला यो तस्विर सोसल मिडियामा निकै भाइरल बनिरहेको छ । जुन तस्विर हेर्दा काउली भित्र डर लाग्दो सर्प गुडुल्की परेर बसेको छ र जो कोहीको पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । ह्वाट्सएपमा धेरैजसोले यो तस्बिर सेयर गरिरहेका छन् । काउली भित्र साना किरा त हामी सबैले देखेकै छौं । तर के तपाईंले काउलीभित्र सर्प देख्नुभएको छ ? भाइरल भइरहेको काउलीभित्र सर्प रहेको यो फोटो निकै डरलाग्दो छ । यद्यपी भारतीय संचार माध्यमले निकै प्राथमिकताका साथ प्रवाह गरेको उक्त तस्विरको समाचा ...
ड्युटीमा निदाएमा वा चुरोट पिएमा भूतले थप्पड हान्ने
राजस्थानका कैयन् ठाउँ तथा भवनहरु आफ्नो भुताहा कहानीका कारण दुनियाभर चर्चित छन् । तर राजस्थानमा एउटा यस्तो भवन पनि छ जहाा यदि कोही पाले ड्युटीका क्रममा निदायो भने उसलाई भुतले थप्पड हान्छ । राजस्थानको कोटास्थित ब्रजराज भवन प्यालेस आफ्नो अनौठो इतिहासका लागि आजपनि चर्चित छ । १८० वर्ष पूरानो यो भवनलाई सन् १९८० मा ऐतिहासिक भवन घोषित गरिएको थियो । तर यहाँ आउने मानिसलाई अहिलेपनि यो भवन निकै भुताहा रहेको अनुभव हुन्छ । भनाई अनुसार यो होटलमा मेजर बर्टन नामक ...
संसारकै एकमात्र डिभोर्स होटेल, जहा छिर्नासाथ हुन्छ लोग्नेस्वास्नीको डिभोर्स
यो दुनियामा यस्तो आश्चर्यजनक होटेल पनि छ जहाँ छिर्नासाथ श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स हुन्छ । सोही कारण यो होटेलको नामै डिभोर्स होटेल रहन गएको छ । नेदरल्याण्डमा रहेको यो होटेल सुन्दरताले भरिपूर्ण छ । होटेलमा डिभोर्सका लागि प्रसस्तै वकिलहरुको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यो एउटा यस्तो होटेल हो जहाँ केवल विवाह गरेका लोग्ने स्वास्नीलाई मात्र प्रवेश दिइन्छ । उनीहरु होटेलभित्र छिर्दा लोग्नेस्वास्नी हुन्छन् तर जब होटेलबाट बाहिर निस्किन्छन् तब उनीहरुको डिभोर्स ...
आकाशबाट शहरभरी स्याउको वर्षाले तनाब सिर्जना गरेपछी
आकासबाट पानी तथा हिउँ वर्षिएको कुरा त कुनै समाचारको विषय भएन । तर जब आकासबाट स्याउको वर्षा हुन्छ त्यो पक्कैपनि खबर बन्दछ । हो बेलायतको कन्वेन्ट्री सहरमा स्याउको वर्षा भएपछि सबै अचम्ममा परे । एकाबिहानै स्याउ वर्षिन थालेपछि सहरबासीहरु आश्चर्य चकित भए । केही वर्ष अघिको यो घटनामा आकासबाट वर्षिएका स्याउले सहरलाई अस्तव्यस्त बनायो । बाटोमा स्याउ थुप्रिएपछि ट्राफिक जाम भयो । भुइँमा यत्रतत्र स्याउको थुप्रो देखिन थाल्यो । निकै ठूलो परिमाणमा यसरी आकासबाट स् ...
जापानी प्रेम उद्योगमा पिटाइ खाएर प्रेम गर्छन् प्रेमिकाहरु
प्रेम प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरु अनेकथरीका तरिकाहरु प्रयोग गर्दछन् । तर एउटा ठाउँ यस्तो पनि छ जहाँ महिलाहरु पुरुषहरुलाई बाँधेर हतियारले तड्पाई तड्पाइ कुट्छन् र प्रेम गर्दछन् । जापानमा पछिल्ला दिनमा अनौठो सेक्स उद्योगको प्रसार भएको छ । यो उद्योगको नाम यसको काम अनसारको छ । प्रेम उद्योगले ठूलो परिमाणमा युवाहलाई आकर्षित गरिरहेको छ अहिले । जापानमा धेरै पुरुषहरु अविवाहित रहन चाहन्छन् । तर उनीहरुले अहिले यस्तो सेवा उपभोग गर्न लालायित छन् जुन सुन्दा नै ...
डिभोर्स होटेलः जहाँ छिर्नासाथ लोग्नेस्वास्नीको डिभोर्स हुन्छ यो दुनियामा यस्तो आश्चर्यजनक होटेल पनि छ जहाँ छिर्नासाथ श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स हुन्छ । सोही कारण यो होटेलको नामै डिभोर्स होटेल रहन गएको छ । नेदरल्याण्डमा रहेको यो होटेल सुन्दरताले भरिपूर्ण छ । होटेलमा डिभोर्सका लागि प्रसस्तै वकिलहरुको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यो एउटा यस्तो होटेल हो जहाँ केवल विवाह गरेका लोग्ने स्वास्नीलाई मात्र प्रवेश दिइन्छ । उनीहरु होटेलभित्र छिर्दा लोग्नेस्वास्नी हुन्छन् तर जब होटेलबाट बाहिर निस्किन्छन् तब उनीहरुको डिभोर्स ...
'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो'
२४ मङ्सिर, मेलवर्न । सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने हालै अष्ट्रेलियामा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानिसको तनाव, चिन्ता र खुसीबीचको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।युनिभर्सिटी अफ मेलवर्न र मोनास युनिभर्सिटीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालले एक अर्कालाई सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग गरेकाले मानसिक तनाव कम गराएको हुन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । नकार ...
फेसबुकको ‘बर्थडे इन्भिटेशन’मा १२ लाख पाउना आउन तयार
फेसबुकमा पोष्ट गर्ने समयमा यदि फ्रेण्ड्स ओन्लीको सट्टा पब्लिक हुँदा कहिले काहीँ साह्रै दुःख दिन्छ । मेक्सिकोमा एक पिताले आफ्नो छोरीको १५ औं जन्मदिनको निम्तो दिँदै एक भिडियो फेसबुकमा पोष्ट गरे । १२ लाखले कन्र्फम गरे कि उनीहरु पार्टीमा आउन तयार छन् । पब्लिक सेटिङमा भिडियो पोष्ट हुँदा ८० लाखले शेयर गरे । र, भाइरल भयो । यति मात्र होइन, अनगिन्ती यो भिडियोको कपी बनाइएको छ र, मीम बन्यो । रुबी इबारा ग्रेसियाका पिता क्रेसेन्सियोले सबैलाई जन्मदिनमा निम्तो ...
खेलाडी सवार विमान दुर्घटना, जसमा सकियो खेलाडीको इहलीला
१५ मंसिर, काठमाडौं । ब्राजिलको स्थानीय फुटबल टिम बोकेको विमान कोलम्बियाको मेडलिनमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ७६ खेलाडीको ज्यान गएको छ । विमानमा ८१ जना सवार थिए जसमध्ये ५ जना बाच्न सफल भएका छन् । उक्त विमानमा चापाकोएन्सी टिमका फुटबल खेलाडी साउथ अमेरिका कप इन्टरनेशनलको फाइनल खेल्न जाँदै थिए । खेलाडीको हवाई दुर्घटनाको लामो लिस्टमा चापाकोएन्सी टिम दुखद रुपमा थपिएको छ ।६ खेलाडी टिम जो हवाई दुर्घटनाका शिकार भए : १. लोकोमोटिव यारोस्लेवल आइस हक्की टिम-२०११ रु ...
संसारकै जेठी महिला आफ्नो १ सय १७ औं जन्मदिन मनाउँदै
१४ मंसिर, रोम । संसारकी सबैभन्दा जेठी व्यक्ति इम्मा मोरानाले मंगलबार आफ्नो १ सय १७ औं जन्मदिन मनाउँदै छिन्। साथीभाइको जमघट र गीत नृत्यसहिको कार्यक्रम राखेर उनको जन्म दिन मनाउन लागिएको हो। इटालीको सिभियास्कोमा सन् १८९९ मा जन्मेकी मोरानो गत मेमा सुसान मुसहात जोनको निधनपछि संसारकै जेठी व्यक्ति बनेकी थिइन्। उनको परिवारिक स्रोतले मोरानोको लामो आयुका पछाडि उनको खानाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेका बताएको छ। मोरानोले हरेक दिन तीन वटा अण्डा खान्छिन्। उनले २० व ...
औंलाबाट यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यौनसन्तुष्टि !
डा. राजेन्द्र भद्रा मेरी श्रीमती लिंगभन्दा पनि औंलाबाट यौनसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्छिन् । नियमित औंलामार्फत यौन क्रियाकलाप गर्दा कुनै नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन ? महिलाले कसरी यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् ? मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र चारवटा चरण १. एक्साइटमेन्ट फेज, २. प्लाटो फेज ३. अर्गाज्म फेज र ४. रिजोलुसन फेजबाट गुज्रन्छ । प्लाटो फेजमा भएको यौन निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सके एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जहाँ व्यक्ति यौन तनावबाट मु ...
होसीयार फेसप्याकले छाला चाउरि पर्ला नि !
अनुहार क्लिन नगरी सीधै फेसप्याक लगाउनाले छाला धेरै ड्राई हुन्छ । धेरै ड्राई भएपछि छाला चाउरिने खतरा रहन्छ । त्यसैले क्लिन्जिङपछि क्रिम प्रयोग गरेर मात्रै फेसप्याक लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । फेसप्याक लगाएर छालालाई बढी मोसनमा ल्याउँदा चाउरी पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले यो अवस्थामा छाला तन्किने गरी हाँस्नु र गफ गर्नु उपयुक्त होइन । फेसप्याक रहुन्जेल छालालाई रिल्याक्समा छोडिदिनुपर्छ । फेसप्याक छालामै सुकेर कक्रक्क भएपछि रगडेर पखाल्नु पनि चाउरीपनलाई स्वागत ...
कपडामा टाँसिएको चुइगम हटाउने पाँच उपायहरु चुइगम चपाउने धेरैको बानी हुन्छ । तर, चुइगम चपाउनु जति आनन्ददायक हुन्छ, त्यसको रस सकिएपछि व्यवस्थापन गर्नु त्यति नै झन्झट हुन्छ । यस्तोमा धेरैले चुइगम जहाँ पायो त्यहीँ फाल्ने या टाँसेर छाडिदिने गर्छन् । यस्तो चुइगम कपडामा टाँसिएमा हटाउन भने निकै नै समस्या हुन्छ । यसलाई कपडाबाट हटाउने तरिका थाहा नहुँदा कपडा नै बिग्रने सम्भावना पनि हुन्छ । टाँसिएको चुइगम कपडालाई असर नपार्ने गरी हटाउने केही तरिका यस्ता छन्ः हेयर ड्रायर : चुइगम टासिएको कपडालाई हेयर ड् ...
आफ्नो गुप्तांगका बारेमा पुरुषलाई भन्न चाहन्छन् महिलाहरु
अचेल युवती–महिलाहरु हरेक कुरामा पुरुषजतिकै सक्षम छन् । आफूलाई कुनै कुरामा पछाडी परेको मान्दैनन् । आफ्नो कुरा राख्न हिचकिचाउँदैनन् । अब कुरा आयो आफ्नो पार्टनरको । पार्टनरका अगाडि आजकालका महिला झनै फ्रेङक हुन्छन् । अब कुरा गरौं महिलाको गोप्य अंगबारे । केही कुरामा त शायद हामी भन्न सक्छौ कि महिलाहरु यो विषयमा पुरुषसँग बताउनमा अप्ठेरो मान्छन् । तर, हालै भएको एक सर्वेक्षणमा महिलाहरु आफ्नो गुप्त अंगबारे पुरुषलाई केही कुरा बताउन चाहन्छन् भन्ने पत्त ...
मलद्वारमा यौनसम्पर्क गर्दा देखापर्ने असरहरु !
डा. राजेन्द्र भद्रा धेरैजसोले यौनसम्पर्क भन्नाले योनि-लिङ्ग मैथुनलाई मात्र बुझछन्। यौनसम्पर्क योनि-लिङ्ग मात्र नभई मुख-मैथुन वा गुदा(मैथुन पनि हुनसक्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा आफ्नो यौनसाथीको गुदानलीमा लिङ्ग पसाई गरिने यौनसम्पर्कलाई गुदा- मैथुन भनिन्छ। धेरै मानिस गुदामैथुनलाई समलिङ्गी यौन व्यवहार मान्छन् तर वास्तविकता के हो भने यो समानलिङ्गी व्यक्ति तथा विपरित लिङ्गी अर्थात् पुरुष तथा महिलाबीच पनि हुन सक्छ। वैवाहिक जोडीको बीचमा पनि यस्तो यौनव्य ...
फ्रान्सको एक घरमा फेला पर्‍यो १०० किलो सुन
९ मंसिर, काठमाडौं । फ्रान्समा एक व्यक्तिका नातेदारले दिएको घरमा लुकाएको अवस्थामा ठूलो मात्रामा सुन फेला परेको छ । उनका नातेदारले विशाल घर विरासतका लागि छाडेका थिए जसलाई बेच्ने तयारी ती व्यक्तिले गरेका थिए । घरका वारिसले फर्निचर, बाथरुम तथा कार्पेको मुनि लुकाइएको एक यस किलो सुन फेला पारेका छन् । जसको मूल्य करिब ३७ लाख डलर अनुमान गरिएको छ । घर बेचविखनको काम गन मध्येका निकोलस फियरफार्टले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई बताए अनुसार त्यहाँ सुनका ५ हजार सिक्क ...
पत्नीको यो तस्विर देख्ने वित्तिकै पतिले दिए डिभोर्स
परपुुरुषसँग रात बिताइरहेकी ती महिलाले आफ्नो पतीलाई नुुहाइरहेको छु भनेर अर्कै काममा व्यस्त हुुँदा डिभोर्सको सामना गर्नुु परेको छ । जव पटक पटक फोन गर्दा पनि नउठाएकी पत्नीलाई पतिले तस्विर पठाउन आग्रह गर्छन पत्नीले तस्विर पठाउदा पलङ मुुनि लुकेर बसेका परपुुरुषको हातको तस्विर समेत जान पुुग्छ र ती महिलालाई उनका पतिले डिभोर्स दिन्छन् । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालहरुमाउक्त तस्विर भाइरल बनिरहेको छ । जुन तस्विरले एक महिलालाई आफ्नो पतिबाट डिभोर्सक ...
जहाँ अक्षताकै लागि मात्र धान रोपिन्छ ७ मंसिर, सोलुखुम्बु । एक पाथी धानको बीउ रोपियो भने कति फल्छ होला ? धानको उत्पादन राम्रो हुने ठाउँमा त चार\_पाँच मुरी नै उत्पादन होला, सोलुखुम्बुकै तल्लो क्षेत्र नेचा, सल्यानलगायतका बेँसीमा पनि त्यही हाराहारीमा उत्पादन हुने कृषक बताउँछन्, तर सोलुखुम्बुकै छेस्काममा भने चारपाथी धानको बीउबाट सरदर ६\_७ पाथी मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । तैपनि त्यहाँका कृषक पुस्तौँदेखि धान रोपिरहेका छन् । चारपाथी धानको रोपाइँ गर्न असारमा उनीहरुलाई निकै चटारो हुन्छ त ...
मोबाइल पुरानो भो ! नफाल्नुस्, बहुमूल्य छ
ग्याजेट्सको प्रयोग गर्ने सोख आजभोलि सिर्फ युवाहरुमा मात्र सीमित छैन । हरेक उमेरका मानिसहरु यसको प्रयोग गर्छन । कसैलाई यसको जरुरी छ भने कसैलाई प्रयोगको लत लागेको छ । अझ मोवाइलको कुरा आयो भने त कुरै नगर्नोस् । हरेक मानिसको चाहना हुन्छ कि महंगो भन्दा महंगो मोलाइल किनुँ । पछिल्ला केहि बर्षमा मानिसहरुमा आइफोनको आदत निक्कै बढेको छ । कम्पनीले नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्न पाएको हुँदैन, मानिसहरु त्यसलाई खरिद गर्न लाइन लाग्छन् । यो नसोच्नुहोस् कि भनेजस्ता मोबा ...
पादमा आगो लाग्दा महिला घाइते अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिरहेको बेला एक महिलाले पादेको पादले आगो लाग्दा ती महिला जलेर गम्भीर घाइते भएकी छिन् । जापानको टोकियो मेडिकल युनिभर्सिटी अस्पतालमा यो घटना भएको हो । ३० वर्ष उमेरकी ती महिला बिरामीको प्रजनन अंगमा लेजर अपरेशन भैरहेको समयमा उनले पादेकी थिइन् । उनले पादमा छाडेको ग्यास लेजरमा परेपछि आगो निस्केको हो । आगोको ज्वालाले उनको कम्मर तथा खुट्टामा नराम्रोसँग जलेको छ । घटनापछि अस्पतालको एक टोलीले अनुसन्धान गर्दा शल्यक्रिया कक्षमा आगलागी हु ...
मानिसलाई सेक्स भन्दा वाइफाइ किन प्यारो ?
अहिले वाइफाइ सबैभन्दा महत्वपूर्ण दैनिक आवश्यकता बनेको छ । एक अध्ययन अनुसार ४० प्रतिशत मानिसहरु सेक्स, चकलेट तथा रक्सी जस्ता मानवीय आवश्यकता तथा खानेकुराभन्दा वाइफाइलाई बढि महत्व दिन्छन् । वाइफाइ कनेक्टिभिटी सेवा प्रदायक आइपासले युरोप र अमेरिकाका १७ सय जना व्यवसायिक मानिसहरुमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । त्यसक्रममा ती मानिसहरुलाई मानवीय आवश्यकता तथा विलासीताका वस्तु र वाइफाइलाई उनीहरुले दिने महत्व कति छ भनेर छुट्टाउन लगाइएको थियो । त्यसक्रमम ...
परिवारका सबै २५ जनाको हातखुट्टामा २४ औँला
मानिसको हातखुट्टामा गरी जम्माजम्मी २० औँला हुन्छन् । तर भारत बिहारस्थित गया जिल्लाको एक गाउँमा भने एउटा परिवारका सबै २५ जना सदस्यका २४ वटा औँला छन् । २५ जना सदस्य रहेको उक्त संयुक्त परिवारका सबै सदस्यहरुका हात र खुट्टामा १२।१२ वटा औँला रहेका छन् । परिवारका सदस्य ५० वर्षका कृष्ण चौधरी आफ्ना हरेक हातमा ६।६ वटा तथा खुट्टामा पनि ६।६ वटा औँला रहेको बताउँछन् । आफ्ना बुवा तथा अन्य भाइबहिनी लगायत परिवारका सबै जनाका २४।२४ वटा औँला रहेको उनले बताए । धेरै औ ...
रोबोटद्वारा मानिसमाथि हमला, मानवजाति विरुद्ध युद्ध सुरु !
चीनमा आयोजित एक प्रविधि मेलामा एउटा रोबोटले मानिसमाथि हमला गरेको छ । प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आएका एक मानिसमाथि रोबोटले एक्कासी आक्रमण गरेपछि त्यसले ठूलै तरंग उत्पन्न गरेको छ । सोसल मिडिया, खासगरी चिनिया सोसल मिडियाहरुमा एउटा बहस तिव्र रुपमा छेडिएको छ की आखिर अब रोबोटले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने युगको सुरुवात भएकै हो रु के अब हामी रोबोट युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ । चीनको सेन्झेनमा आयोजित इन्टरनेसनल हाइ टेक फेयरमा राखिएको लिटिल चबी नामक उक्त रोबोटले अचानक स ...
यो गाउँका सबै मानिस छन् लखपति, तर कंगाल बनेर गाउँ छाड्नुपर्छ
कुनै गाउँ तथा सहरमा सबै मानिस धनाढ्य हुँदैनन् । कोही धनी तथा कोही गरीब हुन्छन्, स्वभाविक रुपमा । तर चीनमा यस्तो गाउँ छ जहाँका सबै मानिस लखपति छन् । तर गाउँ छाड्दा बित्तिकै उनीहरु कंगाल बन्दछन् । पूर्वी चीनको जिगांशू प्रान्तस्थित हुक्सी गाउँको कथा हो यो । यो गाउँमा कोहीपनि मान्छे गरीब छैन । किनकी गाउँमा बस्नका लागि धेरै शर्तहरुको पालना गर्नुपर्दछ । यहाँ हरेक व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ जति हुनैपर्छ र हरेक परिवारको डेढ करोडको हा ...
जाडो याममा नखानुहोस् यी खानेकुरा !
चिसो मौसममा खाएको स्वस्थ खानाले वर्षभरी स्वास्थ्यलाई सकारात्मक असर पुर्याउँछ । गुरुकुल कांगडी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका एचओडी प्रो। अवधेश मिश्राका अनुसार चिसो मौसममा शरिरलाई तातो बनाउनका लागि धेरै क्यालोरी आवश्यक पर्छ त्यसकारण यतिबेला कम क्यालोरीयुक्त नखानु उपयुक्त होला । कम क्यालोरीयुक्त खानाले हाम्रो शरिरको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने भएकाले यसले प्रतिरोधी क्षमतालाई कम गरेर रुघा खोकी, ज्वरोले मानिस थलिने गर्दछ । दहीःदही चिसो हुने भएकाले यसले ...
जापानी पुरुषहरु लगाउँछन् महिलाका ब्रा र पेन्टी !
महिला र पुरुषको शारीरिक संरचनाको भिन्नताले उनीहरुका पहिरन पनि एक अर्काबाट भिन्न हुन्छन् । तर जापानी पुरुषहरुमा पछिल्लो दिनमा महिलाका भित्री वस्त्र लगाउने क्रेज बढिरहेको छ । पुरुषहरुमा तिव्र रुपमा बढ्दै जाँदा पुरुषहरुले आफ्ना साइज अनुसारका महिलाले लगाउने भित्री वस्त्र अनलाइनमार्फत खरीद गर्न अर्डर गरिरहेका छन् । जापानमा महिला अन्डरगार्मेन्ट्सको माग यतिधेरै बढेको छ की कम्पनीहरुले पुरुषहरुलाई मिल्ने महिलाका भित्री वस्त्र उत्पादन गरिरहेका छन् । सपिंग ...
म १७ वर्षीया युवती हुँ । मलाई रात परेपछि बढी उत्तेजना हुन्छ । किन होला ?
म १७ वर्षीया युवती हुँ । मलाई रात परेपछि बढी उत्तेजना फिल हुन्छ । यद्यपि मलाई विवाहअघि यौनसम्पर्क राख्न डर पनि लाग्छ । मेरो कुनै केटासाथी पनि छैन । अब मैले के गर्दा उपयुक्त होला रु यौन भावनाको व्यवस्थापन हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यौन उत्तेजना एउटा सामान्य कुरा हो र यो विशेष गरेर तपाईंको जस्तो किशोरावस्थामा तीव्र हुन्छ । दिउँसो अन्य काममा अलमलिए पनि राति एक्लै हुँदा यसले बढी पिरोलेको हुनुपर्छ । आफूमा आउने यौनचाहना र त्यसलाई शान्त पार्न के गर् ...
ह्वेलको बान्ताले तीन माझीलाई करोडपती बनायो !
ओमानका तीन माझी रातारात करोडपती बने । अचम्मको कुरा त के छ भने ह्वेलले बान्ता गरेपछि यी तीन माझी करोडपती बन्नका हुन् । एम्बरग्रिस नामले चिनिने ह्वेलको यो बान्तामा निकै महँगो मैन पाइन्छ । यी तीन माझीलाई यो मैनको सट्टा २५ लाख अमेरिकी डलर पाउने भएका छन् । गत अक्टोबर १० तारिखमा ४० वर्षीया खालिद अल सिनानी ...
संसार जित्न अपनाउनुहोस चाणक्यका विश्वचर्चित १० बाणीहरु चाणक्य वा कौटिल्यको नामले चिनिने महान विद्धान, तक्षशिलाका आचार्य , दार्शनिक एवं महान सम्राट चन्द्र गुप्त मौर्यका सल्लाहकार थिए । उनको जन्म लगभग ई।पू ३७०–२८३ मा भएको थियो । चाणक्य राजनीति र कुटनीतिका महान ज्ञाता मानिन्छन् । उनले अर्थशास्त्र , राजनीति, आर्थनिती , कृषि , समाजनीति जस्ता महान ग्रन्थहरु रचना गरेका छन् । उनको अर्थशास्त्रलाई मौर्यकालिन समाजको दर्पण मानिन्छ । चाणक्यका १० विश्व चर्चित बाणीहरु :-१. कमजोर व्यक्तिसँगको दुस्मनी ज्या ...
लौ आयो पाद प्रतिरोधी कपडा !
पेटमा ग्यास जम्मा हुनु र पाद आउनु सामान्य कुरा हो । तर केही मानिसलाई बढि नै अपानवायु आउँदछ । सार्वजनिक स्थानमा पाद आउँदा मानिसहरु निकै समस्यामा पर्छन् र कहिलेकाहीँ पादले लाजमर्नु बनाउँछ । पादमा ग्याससँगै आउने दुर्गन्ध सबैभन्दा समस्याको कारक बन्दछ । पादको समस्याबाट पिरोलिएकाहरुको दुखलाई ध्यानमा राख्दै केही कम्पनीहरुले यस्तो कपडा उत्पादन गर्दैछन् जसबाट पादको दुर्गन्ध बाहिर आउने छैन । गत वर्ष बेलायतको एक कम्पनी श्रेड्डाइस निकै चर्चामा थियो । उसले पा ...
जब विमानमा उडिरहेका बेला बालकले उल्टी गर्‍यो…
जब ३५ हजार फिटमाथि उडिरहेको एक जहाजभित्र रहेको सानो बालक बिरामी हुन्छ, उनकी आमालाई थाहा थिएन कि उनले यसको कति मूल्य चुकाउनुपर्छ । यस्तै भएको छ एउटी आमालाई, जतिवेला उनी आफ्नो सानो बच्चालाई लिएर फ्लाइटमा थिइन् । विमानको क्याविनमा रहेकी उनको बच्चा बिरामी भएपछि उल्टी गर्न थाल्यो । बच्चाको उल्टी नजिकैकी एक अपरिचित महिलाको हृयाण्डब्यागमा लाग्यो । ब्याग खराव भयो र त्योभन्दा पनि खराव त त्यसको क्षतिपूर्ति आमाले दिनुपर्‍यो । ‘हामी एक लामो यात्राम ...
१२ हप्ताको फरकमा एउटै बालिका दुई पटक जन्मिएपछि !
अमेरिकामा एक बालिकाले दुई पटक जन्म लिएको घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । १२ हप्ताको फरकमा दुई पटक जन्म लिएकी बालिका अहिले चार महिनाकी भएकी छिन् । लिनली होप नाम गरेकी बालिका २३ हप्ता छँदा नै उनलाई करिब २० मिनेटका लागि आमाको गर्भबाट बाहिर निकालिएको थियो । उनको जीवन रक्षार्थ चिकित्सकहरुले उनलाई गर्भबाट बाहिर निकालेर जटिल शल्यक्रिया पश्चात्त पुनः भित्र राखेका थिए । त्यतिबेला उनको तौल जम्मा एक पाउण्ड तीन आउन्स थियो । मार्गरेट बुमर १ ...
महिला हो वा पुरुष सधैं सवैसंग गोप्य राख्नुस् यी ७ कुरा !
कयौं पटक यस्तो भएको हुन्छ आफू जोशमा आएर कसैलाई आफ्नो ठानेर भविष्यको लागि केही नसोचेर अर्कालाई आफ्नो मनको कुरा बताइदिने गरिन्छ । यदि अगाडी गएर आफ्नो गल्तीको महसुश त्यतिखेर गरिन्छ जब आफ्नो राजको कुरा अर्कोले जानेबुझेर मौकाको फाईदा उठाउँछ । यसपछि सबैलाई धेरै प्रकारका चिन्ताहरुको सामना गर्नुपर्छ । यदि तपाईले आफ्नो भलो चाहनुहुन्छ भने यी सात कुरा कुनैपनि हालतमा कसैलाई पनि नबताउनुहोस् । अपमानः यदि कुनै कारणले कसैले तपाईको अपमान गरेको छ भने यस कुरालाई गो ...
सेक्सको तीव्र आवाज खप्न नसकेर ढोका तोडियो !
सेक्सका बेला आवाज निकाल्नु मानिसहरुको वानी नै हो । तर, कहि कहि यसै आवाजले मानिसलाई अप्ठेरोमा पारेको पनि सुनिन्छ । भर्खरै चीनमा पनि यस्तै भएको छ । चीनको दक्षिणी गुआंगजी प्रान्तमा एक होटलमा सेक्स गरिरहेका जोडीमाथि आवाज निकालेको भन्दै कुटपीट भएको छ । सोही होटलमा बसिरहेका एक पुरुषले आफ्ना सहकर्मीहरुसँग मिलेर आवाज निकालेर सेक्स गर्ने पुरुषको कोठाको ढोका तोडेर कुटपीट गरेका हुन् । स्थानीय प्रहरीका अनुसार ठूलो स्वरमा आवाज निकालेर सेक्स गरेको भन्दै झांग न ...
दुई सय जहाज तथा ८ हजार मान्छे निलेको बर्मुडा ट्राएङ्गलको रहस्य यस्तो छ !
वैज्ञानिकहरुले बर्मुडा ट्राएङ्गलको रहस्य पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले यस्ता घटनाहरु हेक्सागोनल बादलका कारण हुने गरेको बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बर्मुडा ट्राएङ्गलमाथि खोजी गरेका वैज्ञानिकहरुले बर्मुडा ट्राएङ्गलमा धेरै गह्रौं बस्तु तान्न सक्ने क्षमता बादलको हेक्सागोनल आकारका कारण विकास भएको हो । कोलोराडो स्टेट यूनिभर्सिटीका मेट्रोलोजिस्ट र्यान्डी क्यारभेनीका अनुसार यो बादलले ‘एयर बम’ बनाउने गरेक ...
ट्रम्पको नायिका लिन्ड्से लोहनलाई ‘ओछ्यान तताउने केटी’ भनेपछि !
अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि रिपब्लिकन पार्टीतर्फका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प एक नायिकाबारे गरेको विवादास्पद टिप्पणीले फसेका छन् । श्रीमतीको नांगो तस्वीर सार्वजनिकदेखि अन्य विवादास्पद बयानले आलोचना खेपिरहेका ट्रम्प अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनमा आफूले सन् २००४ मा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा हलिउड नायिका लिन्ड्से लोहनको नांगो तस्बिरका बारे गरेको भद्दा टिप्पणीले झन आलोचित बन्न पुगेका छन् । ट्रम्पले त्यतिबेला नायिका लोहनलाई ‘ओछ्यान तताउनका लागि उचि ...
यसकारण बढ्छ मोटोपन, कारण सहित आजको विश्वमा एकातिर भोकमरीको समस्या बढ्दो छ भने अर्कातिर खान नजान्नु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ । खान नजान्नुको परिणाम हो, मोटोपन बढ्नु । विश्वका झण्डै आधाभन्दा बढी मानिस मोटोपनको शिकार भइरहेका छन् । मोटोपनको मुख्य कारण अस्वस्थकर खानपान नै हो । तर, त्यो मात्र कारक होइन भन्ने कुरा हालैका केही अध्ययनले पत्ता लगाएका छन् । खानपानका साथै हाम्रा केही आनीबानीले पनि मोटोपन बढाउन भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । धेरै कष्ट नगरी हामीले आफ्नो आनीबानीमा परिवर्तन गर ...
१३ वर्षीय बालिकासँग ७० पटक यौनसम्पर्क गर्ने युवती !
यूनाइटेड किंगडम (यूके)को वेल्समा युवतीले १३ वर्षीय बालिकासँग यौन शोषण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी छिन् । डेली पोस्टको समाचार अनुसार करिव १५ महिनादेखि निर्दोष बालिकासँग यौनसम्पर्क बनाएको जनाइएको छ । युवतीको उमेर १७ देखि १८ वर्षको रहेको थियो । वेल्सस्थित पुलिसले यवतीले बालिकासँग ७० पटकसम्म यौनसम्पर्क गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । पक्राउ परेकी ती युवतीले आफ्नै घरका साथै विभिन्न स्थानमा पटक पटक बालिकासँग यौनसम्पर्क गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । स ...
महिलाले लगाएको पेन्टी बेच्ने अनलाइन पसल
अमेरिकी देश पनामामा दर्ता भएको एक कम्पनीले महिलाहरूले लगाएर फालेका पेन्टीलाई अनलाइनमार्फत धमाधम बिक्री गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ । महिलाले लगाएर सफा गरेर राखेका पेन्टीलाई तस्बिरसहित अनलाइनमा राखिने गरिन्छ । अनलाइनमा किन्ने व्यक्तिले तोकिएको पैसा क्रेडिट कार्ड मार्फत तिरेर किन्ने गरेको समाचारमा उल ...
बिहेपछि परपुरुषसँग सम्पर्क राख्न पाउने छुट छ यहा !
अफ्रिकी महादेशमा अवस्थित नाइजरको सहारा मरुभूमिमा एउटा अनौठो जातिको बसोवास छ । जसमा महिलाहरूको शासन चल्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । रीतिरिवाज र तौरतरिका संसारका अन्य मानव जातिको भन्दा नितान्त भिन्न छ । सयौँ वर्ष पुरानो यो जनजाति तुआरेगको नामबाट चिनिन्छ । इस्लामिक समुदायको यो जातिका महिलाले बिहेपछि पनि परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछन् । उनीहरू साधारणतया बुर्का पनि लगाउँदैनन् । श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भइहाल्यो भने सारा सम्पत्ति महिलाले नै राख् ...
समुद्रमा इन्टरनेट बिछ्याउँदै गुगल र फेसबुक, हंगकंग र अमेरिका जोडिदै चीनको हंगकंग र अमेरिकाको लस एन्जल्सलाई जोड्ने ८ हजार माइल लामो इन्टरनेट केबुल प्रशान्त महासागरमा बिछ्याइने भएको छ ।गुगल र फेसबुकले प्यासिफिक लाइट डाटा कम्युनिकेसन तथा टिइ सबकमसँग मिलेर सन् २०१८ सम्ममा समुद्रमा इन्टरनेट केबुुल बिछ्याउने योजना बनाएका हुन् । हंगकंग र लस एन्जल्स जोड्ने केबुल गत जूनदेखि सञ्चालनमा आएको अहिलेसम्मकै तिव्रगतिको इन्टरनेट केबुलभन्दा दुई गुणा शक्तिशाली हुनुका साथै इन्टरनेट डाटा ट्रान्सफरका लागि मोडेम भन्दा १ करोड गुणा फास्ट ...
ट्रक ड्राइभरको कण्डम, डिप्पर !
हालै नयाँ ब्राण्डको कण्डम आएको छ भारतमा । यसको नाम हो डिप्पर । उक्त कण्डम विशेष गरी ट्रक ड्राइभरहरुलाई लक्षित गरी बनाइएको हो । यो कण्डमको नाम कसरी रह्यो होला रु चासोको विषय हुन सक्छ । वास्तवमा भारतीय ट्रकहरुका पछाडि लेखिने चेतावनीमूलक शव्दावलीहरुबाट यो नाम लिइएको हो । ट्रकको पछाडि लेखिएको हुन्छ ः रातको समयमा डिप्पर प्रयोग गर्नुहोस् । यो सन्देशको आफ्नो अर्थ छ । यस अनुसार रातको समयमा ट्रक चलाउँदा ड्राइभरहरुले लो बिम अर्थात् कम प्रकाशवाला बत्तीको प् ...
बेबी फार्मिङ जहाँ जबरजस्ती आमा बनाइन्छ !
तपाईले गाई फार्म, बाख्रा फार्म, सुँगुर फार्म त देख्नु, सुन्नुभएकै छ । तर के तपाईले मानिसको बच्चा जन्माउने फार्मको बारेमा सुन्नुभएको छ रु मान्छेको बच्चा जन्माउने फार्म भन्ने कुरा सुन्दैमा झसँग होइन्छ । कहीँ मान्छेको बच्चा पनि फार्ममा जन्माइन्छ त रु यो अलि अनौठो तथा अशोभनीय लाग्न सक्छ । तर, अफ्रिकी देश नाइजेरियामा भने पछिल्लो समयमा बेबी फार्मिङको धन्दा निकै फस्टाएको छ । केही वर्षयता उक्त मुलुकमा बच्चाको व्यापार निकै तिब्र गतिमा भैरहेको छ । विश्वका ...
सहवासको बेला गर्नै नहुने ५ गल्ती, चुम्बन देखि स्खलनसम्म !
आफ्नो पार्टनरसँगको सहवासको समय सबैभन्दा अन्तरंग तथा महत्वपूर्ण समय हो । सहवासलाई अझै आनन्ददायी बनाउन तथा उच्च यौन आनन्द प्राप्त गर्नका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सहवासका बारेमा गर्नै नहुने गल्ती तथा त्यस्ता गल्ती हुन नदिनका लागि ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा यस्ता छन्ः १. चुम्बनः विश्वास गर्नुस् या नगर्नुस् धेरै मानिसहरु सम्भोगका बेला आफ्नो पार्टनरलाई चुम्बन गर्दैनन् । किन रु सम्भवतः सहवासको बेला हुने आसनले गर्दा चुम्बन असहज बन्दछ । जोडीहर ...
'विहेपछि परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिलालाई पतिले दिए यस्तो सजाए'
जब श्रीमान र श्रीमतीबीच सम्बन्धको कुरा आउँछ त त्यहाँ एउटा डोरी हुन्छ जसले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई बाँधेर राख्छ । तर दुबै जना मध्ये एउटाले पनि उल्लंघन गर्ने कोशिस गर्छन् भने कहिले काँही यसको नतिजा एकदम नराम्रो निस्कन सक्छ । यस्तै गरेकी छन् भारतको ग्वालियरमा बस्दै आएकी युवती सोनमले । प्राप्त खबर अनुसार सोनमका पति कामको सिलसिलामा अहम्दावाद गएर बस्न थालेका थिए भने यता सोनमको शारिरीक सम्बन्ध तीन जना अरु नै युवकहरुसँग रहन गयो । जब पति गवालियर फिर् ...
यी सुपरस्टार, जो सँग ३६९ वटा कार छ
पत्याउनुहुन्छ, भारतका एक सुपरस्टारसँग ३६९ वटा कार छ । हलिउड हुन् या बलिउडका चर्चित कलाकार नै किन नहुन्, अधिकांश गाडीका सौखिन छन् । बजारमा भित्रने महंगा कार किन्न उनीहरु तछाडमछाड नै गर्छन् । मलयालम तथा तमिल चलचित्रका सुपरस्टार ममुटीसँग ३६९ वटा कार छ । उनले आफ्नो कार राख्नका लागि छुट्टै ग्यारेज नै बनाएका छन् । उनी आफै कार ड्राइभ गर्न रुचाउँछन् । केही बर्ष अगाडि उनले मारुती-८०० किन्ने इच्छा राखेका पनि थिए । देशमै पहिलो पटक आफूले यो कार किन्ने उनको ...
दशैलाई खुर्सानी, किलोको ३८ लाख !
हामीकहाँ अकबरे खुर्सानीको भाउ अन्य खुर्सानीको भन्दा धेरै हुन्छ । तर यहाँ जुन खुर्सानीको भाउको कुरा गरिँदैछ, त्यसका सामुन्ने अकबरे खुर्सानी त विलय नै हुनेवाला छ । हो, यो खुर्सानीको मूल्य सय, हजारमा होइन लाखौँ पर्छ । दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा पाइने मदर अफ अल चिलिज नामक खुर्सानीको मूल्य एक किलोकै झण्डै ३८ लाख रुपैयाँ पर्दछ । सानो आकारको हुने अर्थात जिरे टाइपको यो खुर्सानी यति मूल्यवान हुनुको प्रमुख कारण यसको स्वाद तथा पिरोपन नै हो । कैयन् तयारी खाने ...
२४ वर्षीया युवतीले आफ्नै हजुरबासँग बिहे गरेपछि !
अमेरिकामा एक अनौठो विवाहको घटना सार्वजनिक भएको छ । जस अन्तरगत एक युवतीले अन्जानमा आफ्नै हजुरबासँग बिहे गरेकी छिन् । अनि बिहे गरेको मान्छे आफ्नै हजुरबा रहेको कुरा केवल ३ महिनापछि मात्र पत्ता लाग्यो । फ्लोरिडाकी २४ वर्षीया ती युवती झण्डै दुई वर्षदेखि एक ६८ वर्षीय करोडपतिसँग लिभइन रिलेसनमा थिइन् । केही महिना पहिले ती दुइको बिहे भयो । बिहे भएको ३ महिनापछि एक दिन लोग्नेले ती युवतीलाई फोटो एल्बम देखाएछन् । पूराना फोटाहरु संग्रहित एल्बम हेर्न पाउँदा युव ...
कांग्रेस नेताले आफू भन्दा आधा उमेर कान्छीसँग यौन सम्बन्ध राख्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक
भारतको मध्यप्रदेश जबलपुरका पूर्व मेयर तथा भारतीय कांग्रेसका नेता एनपी दुवेको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आफू भन्दा झण्डै आधा उमेर कान्छी युवतीसँग यौन सम्बन्ध राख्दै गरेको अवस्थामा कांग्रेसका प्रतिष्ठित यी नेताको ३९ सेकेण्डको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यो भिडियो गोरखपुरस्थित घरमाथि रहेको कार्यालयमा बनाइएको अनुमान गरिएको छ । कांग्रेस पार्टीका नेताहरुले यो विषयमा छनविन चलिरहेको र कारवाही हुने बताएका छन् । ...
बस्नका लागि उत्कृष्ट संसारका १० सहर
बस्नका लागि उत्कृष्ट र उपयुक्त सहरहरु कुन होलान् भन्ने सोचमा हुनुहुन्छरु तर आधिकारीकरुपमा यस्ता शहर कुन हुन् भन्ने थाहा पाउन गाह्रै हुन्छ। आप्रवासीका लागि बस्न कुन सहरहरु राम्रा छन् भनेर मर्सरले वार्षिक अध्ययनका आधारमा सूची जारी गरेको छ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शैक्षिक स्रोत, विकासका पुर्वाधार, वातावरणलाई मध्यनजर राखेर मर्सरले बस्नका लागि उत्कृष्ट रहेका सहरहरु छनौट गरेको हो। जसअनुसार अस्ट्रियाको भियाना नम्बर एकमा परेको छ। ४४० वटा सहरको मूल्यांकन गरिए ...
यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार यस्तो चाहन्छन् महिलाहरू ?
समयको परिवर्तन सँगै मानिसको सोचमा परिवर्तन भइरहेको छ । विशेषगरी यौनको मामलामा मानिसहरू अलि बडी खुल्न थालेका छन् । अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन् । कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत प्रयोग गर्छन् ।लिंगको आकार ठूलो हुँदैमा यौन सन्तुष्टि मिल्ने कुरा गलत भएको मेड ...
यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय !
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ । मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई सवारी साधन जस्तैः– बस, ट्याक्सी, हवाईजहाज चढेको केही मिनेटमै सुरु हुन्छ भने कसैलाई घन्टौं पछि । मोसन सिकनेस भएमा यात्रा साह्रै कष्टकर हुन्छ । आफ्नो यात्रा सुखदायी र रमाईलो बनाउनका लागि हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही प्रभावकारी घरेल ...
विश्वका सबैभन्दा सस्ता १० शहर, ६ सस्ता शहर एसियामा
विश्वमा महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। विश्वमा केही शहरमा बस्न यति महँगो पर्छ कि त्यहाँ सामान्य आम्दानी हुनेले बस्ने सोच्न पनि सकिदैँन। तर यही विश्वमा केही सस्ता शहर छन् जहाँ खाना, लाउन, बस्न सहज हुन्छ। तर, विश्वका कुन शहर सस्ता छन् भन्ने सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। हालै इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स यूनिट्सले २०१६ का सबैभन्दा महँगा र सस्ता शहरको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विश्वव्यापीरुपमा जीवनयापनमा लाग्ने खर्चका आधारमा १३३ शहरमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार विश्वकै ६ ...
केटी जिस्काउँदा ३० हजार जरिवानामा परे ड्राइभर
रुपन्देहीमा केटी जिस्काएको आरोपमा बस चालक र सहचालकले ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् । लु १ ख ६१८३ नं. को बसका चालक संजय कुर्मी र सहचालक मंगरु कुर्मीलाई केटी जिस्काएको भन्दै विष्णुपुरा गाविसमा स्थानिय र केटीका आफन्तले कुटपिट गरेका थिए । कुटपिट पछि केटीलाई जिस्काएको स्वीकार्दै चालकले २० हजार र सहचालकले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको विष्णुपुरा गाबिसका पूर्वउपाध्यक्ष कपिलदेव पाण्डेले जानकारी दिए । ...
एक वर्षसम्म नियमित यौनसम्पर्क गरेकी युवतीले यसरी पाइन् दुःख !
भारतको देहरादूनमा ‘लिभ इन रिलेशन’मा रहेकी युवतीलाई गर्भवती बनाएर एक युवक विगत दुई हप्तादेखि फरार भएका छन् । गर्भवती भएकी ती युवतीले एक वर्षसम्म युवकसँग नियमित यौनसम्पर्क गरेकी थिइन् । यति लामो अवधिसम्म पनि ती युवतीले युवकका विषयमा कुनै जानकारी नराखेको प्रहरीले जनाएको छ । फरार रहेका युवकको घर ठेगाना समेत थाहा नभएको युवतीले प्रहरीलाई बयान दिएकी छिन् । युवतीले युवकको मोबाइल नम्बर भने प्रहरीलाई उपलब्ध गराएकी छिन् । पुलिसले ती युवकको मोबाइ ...
तीन जनाको आनुवंशिक मिश्रणबाट जन्मिएको विश्वको पहिलो बच्चा
१२ असोज, अमेरिका । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले तीन जना मानिसको आनुवंशिक मिश्रण गर्ने नौलो प्रजनन प्रविधिमार्फत विश्वको पहिलो शिशुको जन्म भएको जनाएका छन्। बिबिसीका अनुसार आमा, बुवा तथा एक डिम्ब दाताको आनुवंशिक मद्दतले आमामा भएको दुर्लभ घातक आनुवंशिक अवस्थाबाट जोगाएर उक्त शिशुको जन्म गराउन सफल भएको उनीहरुले जनाएका छन्। चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले पाँच महिनाको भएको उक्त शिशुमा हालसम्म सो आनुवंशिक रोगका लक्षण देखा परेका छैनन्। यो प्रविधि अन्तर्गत आमा र बुव ...
९ वर्षदेखि पसलमा कार्यरत सेलिब्रिटी बोबो, जसले एकदिन पनि छुट्टी लिएको छैन !
११ असोज, न्युयोर्क । न्युयोर्कको एउटा पसलमा ९ वर्षदेखि एउटा बिरालो काम गरिरहेको छ। रमाइलो कुरा, त्यो बिरालोले अहिलेसम्म छुट्टीसमेत लिएको छैन्। बिरालोको नाम बोबो हो। ९ वर्षअघि एक कर्मचारीले न्युयोर्कको चाइनाटाउन एरियाको यो पसलमा बिरालोलाई पहिलो पल्ट ल्याएको थियो। बोबोलाई पसलमा यहाँका कर्मचारी तथा एउटी महिला वकिल एनी मिलेर हेरविचार गर्छन्। आनी दैनिकी पसलमा आउँछिन र बेलाबखत बोबोलाई भेटेनरी लान्छिन् र खाना पनि ख्वाउछिन्। बोबो पछिल्लो समय यो एरियाको स ...
महाप्रलय कुर्दै गरेको ठाउँ, जहाँ झरनाले जोगाउछ आगोको लप्का !
संसारमा कतिपय रहस्य हुन्छन् जसले मानिसहरुलाई सोच्न बाध्य बनाउछन् । यस्तै एउटा रहस्यमय ढुङ्गा छ, त्यहाँ लागातार झरना बगिरहन्छ तैपनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ । यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ । जसलाई आजभोली एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आगो बलिरहन्छ । स्थानियहरुले यसलाई दैविय चमत्कार मान्छन् । यसलाई लिएर धेरै कहानी पनि प्रसिद्ध भएका छन् । अचम्मको कु ...
कुनैपनि महिलाले आफू खुसी शुक्राणु किन्न सक्छन् !
ब्रिटेनको एक शुक्राणु बैंकमा काम गर्दै आएका भारतीय मूलका ब्रिटिश डाक्टरले महिलाले आफूलाई मन पर्ने शुक्राणु अडर गर्न सक्ने मोबाइल ऐप शुरू गरेका छन् । महिलालाई शुक्राणु जस्तो आवश्यक पर्छ त्यस्तै प्रकारको अडर गर्नसक्ने समाचारमा उल्लेख छ । डा. कमल आहूजाले यस्तो सेवा सञ्चालन गरेका हुन् ।दि सन्डे टाइम्सले डा।आहूजाको भनाइ उदृत गर्दै भनेको छ, ‘महिलाले घरमै बसेर शुक्राणु दिने पुरुषका बारेमा र मूल्यका विषयमा पनि जान्न र बुझ्न सक्ने छन् ।’ ...
बडी बिल्डर्सहरुको भन्दा धेरै प्याक भएको साँढे !
सिक्स प्याकवाला गठिलो जिउ कसलाई पो मन पर्दैन र रु आफ्नो लुरे र फितलो जिउको तुलनामा बडी बिल्डर्सहरुका मसल्स देख्दा हैरान भइन्छ कहिलेकाहीँ । पत्यार नै लाग्दैन, के जिउलाई यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ र रु तर यो दुनियामा बडी बिल्डिंग गर्ने जन्तु केवल मानिस मात्र होइन साँढे पनि हुँदोरहेछ । हामी यस्तो बडी बिल्डर साँढेको बारेमा बताउँदैछौँ जसलाई देख्दा मै हुँ भन्ने बडी बिल्डर्सपनि पानीपानी हुनेछन् । यो बडी बिल्डर साँढेलाई बेल्जियन ब्लूको नामले पनि चिनिन्छ । बे ...
बजार मूल्य १६ अर्ब डलर रहेको ट्विटर किन्दैछ गुगल !
माइक्रोब्लगिङ साइट ट्विटरले पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न कठिनाईहरुको सामना गरिरहनुपरेको छ । संकटको सामना निरन्तर गरिरहँदा ट्विटरले आफैलाई बेच्ने तयारी गरेको छ । ट्विटरले आफ्नो बिक्रिका लागि विभिन्न कम्पनीहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ । ट्विटरको खरीदबिक्रिको छलफलमा सहभागी हुने कम्पनीहरुमध्ये गुगल पनि रहेको छ । सन् २०१३ यता ट्विटर कम्पनीको वृद्धिदर निकै सुस्त छ । नयाँ प्रयोगकर्ताहरुको संख्या भलै बढिरहेको किन नहोस्, तर एक्टिभ युजर्सको संख्यामा धेरै वृद ...
जापानीहरुको सेक्समा रुचि घट्यो, पुरुष तथा महिला सबै भर्जिन !
जापानलाई मेहिनेत गर्ने र काममा डुब्ने मानिसको देश भनेर चिनिन्छ । तर यो देश आफ्नोे भर्जिन बढिरहेका मानिसका कारणले चिन्तामा छ । यद्यपि देशको धेरै जनसँख्या लाई सेक्समा रुचि नै छैन् । साथसाथै विहे नगर्ने मानिसको सँख्या पनि चिन्ताजनक नै छ । जसका कारण जनसँख्या वृद्धिमा अंकुश लागेको छ । जापानमा बुढाहरुको सँख्या सबै देशको भन्दा बढी छ । युवा पिंढी विहे गर्न नै मान्दैन् र जसकाकारण बच्चा नै नजन्मिराखेको अवस्था छ ।सरकारले विहे गर्न र बच्चा जन्माउने लाई पैसाप ...
हवाई जहाज पनि हराउँने संसारकै डरलाग्दो ठाउ, जहाँबाट कोही पनि जिउँदो फर्किएको छैनन् !
संसारमा यस्ता धेरै ठाउँ छन् जो रहस्यमय बनिरहेका छन् । यस्तै एउटा ठाउँको नाम हो बरमुडा ट्रयाङगल । जसलाई डेविल्स ट्रयाङ्गल पनि भनेर चित्रण गरिएको छ । जहाँ कोही पनि जान चाहँदैनन् । एट्लान्टीक महासागरमा रहेको बरमुडा ट्र्याङ्गल आफ्नो रहस्यहरुको कारण चर्चित छ । आजसम्म धेरै हवाई जहाँजहरु र पानीजहाज बरमुडा ट्रयाङ्गलबाट बिलाउछन् वा हराउछन् । यदि दोस्रो पटक मिले पनि क्रु मेम्बर्स पनि थाहा हुँदैन् । आज तपाई थाहा पाउदै हुन्हुन्छ बरमुडा ट्रयाङ्गलसँग जोडिएको क ...
छिटो गर्भवती हुन अपनाउनुस् यी ५ पोजिशन, मिसनरीदेखि डगी स्टाइल सम्म !
कसैै महिलामा गर्भ छिट्टै हुन्छ भने कसैमा केही खरावीका कारण धेरै सुस्त तरिकाले हुन्छ । यसका धेरै कारण छन्, जसरी स्पर्मको कमी वा पर्याप्त संख्यामा स्पर्म नहुन वा स्पर्मका अंडाअणु संग मिल्न नसक्नु पनि हो । स्पर्मको कमी हुनु त त्यो आफ्नो ठाउँमा छदैछ । तर कहिलेकाहीं पुरुषको गुप्तांगबाट निकल्ने स्पर्म र महिलाको शरिरबाट निस्किने अंडाणुहरु आपसमा नमिल्नु पनि हो । गुप्तांगबाट निकल्ने विर्य केवल २४ घण्टा मात्रै जीवित रहन्छ भने नारी शरिरमा ३ देखि ५ दिन सम्म ...
बिना जडिबुटी वा यौनवद्र्धक औषधि, यौनइच्छा बढाउने अचम्मको तरिका !
पुरुषको लागि एउटा जरुरी खबर, यदि सेक्स गर्ने इच्छा कम भयो भने जरुरी छैन कि जडिबुटी वा यौनवद्र्धक औषधिमा विश्वास गर्न । विना रुपैयाँ नै सजिलै एउटा उपायले मद्दत गर्छ । जसको हामीले खोज नै गर्दैनौं । इटलीका खोजकर्ताहरुले ४० वर्ष भन्दा बढी उमेरका मानिसहरुलाई सहभागी गराएर एउटा अनुसन्धान गरेको छ । यो अनुसन्धानको प्रेरणा यो कुराको लागि पाइयो कि पुरुषहरुमा कामको इच्छा मौसम अनुसार परिवर्तन हुन्छ । खास गरेर चिसोको समयमा यो परिवर्तन बढी देखिन्छ । अनुसन्धानकर ...
यौन सम्पर्क राख्ने जोडिलाई सार्वजनिक बिदा !
खास गरेर कमै सुनिन्छ, कुनै सरकारले शारीरिक सम्बन्ध गर्न विदा दिन्छ भनेर । तर, यो कुरा साँचो हो । यहाँका मानिहरुलाई शारीरिक सम्पर्क गर्न सरकारले विदा दिने गरेको छ । डेनमार्कको जनसंख्यामा कमी भइरहेको छ, यहाँ वार्षिक जन्मदर १ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । यहि कारण डेनमार्क सरकारले बच्चा जन्माउन मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसको लागि सरकारले अनौठा अनौठा योजनाहरु ल्याइरहेको छ । यसैक्रममा मानिसलाई यौन सम्पर्क गर्नका लागि विदा दिने अनौठो प्रचलन ल्या ...
कुकुरलाई आठ वटा आइफोन ७ एस किन्दिने यी धनाढ्यका छोरा को हुन् ?
चीनका एक धनाढ्यका छोराले आफ्नो कुकुरलाई आठ वटा आइफोन ७ एस किनिदिएका छन्। चिनियाँ धनाढ्य वाङ जियालिनका छोरा वाङ सिकोङले आफ्नो कुकुर वाङ केकेका लागि किनिदिएका आठ वटा आइफोन ७ एसको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन्। चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल सिनो वेइबोमा केकेका १९ लाख फ्लोअर्स छन्। सिकोङले केकेकै एकाउण्टबाट आइफोनका तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन्। सिकोङ केकेकै एकाउण्टबाट आफ्नो परिवारका महत्वपूर्ण सामानका बारेमा भन्छन्। गत वर्ष उनले कुकुरलाई १५ हज ...
बिक्रिमा नरेन्द्र मोदी, १ हजार भारु तिर्नुस् आफुसँगै राख्नुस् !
केही महिना अघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ बिक्रिमा रहेको समाचार आएको थियो । अहिले उनै सरिफका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई बिक्रिमा राखिएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको मूल्य १ करोड तोकिएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री त्यो भन्दा कैयौँ गुणा सस्तो मूल्यमा किन्न पाइनेछ । भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ९ सय ५८ भारुमा किन्न सकिन्छ । ९ सय ५८ भारु खर्चिएपछि २४ सै घण्टा मोदीसँगै बस्न पाइनेछ । भारतीय एक कम्पनीले धमाधम नरेन्द्र मोदीको ...
मातृसत्तात्मक गाउमा कुमार युवकको बाटो हेर्दैछन् वैँशले उन्मुक्त युवतीहरु !
वैँशले उन्मुक्त भएका हरेक युवतीहरुको सपना हुन्छ की उनको विवाह धुमधामसँग होस् । तर दुनियामा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ महिलाहरुका लागि बिहे गर्ने कुरा निकै कठीन कार्यको रुपमा रहेको छ । रुप र यौवनले मस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मनको राजा नभेट्टाएर पर्खिरहनुु उनीहरुको नियति बनिरहेको छ । ब्राजिलको नोइवा दो कोरडेएरो गाउँमा २० देखि ३५ वर्षसम्मका युवतीहरु आजपनि आफ्नो वरको खोजीमा जुटिरहेका छन् । हजारौँ युवतीहरु जवानी बिसाउनका लागि विवाहको पर्खाइमा छन् व्यग्रताक ...
फेसबुकमा अरुले नदेखून् भनेर लुकाएको फ्रेण्ड लिस्ट हेर्ने तरिका यस्तो छ !
सोसल मिडियामा फेसबुक एउटा यस्तो प्लेटर्फम बनेको छ जहाँ हरेक जो कोही एक अर्कोसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुकमा रहेका फेसबुक फ्रेण्डको सूचिलाई लुकाउने वा हाइड गर्ने गर्दछन् । ता की उसका को को र कति साथी छन् भन्ने कुरा अरुले नदेखुन् । यसरी हाइड गरेपछि म्युचुअल फ्रेण्ड बाहेक अन्यको सूचि अरुले देख्न पाउँदैनथे । तर फेसबुकमा अरुले नदेखून् भनेर यसरी लुकाइएका साथीका सूचि गोप्य राख्न भने नसकिने भएको छ । किनकी यसरी तपाइँले हाइड ग ...
सावधान, धेरै प्रयोग गरिने परफ्युम तथा रुम फ्रेसरले बिरामी बनाउन सक्छ
मानिसहरुले धेरै महत्वका साथ कोठाको सजावट गर्छन् । कोठामा के राम्रो लाग्छ, कोठाको कहाँनेर के राम्रो लाग्छ, यो धेरै कुराहरुको सोचविचार गरेर एकदम हिफाजतका साथ कोठाको सबै कुनाहरु चम्काउछन् । यो कुनै नराम्रो कुरा पनि हैन । एउटा अनुमान अनुसार मानिसले आफ्नो जीवनको ९० प्रतिशत भाग आफ्नो कोठाभित्र विताउछ । यो राम्रो कुरा हो आफ्नो घरमा आराम र मन परेको चीजवस्तु हुनछन् र तीनीहरुकै कारण मानिसलाई कोठमा धेरै राम्रो लाग्छ, तर यो थाहा नहुन सक्छ फर्निचरदेखि पर्दासम ...
बस र पोलको बिच गर्धन फसेपछि युवकको दर्दनाक मृत्यु
३ असोज । भारतको इन्दौरस्थित खंडवामा एउटा निकै दर्दनाक घटना सार्वजनिक भएको छ । एक मानिस बस र पोलका बीच अड्किएपछि उनले निकै तड्पिएर ज्यान गुमाएका छन् । ३० जनाभन्दा बढि मानिसहरु सवार रहेको उक्त बसमा ती युवक निकै बेरसम्म अड्किए तर चाहेर पनि उनको कसैले पनि ज्यान बचाउन सकेन । एमपी–३७ पी–०११९ नम्बरको बस स्थानीय खंडवादेखि मुदीसम्म जाँदै थियो । यात्राकै बिचमा पुलिया भन्ने स्थानमा जाम देखेपछि ड्राइभरले आफूसँगै बसेका सचिन पिता हरलाल (३२) लाई ओर् ...
सन् १९२९ मा पत्ता लागेको यो गाउँमा सबैजना बस्छन् निर्वस्त्र !
संसारका लगभग सबैजसो देशमा रहनसहन, खानपिन र दैनिक व्यवहार एक अर्काभन्दा निकै फरक हुन्छन् । भिन्न हुँदाहुँदै पनि लगभग संसारका सबैजसो मानिसहरुलाई गाँस, बास कपासको आवश्यक परेकै हुन्छ । तर एउटा यस्तो देश छ जहाँका मानिसलाई गाँस र बासको आवश्यक त पर्छ तर कपास चाहिँदैन । अर्थात् यहाँका मानिसहरुले लुगा लगाउँदैनन् । थाहा पाउनुस् यसको के कारण हुनसक्छ । ब्रिटेनको हर्टफोर्डशायरको ब्रिकेटवुडमा ‘स्पिलप्लाट्ज’ नामक एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँका मानिसहरु वि ...
१८ क्यारेट सुनको ट्वाइलेट न्युयोर्कमा
२ असोज, न्युयोर्क । तपाईहरूले प्रायः सुनको सिंहासन र सुनको गहनाको विषयमा सुन्नु भएको होला। तर, के सुनको ट्वाइलेटको बारेमा कहिले सुन्नु भएको छरु हो, अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित गुगेनहीम संग्रहालयमा सुनको यस्तो ट्वाइलेट छ, जहाँ मानिसहरू मज्जाले बसेर दिसापिसाब गर्न सक्छन्। यो संग्रहालयमा निमार्ण भएको १८ क्यारेट सुनको ट्वाइलेट खाली हेर्नको लागि मात्र नभई, प्रयोगका लागि पनि राखिएको छ। संग्रहालयमा थुप्रै यस्ता वस्तुहरू छन्, जसको राम्रै चर्चा भइरहेको छ। तर ...
जो हास्छ त्यो धेरै बाच्छ, हाँस्नुस तनाव कम गर्नुस् !
हाँसो मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो । जनावर र पशुपक्षी हास्न सक्दैनन् । विशेषतस् मानसिक स्वास्थ्यका लागि हासो अनिवार्य छ । विदेशमा उपचार प्रक्रियामा प्रयोग भएको हास्य चिकित्सालाई नेपालमा पनि स्विकार्न थालिएको छ । जो कसैले सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्ने हासोले औषधिको काम गर्छ भने किन नहास्ने रु मुख्यतस् आधुनिक जीवनमा तनावपूर्ण दैनिकी बिताइरहेकाहरूलाई तनाव कम गर्न हासोले औषधिको काम गर्छ स् स्वाभाविक हाँसोले शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्यमा सकारात्मक प् ...
हेड हन्टर्स राजाका ६० श्रीमतीः म्यान्मारमा खाने, भारतमा सुत्ने के तपाईंले कुनै यस्तो ठाउँको बारेमा सुन्नुभएको छ जहाँका मानिसहरु बिना पासपोर्ट र भिजा नै एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने गर्दछन् । जहाँका राजा कुनै एउटा देशमा खान्छन् र सुत्नलाई अर्को देश जान्छन् । सायद यस्तो ठाउँ बारे तपाईंलाई थाहा छैन होला । भारतमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँ माथि उल्लेखित यी सबै कुरा हुन्छन् । भारतको नागाल्याण्डको लोंगवा गाउँमा कोन्याक जनजाती बसोबास गर्दछन् । वास्तवमा यो गाउँको आधा हिस्सा भारतमा त अर्को हिस्सा म्यान्मारमा छ । यो जनजा ...
८० हजार दाइजो नपाएको झोंकमा कमलेशको नाक यसरी काटियो !
परिवारले दाइजोको लागि खर्च उठाउन सक्दैन भन्दै एक महिलाको विगत आठ वर्षदेखि सँगै बस्दै आएका श्रीमानले उनको नाक काटिदिएका छन् । उत्तर भारतस्थित उत्तर प्रदेशको सज्जनपुरकी कमलेश राथोर, २५, लाई उनका श्रीमान् संजीव राथोर, २७, ले दाइजो स्वरुप ८० हजार नदिएको रिसमा उनको नाक काटिएको हो । कमलेश भन्छिन्, ‘दाइजोका लागि उनले मलाई दैनिक सताउने गर्दथे । उनले तारन्तार मसँग ८० हजार रुपैयाँ दाइजो मागिरहन्थे ।’ ‘मैले निरन्तर भन्थें कि मेरो बुवा निकै ...
यस्ता महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्दै नराख्नुस् !
बासना टाउकोमा पसेपछि उसले केही देख्दैन । तर, त्यो यस्तो भनिएको छ शारिरीक सम्बन्ध बनाउन भन्दा पहिले धेरै सोचविचार गरेर गर्नुपर्छ । विभिन्न शास्त्रहरुमा बताएको छ कि कस्तो महिलासँग यौन सम्पर्क राख्नु हुदैन् भनेर । – विभिन्न शास्त्र अनुसार विधवा महिलासँग यौन सम्पर्क राख्नुहुदैन् । यदि यौन सम्पर्क बनाउनु नै छ भने पहिले उनीसँग विहे गर्नुपर्छ ।– साथीको श्रीमतीसँग पनि यौन सम्पर्क राख्नु पाप नै मानिन्छ । यसको लागि साथीसँग विश्वासघात गर्न उचित ...
सन् २०२० सम्म सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई
३० भदौ, ब्रसेल्स । यूरोपियन युनियनले आगामी चार वर्ष भित्र आफ्ना सदस्य राष्ट्रका सार्वजनिक स्थलमा सित्तैमा वाइफाई प्रदान गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। इयूको कार्यकारी संस्था युरोपियन कमिसनका प्रमुख जीन(क्लाउड जनकरले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सदस्य राष्ट्रले कम्तीमा आफ्नो एक शहरमा ५ जी मोबाइल सञ्जाल २०२० सम्ममा विस्तार गरोस् भनेर इयूले चाहेको पनि उनले बताएका छन्। डिजिटल प्रविधि जीवनका सबै पक्षमा छाएको बताउँदै प्रत्येक मानिसले इन्टरनेटमा पहुँच पाउनुपर्ने ज ...
यसरी समातिए सेक्स रकेटबाट सांसदका छोरा
बेंगलोर प्रहरीले आइतबार वेश्यावृत्ति रकेट चलाउने सिलसिलामा चार जनालाई पक्रेको छ । कुशलनगर प्रहरी बेंगलोरले राजीव, प्रमोद, मधु र घरका मालिक अन्नालाई गिरफ्तार गरेको हो । तीमध्ये राजीव जेडीएस सांसद कृष्ण कप्पाका छोरा हुन् ।केटीको नाम सार्वजनिक नगरेको र उनलाई रेस्क्यु तथा ती चारै जनालाई जेल पठाईएको छ । अदालत बन्द भएको कारणले तीन दिनसम्म जेल बसेका ती आरोपीहरुलाई बुधबार कार्वाहीको सुनुवाई हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । ...
श्रीमती बिक्रीमा राख्ने इ–लिलामी साइट इबेमा ६५ हजार ८ सय ८० पाउन्डको बोली
बेलायतमा एक ३३ वर्षीय व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई बिक्रीका लागि इ–लिलामी साइट इबेमा राखेका छन्। उनको श्रीमतीलाई खरिद गर्न ६५ हजार ८ सय ८० पाउन्डको बोली लागिसकेको बताइएको छ। ती व्यक्तिले आफू बिरामी पर्दा श्रीमतीले कुनै संवेदना नदेखाएका कारण आफूले बाध्य भएर यस्तो कदम उठाउनु परेको बताएका छन्। वेकफिल्ड योर्कसायरमा बसोबास गर्ने साइमन ओ’केन नाम गरेका व्यक्तिले गत साता लिलामी साइट इबेमा आफ्नो २७ वर्षीय श्रीमती लियन्डाको फोटो राखेका थिए। र, वि ...
कुखुरा पहिला कि अण्डा ? पत्ता लाग्यो वैज्ञानिक तत्थ्य !
कुखुरी पहिला आयो कि अण्डा ? यो प्रश्न मानिसहरुबिच जहिले पनि विवादमा रहेको थियो । तर, यसको ठोस उत्तर भने कोहीसँग पनि रहेको थिएन । तर, अब वैज्ञानिकहरुले दाबी गर्दै भनेका छन्,‘संसारमा कुखुरी नै पहिला आएको थियो ।’ब्रिटेनका वैज्ञानिकहरुले यसबारे प्रमाण भेट्टाइएको बताएका छन् । बेलायतमा रहेको शेफील्ड तथा वारविक विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले अण्डाको परिक्षण पछि उक्त निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् । वैज्ञानिकका अनुसार अण्डामा रहने छिल्कामा एउट ...
सासुकै सामुन्ने प्रेमीसँग राशलीला गर्ने बुहारीको यो तमाशा !
भारतको ग्वालियरबाट यस्तो सनसनीपुर्ण खबर आएको छ, जहाँ एउटा बुहारीले मानवताको साथसाथै सबै नातागोतालाई पनि लाज लाग्ने पटकथा लेखेर छोडेकी छन् । सामाचारमा जनाए अनुसार महिलाका पति कारागार भएपछि उनले पतिको साथीसँग अवैध सम्बन्ध बनाएकी थिइन् । तर, उनको यो रासलीला बढी टिक्न पाएनन् र उनकी सासुले एकदिन प्रेमीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा फेला पारिन् । त्यसपछि सासुले बुहारीलाई काहीँ बाहिर जान र उसलाई भेट्न आउनेहरुलाई पनि रोक्न थालिन् । यो कुरा बुहारीलाई मन परेन र सा ...
मुखमैथुन वा ओराल सेक्समा मरिहत्ते गर्छन युवतीहरू !
सेक्स विनाको जीवन परिकल्पना गर्न पनि सकिन्न । सेक्स मानवीय जीवनको अपरिहार्य कुरा हो यसमा दुईमत नहोला । उसो त समयसँगै सेक्सको परिभाषा तथा आयामहरू पनि परिवर्तन अर्थात् आधुनिक हुँदै गइरहेको छ । पहिले विवाहअगाडिको सेक्स अपराध नै मानिन्थ्यो भने आजभोलि मन मिलेपछि जुनसुकै बेला सेक्स गर्दा पनि हुन्छ भन्न थालिएको छ । त्यस्तै पहिले सेक्स भनेको पुरुषको लिंग महिलाको योनीमा पसाएपछि मात्र हुन्छ भन्ने सोच थियो र मानिसले सोही अनुरूप सेक्सको मज्जा लिन्थे तर आजकल ...
दक्षिणपंथीको सेक्स जीवन कम्युनिष्टको भन्दा धेरै उत्कृष्ट !
सेक्स जीवन विचारधाराबाट समेत प्रभावित हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । एउटा सर्वेक्षण अनुसार दक्षिणपंथी विचारधाराको व्यक्तिको सेक्स जीवन कम्युनिष्ट विचारधाराको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ । टेलिग्राफको एउटा प्रतिवेदन अनुसार यो सर्वेक्षण ‘युगभ’ को तर्फबाट गरिएको थियो । यसमा ब्रिटेन, स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्स र डेनमार्कका १९ हजार भन्दा बढी युवा सहभागी थिए । उनीहरुको विचारधारा र सेक्स जीवनलाई लिएर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा जुन व्य ...
प्राण त्याग्नु अघि ५ वर्षीया मेरीको हृलयविदारक विवाह समारोह यसरी सम्पन्न भयो !
मानिसको इच्छाहरु असिमित हुन्छन् । अस्वभाविक मृत्युवरण गर्नेहरुका थुप्रै चाहना तथा इच्छाहरु त्यत्तिकै रहन सक्छन् । अमेरिकाको एक परिवारले भने सिष्टिक फाइब्रोसिस र पुरानो निमोनियाका कारण मृत्युको मुखमा पुगेकी आफ्नी ५ बर्षीया छोरीको बिहे गर्ने इच्छा पूरा गरिदिएका छन् । परिवारका अनुसार ५ बर्षीया मेरी मास्सेले सदैव आफ्ना बेष्टफ्रेण्ड दामिनसँग बिहे गर्ने सपना देखेकी थिइन् । प्राण धातक रोगका कारण लामो समयसम्म अस्पतालमा थलिएकी मेरी २ बर्षको हुँदादेखि दामि ...
स्तन स्वस्थ तथा सुन्दर राख्न अपनाउनुस् यी उपायहरु !
महिलाको संवेदनशील अंग मध्येको एक हो स्तन । स्तनले महिलाको सौन्दर्यतालार्इ सुन्दर राख्दछ । विशेषगरी पुरूषहरूको पहिलो नजर नै महिलाको स्तनमा पर्छ भन्दा फरक नपर्ला । तर तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर असर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ र सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छः लामो समयसम्म घोप्टो परेर नसुत्नुहोस :लामो समय घोप्टो परेर सुत्दा तपाईको स्तनको आकारमा परिवर्तन हुनुका स ...
थुकले पाहुनाको स्वागत गर्ने चलन
खास गरेर घरमा आएको पाहुनालाई बडो जोशका साथ नयाँ नयाँ परिकारहरु पकाएर स्वागत गरिन्छ । तर, एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ घरमा आएका पाहुनालाई थुकेर स्वागत गरिन्छ । केन्या र तान्जेनियामा रहने मसाई जनजातिमा भेट हुनासाथ एकअर्काको हातमा थुकेर अभिवादन गर्छन् । एकआपसमा हात मिलाउँदा पहिले दुबैजना एकअर्काको हातमा थुक्ने अनि हात मिलाउने गर्छन् । यो मसाई सामुदायमा चलिआएको परम्परा नै हो । यस बाहेक उनीहरुमा नवजात शिशुको शरिरमा पनि थुक्ने परम्परा रहेको छ । यस्तो गर्नाल ...
'ब्रतको समयमा सेक्स गर्दा भोक बढी लाग्छ'
हाम्रो समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु व्रत बस्ने गर्छन् । धर्मकर्ममा पनि बढी नै सक्रिय हुन्छन् महिलाहरु । खासगरी तीज पर्वमा अधिकांश महिलाहरु व्रत बस्छन् । अन्य पर्वहरुमा पनि व्रत बस्ने चलन छ । तर, यो समयमा अधिकाँश जोडी सेक्स पनि गर्छन् त कतिपयलाई भने सेक्स गर्दा व्रत भंग हुने वा पाप लाग्ने डर लाग्छ । लामो समयसम्म चल्ने व्रत हो भने चाँहि शरीरमा उर्जा घट्दै जाँदा सेक्सको चाहाना कम हुँदै जान्छ । यदि तपाइँ धार्मिक व्रत गर्दै हुनुहुन्छ भने सेक्स नगर् ...
चीनको चमत्कार, मरुभूमि माटोमा परिणत !
चिनियाँ वैज्ञानिकले बालुवालाई माटोमा परिणत गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । जसका कारण सुख्खापनसँग लड्न सकिने उनीहरुको बुझाइ छ । चीनको विश्वविद्यालयको एक अध्ययन टोलीले अध्ययनबाट एउटा यस्तो तत्व विकसीत गरेको छ जसले बालुवामा पानी, पोषण तत्व र हावा बनाइरहन सहयोग गर्छ । यस तरिकालाई उत्तर चीनको एक मरभूमिमा प्रयोग गरिएको थियो । जहाँ चामल, टमाटर लगायतका चीज उब्जीएका थिए ।यस तरिकाबाट मरभूमिमा पनि बोटबिरुवा रोप्न सकनिे विश्वास गरिएको छ । ...
प्रहरीको अनुमति बिना सम्भोग गरे ५ वर्ष जेल सजाय !
अमेरिकाको दक्षिणी यर्कशायर क्षेत्रका युवाले महिलासँग सेक्स गर्न एकदिन पहिले नै प्रहरीबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सेक्स गर्नु भन्दा एक दिन अगाडी नै प्रहरीलाई जानकारी गर्नुपर्छ जब प्रहरीले युवकलाई अनुमति दिन्छ तब मात्रै युवाले सेक्स गर्न पाउछन् ।गएको धेरै महिनादेखि न्युयोर्कको प्रहरीले युवकका क्रियाकलाप लाई धेरै नै निगरानी गरिरहेको छ । उक्त युवाको इन्टरनेटमा पनि निगरानी गरिएको छ । युवकसँग स्थानिय प्रहरी यस्तो एक्शन अदालतको त्यो निर्णय पछि गरिरहेक ...
रसियाको यो नदीमा एकाएक रातो पानी बगेपछि !
रसियाको औद्योगिक क्षेत्र नजिकै रहेको एक नदी एकाएक रगतजस्तो रातो बग्न थालेको छ । तर यो कुनै श्राप वा अपशकुनको लक्षण होइन । यसको कारण कारखानाबाट निस्कने विभिन्न रसायन हुनसक्ने विभिन्न स्रोतले बताएको छ । नदी रगतजस्तो रातो भएपछि रसियाको नोरिल्स्कका स्थानीयले बुधबार यसका विभिन्न तस्बिरहरु इन्स्टाग्राममा राखेका थिए । यस्तो हुनुका पछाडि सटिक वास्तविकता थाहा नभएको स्रोतले बताएको छ । इबेरियन टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार नदीको रङमा परिवर्तन भएको यो पहिलो पटक हो ...
आफ्नै आमासँग सौता जाने छोरीहरु !
बंग्लादेशको मंडी नामक जनजातिमा छोरीहरु आफ्नै आमाको सौता जाने अचम्मको चलन छ । यहाँ छोरीहरु आफ्नै बाबुको श्रीमती बन्छन् । एउटा पतिको सानो उमेरमा नै मृत्यु हुन्छ भने आमाले दोस्रो विहे गरेका पतिसँग आफ्नो छोरीको पनि विहे हुने परम्परा रहेको छ । जब ओरोला नामकी युवती धेरै सानो उमेरकी थिईन् उति बेला उनका बुवाको मृत्यु भएको थियो । बुवाको मृत्युपछि आमाले नाँटेन नामका पुरुषसँग दोस्रो विहे गरिन् । विहे गर्दा उनले आफू भन्दा सानो उमेरका केटासँग विहे गरिन् ताकि ...
सिग्नेचर बाट थाहा पाउनुस् कस्को स्वभाव कस्तो !
के तपाईलाई थाहा छ तपाइले गर्ने हस्ताक्षरले कति महत्व र अर्थ बोकेको हुन्छ भन्ने कुरा ? तपाइले गर्ने हस्ताक्षरले तपाईको चरित्र पनि झल्काएको हुन्छ । हामी तपाइलाई बताउँछौ कस्तो हस्ताक्षर भएको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर । जसको सिग्नेचर सरल र सोझो हुन्छ उसको स्वभाव पनि सरल खालको हुन्छ । यस्तो खालको व्यक्तिको हृदय पनि विशाल खालको हुन्छ र समाजमा मान प्रतिष्ठा हुन्छ । जुन मानिसको हस्ताक्षर स्पष्ट र गोलोकार विन्दुको हुन्छ सो व्यक्ति राम्रो चिन् ...
सेक्स गर्दा आवाज निकाल्ने युवतीलाई जेल सजायँ
अमेरिकाको पेन्सलवेनियामा एक युवतीलाई यौन सम्पर्क गर्ने क्रममा ठूलो स्वरमा आवाज निकालेको भन्दै जेल सजायँ सुनाइएको छ । एक अंग्रेजी पत्रिकाका अनुसार अमेंडा मेरी वारुफेल नामकी २५ वर्षीय यी युवतीविरुद्ध उनकै छिमेकीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि हंगामा गर्ने र ह्यारेसमेन्टको घटना पनि दर्ता भयो । पुलिस केस दर्ता गराउँदै एक छिमेकीले अमेंडाको पोल खोल्दै भनिन्– ‘अमेंडाले शारीरिक सम्बन्ध राख्दा फर्निचर पुरै हल्लिरहेको थियो । वरीपरीका मानि ...
सिंहको अनुहार परेको कुकुर संसारकै महंगो, मूल्य सुनेरै होस उड्छ !
यदि सिंह अगाडि आउँछ भने मान्छेहरुको शरीर थर्कन्छ । तर, एउटा कुकुर यस्तो छ जसलाई देखेपछि सिंह पनि लजाउछ । हुबहु सिंहजस्तै देखिने यो कुकुर पुरै कुकुर भने होईन् तर यो प्रजातिको कुकुरलाई खरिद गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ ।यो प्रजातिको कुकुर किन्न मानिसहरु किन चाँही मुखले भनेको मुल्य तिर्न तयार हुन्छन् त रु यो भने उत्सुकताको कुरा छ । म्यास्टिफ प्रजातिको यो कुकुर देख्नमा मात्रै सिंह जस्तो नभएर त्यति नै बलवान पनि छ । त्यसैले होला संसारमा ...
केटीको दुई वटा योनी भेटिएपछि हगांमा !
यदि शरीरमा कुनै पनि अंग हुनुपर्नेभन्दा बढी हुन्छ भने त्यो मानिसको लागि अचम्म नै हुन जान्छ । तर, एउटा केटीलाई डाक्टरहरुले दुईवटा योनी छन् भनेपछि निकै झट्का लागेको बताईएको छ । हेजल जोंसलाई जबसम्म १८ वर्ष पुगेको थिएन् तबसम्म उनलाई आफू अरु महिलाहरु जस्तो सामान्य छैन् भन्ने कुरा थाहा थिएन् । यद्यपी उनको दुईवटा योनी थियो । पहिलो चोटी जब उनको आफ्नो प्रेमीसँग सम्बन्ध भयो तब उनलाई उनको प्रेमीले भन्यो तिम्रो शरीर अरु केटीहरुको जस्तो छैन ।जब उनले डाक्टर जाँ ...
लौ हेर्नुस् दिनहु तिनवटा माउसुलीको सुप खाने मान्छे !
विदेशी टेलिभिजनमा देखिने विभिन्न एडभेन्चर शोहरुमा मानिसहरुले सर्प, किराफट्यांग्रा तथा छेपारो लगायतका जिवहरु खाएको देख्नुभएकैै होला । यस्ता टेलिभिजन कार्यक्रममा देखाइएजस्तै साँच्चै उनीहरुले ती चिज खान्छन् की खान्नन् त्यो दर्शकलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर भारतमा भने एकजना यस्ता व्यक्ति छन् जो माउसुलीकोे सुप नखाइकन बस्नै सक्दैनन् । भारतको मध्यप्रदेशस्थित मैना गाउँमा बस्ने कैलाश नामका व्यक्ति माउसुली खाने कुराको शौखिन व्यक्ति हुन् । जसका कारण उनलाई मा ...
सेक्सका बेला यी पाँच गल्ती भुलेर पनि नगर्नुस् !
सेक्स जीवनलाई धेरै राम्रो बनाउन र रोमान्स गर्नका लागि यसको बारेमा राम्ररी ज्ञान हुन जरुरी छ । विद्यालयमा जीव विज्ञानको विषयमा पढेको वा त्यस्तै अश्लिलहरु देखेपछि जीवनमा जुन जानकारी मिल्छ त्यो भन्दा सेक्स धेरै फरक छ ।आज हामी त्यही विषयमा धेरै विज्ञहरुको अनुभवको आधारमा केही कुरा बताउन गईरहेका छौँ, जसलाई तपाईहरुले पनि सेक्सका दौरान बन्देज गर्नुहुने छ । १. आफ्नो लागि मात्रै सहज नहेर्नुस्, पार्टनरको च्वाइस पनि बुझ्नुस्सेक्सका दौरान आफूले चाँहेजस्तो मात ...
अण्डरवल्र्ड दाउद इब्राहिमलाई पक्राउ गर्नका लागि ५० जनाको ५ समूह परिचालन
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पाकिस्तानमा लुकेर बसेका अण्डरवल्र्ड दाउद इब्राहिम अब चाँडै नै भारतको पकडमा हुने अनुमान गरिएको छ । डन दाउद इब्राहिमलाई पक्राउ गर्नका लागि केन्द्रिय सरकारले नयाँ रणनीति बनाएको छ । यो रणनीतिको आधारमा ५ विशेष समूह बनाइएको छ जसमा ५० मानिसहरुको संलग्नता रहेको छ । यो समूहमा रअ र इडी लगायतका थुप्रै एजेन्सीका अधिकार समावेश छन् । यी अधिकारीहरुले दाउदको कालो धन्दा र उनका गतिविधिमाथि निगरानी राख्नेछ । यसका साथै दाउदको कारोबारलाई चौपट ...
यस्ता कन्यासँको सँगतले तपाइको भाग्य चम्किन्छ !
प्राचिन पुर्विय दर्शनमध्य सामुन्द्रिक शास्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो । जसले मानिसको शरीरको प्रत्येक अंगको आकार प्रकारको आधारमा उसको आचरण, स्वभाव, व्यवहार, भविष्य आदिबारे जानकारी गराउँदछ। साथै मानिसको शिरदेखि पाउसम्मका हरेक अंग विशेष लक्षणको हुने र ती अंगहरुबाट मानिसको गुण पहिल्याउन सक्ने हुन्छ। हामी यहाँ कुन कन्या कस्ती छन् भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरो बताउदै छौ।१. जुन कन्याका आँखा हरिणका जस्ता समान हुन्छन् सेतो भागको अन्तमा हल्का रातो ह ...
सत्र वर्षका विद्यार्थीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने शिक्षिकाको जागिर गयो
सत्र वर्षका एकजना छात्रसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा स्कटल्याण्डमा एउटा शिक्षिकाको जागिर गएको छ । ‘द सन’ मा छापिएको एउटा रिपोर्ट अनुसार स्कुलमा फ्रेन्च पढाउने २८ वर्षीय ईजाबेल ग्राहमले आफ्नो १७ वर्षीय छात्रलाई रक्सी खुवाएर धेरैपटक सम्पर्क गरेको आरोपमा शिक्षिकालाई जागिरबाट निष्कासन गरिएको हो । २०१४ जुनमा सेशन पुरा भएपछिको एउटा समारोहमा केही फोटो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो । ...
कारभन्दा महँगो घोडाको मूल्य १ करोड ८० लाख !
एउटा घोडाको मूल्य कति होला रु भारतमा एउटा घोडा पौने २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिमा बिक्री भएको छ । राजस्थानको पाली जिल्लामा मारवाडी नश्लको प्रभात नामको उक्त घोडा नारायणसिंह आकडावासले १ करोड ११ लाख भारुमा किनेका हुन् । ११ वर्षको उक्त घोडा भंवर सिंह राठौरले पाल्दै आएका थिए । घरजग्गा तथा खानी व्यवसाय गर्ने धनाढ्य नारायण सिंहले यसअघि मारवाडी नश्लकै दुइवटा पोथी घोडा पालेका थिए । जब उनले प्रभात घोडाको बारेमा सुने त्यसलाई जतिसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि किन्ने न ...
कुम्भकर्ण गाउँ, जहाँका मानिसहरु ६ महिनामात्र होइन वर्षाैसम्म सुत्दछन् !
रामायणमा कुम्भकर्ण भन्ने पात्र वर्षमा ६ महिना सुत्ने र ६ महिना जागा हुने गरेको कथा छ । यस्तो ६ महिने सुताई वास्तवमा पत्यार लाग्ने कुरा होइन । तर यो कलियुगमा समेत विश्वमा यस्तो गाउँ छ जहाँ एक जना मात्र होइन सबैजना कुम्भकर्ण छन् । कजाकिस्तानमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँ पुग्ने बित्तिकै जो कोहीलाई निद्रा लागिहाल्छ । यस्तो निद्रा केही दिन, केही महिना मात्र होइन केही वर्षसम्मको समेत हुनसक्छ । पछिल्लो ६ वर्षदेखि गाउँमा यस्तो सुत्ने महामारी फैलिएको छ । सन् ...
दुनियाकै सेक्सी महिला, जसको हातबाट पक्राउन लालायीत हुन्छन् अपराधी
दुनियामा को मुर्ख होला, जसले आफुलाई कुनै पुलिसले पक्रियोस् भन्ने चाहन्छ । तर जर्मनीमा भने मानिसहरु एक जना पुलिस अधिकारीको हातबाट आफुलाई पक्राउन चाहन्छन् । भलै नपक्रिउन्, कम्तीमा ती पुलिसले आफुलाई नजर त लगाइदिउन् भन्ने ठान्छन् । हो, जर्मनीकी वरिष्ठ प्रहरी आयुक्त एड्रिएन कोलेसजर यस्ती महिला प्रहरी हुन् जसको हातबाट आफुलाई पक्राउनका लागि अपराधीहरुबीचमा पनि हानथाप हुन्छ । कोलेसजरको सुन्दरतामा पुरुष अपराधीहरु समेत यति धेरै नतमस्तक छन् की उनको हातबाट पक ...
अमेरिकाको मेयरमा कुकुर निर्वाचित !
सुन्दैमा अनौठो र अपत्यरिलो । अमेरिकाजस्तो विकशित देशको सहरमा मान्छे नभई कुकुर मेयर हुन्छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । विश्वको तेश्रो धेरै जनसंख्या भएको देशमा मान्छे नै नपुगेर वा मान्छेको क्षमता नभएर कुकुरलाई मेयर बनाइएको त पक्कै होइन होला । आखिर किन पछिल्लो तिन कार्यकाल लगातार उक्त सहरमा एउटै कुकुर मेयर पदमा निर्वाचित भैरहेको छ त रु हृो, अमेरिकाको मिनिसोटा राज्यमा पर्ने सानो सहर कोर्मोरेन्टमा नौ वर्षे ड्युक नामक कुकुर लगातार तेश्रो ...
मोबाइल हरायो ? नआत्तिनुस्, यसरी पत्ता लाग्छ हराएको मोबाइल !
मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा खोजी गर्नका लागि आइएमइआई नम्बर भएमा सजिलो हुन्छ । प्रत्येक मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर फरक फरक हुन्छ । आइएमइआई भनेको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी हो । यो मोबाइलको परिचय दिने १५ वा १७ अंकको हुन्छ । यो विशेष गरी मोबाइलको पछाडिको भागमा अर्थात् ब्याट्री राख्ने ठाउँको मुनि लेखिएको हुन्छ । त्यस्तै मोबाइलमा *#06# डायल गरेर पनि आफ्नो आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ । मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा नजिकको नेपाल प्रहरीको ...
मोदीका नेताको चर्तिकला, हिरोइनको बलात्कार !
भारतको मुम्बईमा सत्तारुढ दलका नेताले एक मोडल तथा हिरोइनको बलात्कार गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी वीजेपी सम्बन्ध एक क्षेत्रीय नेताले २५ वर्षीय हिरोइनको बलात्कार गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । नेताको नाम खुलाइएको छैन् । घटनाको कुरार प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अभियुक् ...
राशीमा भर पर्छ मानिसको यौन चाहना, जानीराखौ कुन राशीको यौन चाहना कस्तो ?
सबै मानिसको यौन ब्यवहार फरक फरक हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रले पनि मानिसको सोख र ब्यवहार राशी अनुसार नै फरक हुने गरेको बताउछन्। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशी भएका व्यक्तिले कस्तो यौन व्यवहार गर्छन ? जानिराखौँ : मेष राशी – यस राशीका ब्यक्तिहरुमा कामबासनाको भावना धेरै हुन्छ। लामो समयसम्म यौनसम्पर्क गर्न यिनीहरु रुचाउँछन। कम समयमा नै प्रेमको भरपुर रोमान्स उठाउन चाहन्छन। यौनसम्पर्कको समयमा छिटै आवेशमा आउँछन। यस कारण यो राशीका मानिससँग मन बचन स ...
छोरीज्वाईको सुहागरातमा आमाको प्रत्यक्ष निगरानी !
हरेका देशमा यौन सम्बन्ध राख्ने अनौठा, अजीब र हास्यास्पद तरिका प्रचलन छ । यसैक्रममा कोलिम्बियामा पनि अनौठो परम्परा पाइएको छ । जहाँ विहेपछि छोरीज्वाईले आमालाई आफ्नो कोठामा बोलाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् । यो पहिलो सम्बन्ध हुनाले यसलाई हनिमुन भनिन्छ । यहाँका महिला केवल आफ्नो पतिसँग मात्र सम्बन्ध राख्न पाउँछन् । कुनै अन्य परपुरुषसँग गरेको पाए सिधै हत्या गरिन्छ । यति मात्रै होइन् जब नब दुलही आफ्नो पतिसँग पहिलोपटक यौनसम्पर्क गर्न थाल्छिन् त्यो भन्दा पह ...
सामूहिक सम्भोगका अनुभवी ७ पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दै गर्दा कतारी राजकुमारी पक्राउ
कतारकी राजकुमारी शेखा सल्वा लण्डनको एउटा होटलमा ७ जनासंग शारीरिक सम्बन्ध राख्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेकी छन् । लण्डनका संचारमाध्यहरुका अनुसार यो खबर सार्बजनिक नगर्न कतारी दूतावासले ५० करोड युरोको प्रस्ताव गरेको जनाएका छन् । तर, एक अखबार फाइनेन्सियल टाइम्सले रकम अस्वीकार गरी खबर छाप्ने निर्णय गरेको समाचारमा जनाईएको छ । ब्रिटेन र स्कटल्याण्डका सुरक्षा एजेन्सीको संयुक्त टोलीले राजकुमारीलाई ७ जनासँग होटलमा रंगेहात भेटेको जनाईएको छ । राजकुमारीले आफ् ...
जान्नुहोस्, सेक्स गर्दा तुरुन्तै ठिक हुने रोग !
वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मेटाउछ । कसैको नजिक हुनु, उसलाई छुनु, प्यारले उसको शरीरको गहिराइमा आफ्नो एकान्त शेयर गर्नुले एक अलग्गै खालको नशा दिन्छ । र यसलाई सेक्सको जादु भनिन्छ । यति मात्रै होइन् यसले टाउकोको दुखाई क्षणभरमै ठिक पारिदिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न न्यूरोलजिस्ट्सका अनुस ...
४८ घण्टामा क्यान्सर ठिक पार्ने चामत्कारिक औषधि
क्यान्सरका विरामीमाथि २५ वर्ष लामो सोधपछि क्यालिफोर्निया युनिवर्सिटीको मेडिकल फिजिक्स एवं साइकोलोजीका सिनियर प्रोफेसर डा. हर्डिन बी जन्सले भनेका छन्– ‘क्यान्सरको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने किमोथेरापीले क्यान्सर पीडित विरामीलाई दर्दनाक मृत्युतर्फ धकेल्न सक्छ ।’ तर, क्यान्सरलाई केही घण्टामै ठिक पार्ने थुप्रै औषधिहरु छन् । अंगुरको विउको धुलो (सत्व) हालै भएको एक शोधमा यो कुरा प्रमाणित भएको छ कि अंगुरको विउको धुलो अर्थात सत्व अर्क ल ...
लगातार चार घण्टाको यौन सम्पर्कले ओलम्पिकमा पदक नै गुमाएपछि !
यौन सम्पर्कमा लिप्त हुँदा ब्राजिलकी एक खेलाडीले पदक नै गुमाएकी छन् । समाचार एजेन्सीकाअनुसार २० वर्षीया इन्ग्रिड ओलिवेरियामाथि उनकी जोडी १७ वर्षीया गिवोना पेड्रोसाले प्रतियोगिताको अघिल्लो रात यौन सम्पर्कमा लिप्त भएका कारण ब्राजिलले पदक गमाउनु परेको आरोप लगाएकी हुन् । उक्त आरोप सँगसँगै पेड्रोसाले अब उप्रान्त ओलिवेरियासँग जोडी नबाँध्ने घोषणा गर्दै एकल प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिने जनाएकी छिन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा गत वर्ष सम्पन्न पान आम गेम्समा रजत पदक ...
कसले भन्छ भगवान छैन भनेर, कलेजकी छात्राले जिब्रो काटेर चढाइन् 'काली माता’लाई !
भारतको मध्यप्रदेश राज्यमा एउटा निकै अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । १९ वर्षीया एक कलेजकी छात्राले आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा हुने आशामा माता कालीलाई आफ्नो जिब्रो काटेर चढाएकी छिन् । मध्यप्रदेशको टीआरएस नामको कलेजमा पढिरहेकी आरती डुबेले सपनामा माता कालीले आफूलाई जिब्रो काटेर चढाए इच्छा पूरा हुने बताएको भन्दै अर्को दिन रिभा गाउँमा रहेको कालीको मन्दिरमा आफ्नो जिब्रो चढाउन पुगिन् । हुन त मानिसहरुले भगवानको नाममा आफ्नो शरिरका अरु अंग चढाएको घटना हामीले सु ...
यौनसम्पर्क गर्न नमानेपछि सेक्स क्लिप यूट्यूबमा
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बलियामा एक किशोरीसँग बलात्कार गरी बनाइएको भिडियो सोशल नेटवर्किङ र यूट्यूबमा राखेको खबर आएको छ । यो घटनासँगै बलात्कृत भएकी युवती र परिवार तनावमा परेको छ । पुलिस अधीक्षक मनोजकुमार झाले बलिया शहर कोतवाली निवासी १६ वर्षीय युवतीलाई छिमेकी युवकहरूले गएको १० सेप्टेम्बरमा ननिहाल गाजीपुर लगेर गएका थिए । सोही स्थानमा किशोरीलाई नशालु पदार्थ खुवाएर साथीसँग मिलेर बलात्कार गरेको पुलिस अधीक्षक झाले बताएका छन् । बलात्कारको भिडियो बनाएर त ...
दिनमा ४० वटा चुरोट तान्ने दुई बर्षका बालक
इन्डोनेसियाका ‘आल्दी रिजाल’ नामक एक बालक दुई बर्षको हुँदा उनका तस्बिरहरु समाजिक सञ्जालमा निकै भायरल भएका थिए । ति तस्बिरहरुमा आल्दीले मज्जासित चुरोट तानिरहेको र धुवा उडाइरहेका थिए । आल्दी एक दिनमा ४० वटा भन्दाबढी चुरोड पिउथे । ती तस्बिरहरु देखेपछि त्यहाँको सरकारले बालकलाई सुधारकेन्द्रमा लगेका थियो । सुधार केन्द्रमा गएपछि आल्दीले चुरोट पिउन छाडे ।चुरोटको लत छोडेपछि अहिले आल्दीलाई ‘ओभर–इटिङ’ अर्थात् धेरै खाने रोगको शिक ...
संसारको सबैभन्दा अग्लो र लामो सिसाको पुल, जसलाई देखेर तपाइ चकित पर्नुहुनेछ मध्य चीनको हुनान प्रान्तस्थित जाङ्जियाजीमा रहेको संसारको सबैभन्दा अग्लो र लामो सिसाको पुल शनिबारदेखि आगन्तुकका लागि खुल्ला गरिँदै छ । ४३० मिटर लामो, ६ मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुलमा तीन तहको ९९ वटा पारदर्शी ग्लास बिछ्याइएको छ । यो पुल जमिनभन्दा ३ सय मिटर अग्लो दुईवटा ठाडो भीरको बिचमा राखिएको छ । समितीका अनुसार डिजाइन र निर्माणमा यो पुलले १० वटा विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ । साङ्घाइ डेलीका अनुसार एक दिनमा ८ हजार मानिस पुलको वारपार गर्न सक्छन् । भ्रमणको ...
आफ्नै पिताको बच्चा जन्माउन चाहने यी युवती
भनिन्छ दुनियामा आमाबुवा भनेका भगवानका दोश्रो रुप हुन् । घरमा आमाछोरा र बाबुछोरीबीचको माया ममता साँच्चीकै अतुलनीय हुन्छ । कुनैपनि बावुका लागि उसकी छोरी दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर, श्रेष्ठ तथा पवित्र लाग्छिन् । तर अमेरिकामा एकजना बुवा र उनकी छोरीले भने यो मान्यतालाई तोडिदिएका छन् । त्यहाँ बुवा छोरीमा माया त छ, तर त्यो मायाको परिभाषा निकै फरक छ । उनीहरुबीचमा बाबुछोरीबीचको होइन, लोग्नेस्वास्नीबीच हुने प्रेम बसेको छ । ती दुइबीच पहिले प्रेम भयो, त्यसपछि ...
धेरैपटक पासवर्ड बदल्नु खतरनाक
हामीेले सधै सुन्दै आएको कुरा हो की आफ्नो इन्टरनेट अकाउन्टको पासवर्ड सधै बदलिरहनुपर्छ ता की अनलाइन अकाउन्टको पासवर्ड कुनै गलत व्यक्तिले थाहा पाउन नसकोस् । पछिल्ला दशकहरुमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको दुनियामा निकै चल्तीको धारणा हो यो । ठूला ठूला कम्पनीहरुमा पनि यो धारणाले यसरी जरो गाडेको हुन्छ की उनीहरुले आफ्ना अनलाइन अकाउन्टका पासवर्डहरु हरेक महिना, डेढ महिनामा बदलिरहेका हुन्छन् र प्रयोगकर्तालाई पनि आ आफ्ना अकाउन्टका पासवर्ड बदल्न बाध्य पार्दछन् । अ ...
पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनेको एकाउन्ट ह्याक हुने खतरा
एजेन्सीः तपाईंले चलाई रहनुभएको सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न एकाउन्टको पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने चाँडो चाँडो पासवर्ड परिवर्तन गर्दा एकाउन्ट ह्याक हुनसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । एजेन्सीः तपाईंले चलाई रहनुभएको सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न एकाउन्टको पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने चाँडो चाँडो पासवर्ड परिवर्तन गर्दा एकाउन्ट ह्याक हुनसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको टेलिकम नियामक निकाय फेडरल टेलिकम कम ...
एक दिनमा ४० वटा चुरोट तान्ने यि बालक
एजेन्सी – इन्डोनेसियाका ‘आल्दी रिजाल’ नामक एक बालक दुई बर्षको हुँदा उनका तस्बिरहरु समाजिक सञ्जालमा निकै भायरल भएका थिए । ति तस्बिरहरुमा आल्दीले मज्जासित चुरोट तानिरहेको र धुवा उडाइरहेका थिए । आल्दी एक दिनमा ४० वटा भन्दाबढी चुरोड पिउथे । ती तस्बिरहरु देखेपछि त्यहाँको सरकारले बालकलाई सुधारकेन्द्रमा लगेका थियो । सुधार केन्द्रमा गएपछि आल्दीले चुरोट पिउन छाडे । चुरोटको लत छोडेपछि अहिले आल्दीलाई ‘ओभर–इटिङ’ अर्थात् धे ...
बफादार कुकुर, जो ८ महिनादेखि अस्पताल बाहिर मालिक कुरिरहेको छ !
धेरैलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्ला, किनकी आजको हामी र हाम्रो समाज यति विधि स्वार्थी भएको छ । इमानदारी र बफादारी त हामीलाई मनै पर्दैन वा सुन्नै चाहदैनौं । तर हेर्नुहोस् त एउटा पशु जो अस्पतालको ढोका बाहिर उपचारका लागि भित्र पसेको आफ्नो मालिक आउने प्रतिक्षामा विगत आठ महिनादेखि कुरिरहेको छ । जबकि कुकुर मालिकको अस्पताल भर्ना भएको केही समयमा नै मृत्यु भइसकेको थियो । अस्पतालका कर्मचारीका अनुसार कुकुरको मालिकलाई उक्त अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो । ...
हराएको मानवता, घाईतेको अन्तर्वाताको क्रममा मृत्‍यु ! ( भिडियो सहित)
न्यूज रिपोर्टर्सले कहिले काही मानबतालाई पनि बिर्सिने गरेको पाईन्छ।कहिले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर रिपोर्टिङ गर्छन् भने कहिले काही आफ्नो न्युनतम मानबता पनि बिर्सने गरेको पाईने गरेको पाईन्छ । लाईभ देखाउने नाममा यस्ता संबेदनहिन बेला बखत हुने गरेका छन। लैटिन अमेरिकाको अल सल्वाडोरमा एउटा ट्रकले एक व्यक्तिलाई ठक्कर मार्यो । उनी घाईते भएर छटपटाई रहेको थियो ।तर एक महिला पत्रकारले उक्त व्यक्तिको मुखमा माइक लगाई प्रश्न सोघ्न शुरु गरिन । घायते सडकमा पल्टि ...
बाढीपिडीतका लागी तैरिने स्कुल
विश्वमा बाढीका कारण वर्षेनी लाखौँ मानिसहरु विस्थापित हुन्छन् र त्यसका कारण हजारौँ बालबालिकाहरुले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न पाउँदैनन् । बंगलादेशमा पनि बाढीकै कारण हरेक वर्ष १० प्रतिशत बालबालिकाहरु प्राथमिक तहमै स्कुल छाड्न बाध्य हुन्छन् । तर बाढीका कारण स्कुल छाड्न बाध्य बच्चाबच्चीहरुका लागि नयाँ विकल्प सिर्जना गरिएको छ, त्यो हो तैरिने स्कुल । यस्ता तैरिने स्कुलको सुरुवात गरेका हुन् बंगलादेशका एक आर्किटेक्ट मोहम्मद रिजवानले । उनले बाढी प्रभावित विद्यार ...
महिलाले अग्ला पुरुष मन पराउँनुका कारणहरु यस्ता छन् !
दक्षिण कोरियाको एक विश्वविद्यालयमा भएको एक अध्ययनले यो कुराको पुष्टि गरेको छ की जो दम्पतिहरुमा पति पत्नीको उचाइको उल्लेखनीय भिन्नता हुन्छ उनीहरुको दाम्पत्य जिवन सुखपूर्ण हुन्छ । यो अध्ययनको नतिजा अचम्म लाग्दो छ । किनकी अक्सर महिलाहरुले अग्ला पुरुषहरुलाई नै मन पराउने गरेको देखिएको छ । तथ्य अनुसार झण्डै ५० प्रतिशत महिलाहरु यस्ता पुरुषसँग डेट गर्दछन् जो उनीहरु भन्दा निकै अग्ला हुन्छन् । आखिर महिलाहरुले किन अग्ला पुरुष मन पराउँछन् रु यसका कारण यस्ता ...
सबैभन्दा महंगो गधाको दुध, तपाइ पनि खाने कि ?
गाइ, भैँसी, बाख्रा लगायतको दुध त पिउनु भएकै होला । तर के तपाइँले गधाको दुध खानुभएको छ । अधिक पौष्टिक तत्वका कारण गधाको दुध सबैभन्दा महंगो मूल्यमा बिक्ने गरेको छ, भारतमा । भारतको बैंगलोरमा एक चम्चा गधाको दुधको लागि मानिसहरुले ५० रुपैयाँ भारुसम्म तिर्ने गरेका छन् । नवजात शिशुहरुलाई गधाको दुध पिलाउँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने भन्दै आमाहरुले महगो मूल्य तिरेर गधाको दुध किन्न गरेका छन् । १ लिटर गधाको दुधको लागि २ हजार भारुसम्म दिन मानिसहरु तयार हुन्छ ...
धुम्रपान त्यागेको २० मिनेट पछि तपाइलाई उपहारै उपहार !
धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ । यो जान्दा जान्दै पनि धेरै व्यक्तिहरु धुम्रपानको कुलतमा फँसेका छन् । स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने भएकैले चिकित्सकहरु धुम्रपान नगर्न सुझाव दिन्छन् । सञ्चारमाध्यमहरुले समेत विभिन्न विज्ञापन तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम मार्फत धुम्रपानले गर्न सक्ने असरबारे जानकारी दिइरहेका छन् । धुम्रपानले मुटु रोग, क्यान्सर लगायतका विभिन्न समस्या निम्त्याउने भएकाले स्वस्थ्य जीवन जिउनका लागि पनि धुम्रपान त्याग्नु जरुरी छ । जबसम् ...
इस्टाग्राम ह्याकरको घर, पोर्न ह्याकिंगका बारेमा इन्स्टाग्राम मौन
ह्याकरहरुले सोसल साइट इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको अकाउन्टमा पोर्न आक्रमण सुरु गरेका छन् । प्रयोगकर्ताको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक गरी त्यसमा विभिन्न खाले पोर्न सामाग्रीहरु अपलोड गरिदिएका छन् ह्याकरहरुले । ह्याकिंगको चपेटामा परेका इन्स्टाग्राम अकाउन्टहरुमा प्रयोगकर्ताको बायोग्राफी, तस्वीर, नाम, सक्कली पेजमा परिवर्तन गरी त्यसको साटो विभिन्न खाले यौनिक सामाग्रीहरु अपलोड भएको पाइएको छ । साथै इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा विभिन्न पोर्न साइटका लिंकहरु समेत अप ...
छोरीको चिसो भगाउन २० करोडको आगो
अक्सर धनी मानिसहरु आफ्नो पैसालाई ऐश आराम तथा विलासितामा खर्चिन्छन् । तर दुनियामा केही यस्ता मानिस पनि हुँदा रहेछन् जसले आफ्नो पैसा यस्तो बेतुकको चिजमा खर्च गर्छन् जसलाई सुन्दैमा तपाइँ छक्क पर्नुहुन्छ र धिक्कार्नुहुन्छ । एकजना धनाढ्यले आफुसँग भएका पैसा आगोमा बालेर छोरीलाई लागेको ठण्डी भगाइदिएका छन् । कुनै समय हप्तामा ४२ करोड डलर सम्म कमाउने कोलम्बियाका खुंखार लागु औषध कारोबारी पोबलो एस्कोबारले आफ्नो परिवारलाई चिसोबाट बचाउनका लागि २० करोड रुपैयाँ भ ...
अनौठा सन्तलाल जसलाई गर्मीमा जाडो हुन्छ, जाडोमा गर्मी
भारतमा एक यस्ता मानिस छन् जसलाई चिसो मौसममा निकै गर्मी हुन्छ भने गर्मी याममा जाडोको महसुस हुन्छ । मानिसहरु जब ठण्डीयाममा चिसोका कारण कठ्यांग्रिएर नुहाउने कुरा सोँच्न पनि सकिरहेका हुँदैनन् तब सन्तलाल नामका ती पुरुषलाई दिनमा चिसो पानीले ३।४ पटक नुहाउनुपर्छ । ठण्डीयाममा बफर खेलाउन नपाए उनलाई चैन हुँदैन । जबसम्म बर्फ पग्लिँदैन, तबसम्म उनी बर्फमा लडिरहन्छन् ।उता गर्मी महिनामा जिउमा कपडा लगाउन पनि गर्मी भएको बेलामा सन्तलाल भने सिरक तथा कम्बल नओडी सुत्न ...
क्यालिफोर्नियामा साढे १२ फिटको लिंग
यौन खेलौना उत्पादन गर्ने एक अमेरिकी कम्पनीले साढे १२ फिट लामो लिंगको प्रतिमा बनाएको छ । अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियामा रहेको प्रख्यात सेक्स टोय उत्पादक कम्पनी पाइपड्रिम प्रोडक्टले यसलाई बनाएको हो । कम्पनीका प्रमुख निक ओर्लान्डिनोले संसारकै ठूलो लिंग बनाउन आफैँ अग्रसरता लिएपछि १२ फिट ४ इन्च उचाइको लिंग निर्माण गरिएको हो । लिंगसँगै अण्डकोषसमेत निर्माण गरिएको छ । लिंगको बीचतिरका भागमा नशाका रेखासमेत कोरेर यसलाई जीवन्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । ...
८० वर्षका वृद्धझैँ देखिने ४ वर्षीय बालक
जम्मा ४ वर्षको उमेरमा यदि कोही मानिस ८० वर्षको बुढाजस्तै देखिन थाल्दछ भने के होला रु साँच्चीकै यो दुनियाकै आश्चर्य हुन्छ । तर तपाइँले तस्वीरमा देख्नुभएको दृश्य साँच्चीकै यस्तै आश्चर्य र पीडाले भरिएको छ । यहाँ महिलाले कुनै वृद्धलाई उचालिरहेको र ती वृद्धले रुन्चे मुख लगाएको जस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा ती वृद्ध नभै ४ वर्षका बच्चा हुन् । बंगलादेशका यी ४ वषर्ीय बालकको नाम बायेजिद हुसैन हो । उनी प्रोजेरिया नामक बुढ्यौली रोगको चरम रुपबाट ग्रसित छन् । जस ...
लाखौंको गहना लगाएको बिरालोलाई कसले बनायो बन्धक, उद्दारमा पुरै गाँउ सक्रिय !
भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य राजस्थानमा एउटा निकै अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । गहनाले पूरै ढाकिएको बिरालो फरार हुँदा एक परिवारका सदस्य चिन्तामा परेका छन् । तपाईंलाई अचम्म लाग्यो होला गहना लगाएको बिरालोबारे यहाँ कुरा गर्दा । यस घटना पछाडि यस्तो कथा छ । इन्डियालाइभ टुडेका अनुसार फूलारामकी श्रीमती र उनका छोरीछोरीहरु घरभित्र खेलिरहेका थिए । खेल्ने क्रममा उनीहरुले आफ्नो पाल्तु बिरालोलाई भएभरका गहना लगाइदिएर फोटोसेसन गर्ने सोच बनाए । ‘बिरालोलाई ...
लौ हेर्नुस् पानीबाट चल्ने बाइक !
इन्धको बढ्दो खपत सँगै बढेको व्यवभार तथा धुवाँले वातावरणमा पारेका प्रभावलाई हेर्दा जो सुकै मानिसहरु पनि यो सोँच्दछन् की यदि पानीबाट गाडी चल्ने भए कस्तो होला ? इस्तो सोँचाई कोरा कल्पना मात्रै लाग्नसक्छ । तर अब यो कल्पना तथा सपना मात्र रहेन, यथार्थ बनिसकेको छ । ब्राजिलको साओपाओलोमा रहने रिकार्डो एजवेडोइस नामका एक व्यक्तिले पानीबाट बाइक चलाइदिएका छन् । वेबपोर्टल आरटी नेटवर्कका अनुसार रिकार्डोले साधारण मोटरसाइकलमा मेकानिकल परिवर्तन गरी त्यसलाई प ...
अब भिडियोमा भएका चिजहरुलाई छुन सकिने
भिडियो भन्ने चिज हेर्न तथा सुन्नका लागि हो । यसमा देखिएका चिज छुनछाम्न सकिने कुरा भएन । भिडियो चलिरहेको ग्याजेटको स्क्रिन मात्र हो छुने त । तर अब छिटै तपाइँले ग्याजेटको स्क्रिन होइन भिडियोमै देखिएका चिजहरु छुन सक्नुहुनेछ । अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजीका वैज्ञानिकहरुले यसका लागि नयाँ इमेजिंग प्रविधिको विकाश गरिरहेका छन् । जसमा परम्परागत क्यामरा तथा अल्गोरिदमको प्रयोग गरी इन्ट्रयाक्टिभ डाइनामिक भिडियोबाट कुनैपनि चिजको काल्प ...
१९६ देशको राजधानीको नाम कण्ठ पार्नसक्ने दुइ वर्षकी बच्ची
तपार्इंलाई कतिवटा देशको राजधानी कण्ठ छन् रु २०, २५, ५० वा बढि रु के तपाइँलाई १ सय ९६ वटा देशको राजधानीको नाम भन्न आउँछ रु खैर, जे होस् । एक जना २ वर्षकी बच्चीलाई भने एक सय ९६ देशको राजधानी कण्ठस्थ छ । स्कटल्याण्डको इडिनबर्गमा बस्ने रक्षिता नामकी २ वर्षकी बच्चीको यस्तो तिक्ष्ण दिमाग छ की उनले यति धेरै देश र त्यसको राजधानीको नाम भन्न सकिछन् । आम बच्चाले आफ्नो नाम समेत भन्न नसकने यो उमेरमा दिक्षिताले चाहीँ १९६ देश र राजधानीको नाम जानेकी हुन् । बुवा ...
यति विशाल बस जसको मुनिबाटै कारहरु दौडिन्छन्
चीनको हेबेइ प्रान्तमा यस्तो बसको परीक्षण गरिएको छ जो यति विशाल छ की यसको मुनिबाटै कारहरु दौडिन्छन् । यो बस दुइ मिटर अग्लो ट्रान्जिट एलिभेटड बस अर्थात् टिइबी हो । यो बिजुलीको सहायताले चल्दछ । यसमा एकपटक ३ सय जना यात्रु सवार हुन सक्छन् । यो बस ७२ फिट लामो तथा २५ फिट चौडा रहेको छ । ३ सय मिटर लामो ट्रयाकमा बसको ट्रायल गरिएको छ । आम सडकमा यसका लागि लगाइएका लिकमा यसको गति साठी किलोमिटर प्रति घण्टा हुने अपेक्षा गरिएको छ । चारवटा बस सम्मलाई एकसाथ जोडेर च ...
महिलालाई प्रेम गर्न बाध्य पार्ने औषधि बजारमा, जसले बचाउछ डिप्रेशनबाट !
पहिला पहिला मानिसहरु रोग ठिक पार्न तथा रोगबाट बच्न औषधि प्रयोग गर्थे । तर अहिले यौनका साथसाथै माया प्रेमका लागि पनी औषधि उत्पादन भएका छन् । एक एउटा यस्तो औषधि आएको छ जसले महिलालाई प्रेम गर्न बाध्य पार्छ । त्यो औषधिको नाम फिलिबेनसरीन हो । यो औषधिलाई महिला डिप्रेशनको सिकार हुनेबेला दिइन्छ । फिलिबेनसरीन नामको ‘यूस एफडीए’बाट मान्यता प्राप्त यो औषधि बजारमा एडीको नामबाट पाइन्छ । यो औषधि महिनावारी बन्द हुनु पूर्वका समस्याहरुसँग जुधिरहेका महि ...
डोनाल्ड ट्रम्पकी पत्नीका नग्न तस्वीर संसारभर भाइरल (फोटो फिचर)
अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पकी पत्नीका नग्न तस्वीर सार्वजनिक भएका छन् ।अमेरिकाको चर्चित पत्रिका न्योर्क पोष्टले सार्वजनिक गरेका डोनाल्डकी पत्नी मलेनिया ट्रम्पका नांगा तस्वीर अहिले संसारभर भाइरल भइरहेका छन् । टम्पकी पत्नि मलेनिया ट्रम्पले केही वर्षअघि न्यूयोर्क पोष्टकै एक म्यागजिनका लागि गरेको पूर्ण नग्न मोडलिङको तस्विर अहिले सार्वजनिक गरिएको हो ।पूर्व मोडल मलेनियाले सन् १९९६ मा न्यूयोर्क पोष्टका लागि नग्न तस्विर खिचाएकी थिइन् । ...
एकै साथ एक हजार सातवटा रोबोटले नाचेर विश्व कीर्तिमान बनाए बेइजिङ, साउन १७ । चीनमा एक हजार सातवटा रोबोटले एकसाथ नृत्य गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् । चीनको शानदोङ्ग सहरमा शनिबार आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा रोबोटको सामूहिक नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा एक हजार सातवटा रोबोटले एक मिनेट नृत्य गरेका थिए । ४३.८ सेन्टीमिटर लम्बाईका रोबोटलाई नृत्यमा समावेश गरिएको थियो । यसअघि ५४० रोबोटले सामूहिक नृत्य गरेर विश्वकीर्तिमान कायम गरेका थिए । ...
विश्वका ८ खतरनाक जेल (फोटो फिचर)
जेलमा बस्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन । तर पनि कोही भवितव्यका कारण अपराध गर्न पुग्छन् भने कोही आक्रोसमा त्यस्ता घटनामा संलग्न हुन्छन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएपछि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सजाय भोग्ने क्रममा मानिस जेलमा पुग्छ । जेललाई अहिले सुधार गृहका रुपमा प्रयोग गर्न विश्वव्यापी अभियान पनि चलिरहेको छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले जेलमा दिइने अमानवीय यातनाको घोर विरोध गर्दै आएका छन् । यद्यपि केही जेल यस्ता छन्, जसले यातना र हिंसात्मक घटनाका क ...
बादरले लुट्यो ३ लाख रुपैयाँ
भारतको उत्तर प्रदेशको मथुरा नजिकै रहेको हाथरसमा एउटा बादरले शनिवार एकजना ब्यापारीको ३ लाख रुपियाँ लुटेको छ। स्थानीयबासीले बादरलाई लामो समय लखेटेका थिए। लामो प्रयासपछि बादरले लुटेको रकम त फर्कायो तर ऊबाट पौने तीन लाख रुपियाँ मात्र बरामद भएको बताइएको छ। सासनीको एउटा गाउँमा बसोबास गर्ने शैलेश वार्ष्णेयको नानऊ रोडमा हिन्दुस्तान युनिलीवर लिमिटेडको दोकान छ। यहाँ स्थानीयवासीहरू दैनिक खाध्यान्यलगायतका सामान किनमेल गर्न आउने गर्दछन्। लुटपाट ...
यो कस्तो परम्परा ? जँहा पत्नीलाई कपडा लगाउने अधिकार हुदैन !
परम्पराका अगाडि जो कोही पनी झुक्छ । त्यसलाई नमान्ने कोही हुँदैन् । यस्तै एक अनौठो परम्परा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा वर्षौदेखि चल्दै आएको पाइएको छ । हिमाञ्चलको मणिकर्ण घाटमा पीणी नामको एक गाउँ छ । यहाँ विवाहित महिलाहरुलाई पाँच दिनसम्म कपडा लगाउने अधिकार छैन् । अर्थात नांगै हुन्छन् । सदियौदेखि चलिआएको यो परम्परामा विवाहित महिलाहरु पाँच दिनसम्म कपडा लगाउँदैनन् र पाँच दिनसम्म श्रीमान–श्रीमतीबीच बोलचाल तथा कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन् अर्था ...
हेर्नुस् अचम्मको जोडीः १७ वर्षे बेहुलाका ७१ वर्षीया बेहुली
भनिन्छ, मानिसको जोडी भगवानले बनाइदिएका हुन्छन् । विशेषगरी मानिसहरु आफूसँग विवाह गर्न उस्तै पारिवारिक स्थिती, उमेर समूह, पढाइलगायतका कुरा हेर्ने गर्दछन् । तर कुनै जोडी यस्ता पनि हुने गर्दछन् जसलाई यी कुराहरुको केही मतलब लाग्दैन । कुनै विवाह निकै अचम्मका पनि हुन्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै अचम्मको विवाहबारे बताउँदैछौं । टेनिसीकी ७१ वर्षीया अल्मेडा इरेलले एक १७ वर्षीय गेरी हार्डविचसँग विवाह गरेकी छिन् । यी दुबैको भेट एक अन्त्येष्टि कार्यक्रममा भएको ...
यस्तो पनि कलेज, जहाँ रोमान्सको पढाई हुन्छ !
यो दुनियामा एउटा यस्ता कलेज पनि छ जहाँ विद्यार्थीलाई रोमान्स गर्न सिकाइन्छ । त्यो पनि एक विश्वविद्यालयमै, जहाँ विद्यार्थीलाई कसरी रोमान्स गर्ने भनेर सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल दुबै तरिकाले सिकाउने गरिन्छ । चीनको तियानजिन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई रोमान्सको पाठ पढाइन्छ । विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने यो क्लासमा थ्योरी र प्राक्टिकल दुबै कक्षा हुन्छन् र विद्यार्थीहरुले कलेजमै रोमान्सको भरपूर ज्ञान लिन पाउँछन् । थ्योरी एण्ड प्राक्टिस अफ रोमान्टिक रि ...
अनौठो गाउँ, जहाँका मानिसहरु सर्पको विषले पनि मर्दैनन्
भारतको बिहार राज्यस्थित समस्तीपुर इलाकामा एउटा सिन्धियाघाट नामक गाउँछ रहेको छ । उक्त गाउँका मानिसहरु यतिधेरै बलवान छन् की उनीहरुलाई जस्तोसुकै विषालुु सर्पले डसेपनि फरक पर्दैन । सर्पले डसेर सर्पको विष शरीरमा फैलिएपनि यो गाउँमा मानिसहरु मर्दैनन् अर्थात् यो गाउँका मानिसहरुले सर्पको विष पचाइदिन्छन् । नागपञ्चमीको अवसरमा त्यहाँ सर्पको मेला नै लाग्दछ र उक्त मेलामा मानिसहरु सर्पसँग खेल्दछन् । यसरी खेल्दा धेरै जनालाई सर्पले डस्दछ पनि । तर उनीहरुलाई केही ह ...
दाँत बचाउने अचुक औषधि कागती, प्रयोग गर्ने तरिका जानीराखौं
यदि तपाईको दाँत पहेलो भएको छ वा मुखबाट श्वास गन्हाउँछ भने एउटा उपाय तपाईका लागि रामबाण हुनसक्छ । अक्सर हामी पहेलो दाँतलाई टूथपेस्टले माझेर सफा गर्ने प्रयास गर्छौ । तर, दाँत माझ्दा दाँत सफा हुनुको सट्टा दाँत घिसिन्छ । र ३० देखि ४० वर्षको उमेरमै दाँत टुट्न थाल्छ । दाँतलाई सफा गर्ने घरेलु उपाय पनी छन् जसले दाँतलाई सेतो बनाएर चम्काउछ र दाँतलाई कुनै नोक्सानी पनी पुगाउँदैन् । १. कागतीको आधा भाग निचोरेको टुक्रामा चार बूँद तोरीको तेल, थोरै नून र हिल्दी ह ...
जमिनमा गाडेको ८ दिनपछि ज्यूँदै निकालियो बच्चा
जमिनमुनि गाडेको ८ दिनपछि कुनैपनि ज्यूँदै बाहिर निस्किन सक्छ भन्ने कुरा पत्यार लाग्न मुस्किलै पर्छ । तर चीनमा यस्तो चमत्कार भएको छ । घरपरिवारे ज्यूँदै गाडेको एक नवजात शिशुलाई ८ दिनपछि जिवितै उद्धार गरी बाहिर निकालिएको छ । समाचार अनुसार लु फेंगलियान नामकी महिलाले जंगलमा जडीबुटी खोजिरहेकी थिइन् । त्यहीँ बेला उनले बच्चा रोएको आवाज सुनिन् । त्यो आवाज जमिन मुनिबाट आइरहेको थियो । उनी डराइन् र नजिकै रहेका एक बौद्ध भिक्षुलाई बोलाएर सो कुराको जानकारी दिइन् ...
कलीयुगकी कुम्भकर्ण जो ६४ दिनसम्म सुत्न सक्छिन्
रामायणमा कुम्भकर्ण भन्ने पात्र सुताईमा नामुद छ, जो वर्षमा ६ महिना सुत्दछ अनि ६ महिना जागै हुन्छ । अहिले पनि धेरै समयसम्म सुत्ने मानिसलाई सोही कुम्भकर्णको नाम दिइन्छ । जति धेरै भएपनि रातभर त होला । तर यहाँ त साँच्चीकै कुम्भकर्ण पो फेला पारिएको छ त । एउटी बेलायती युवती यस्ती कुम्भकर्ण छिन् की उनी ६४ दिनसम्म सुत्छिन् अनि ६५ औँ दिनमा मात्र ब्युँझिन्छिन् । २० वर्षकी निकोल नामकी यी युवतीमा क्लेन लेभेन सिन्ड्रोम भन्ने रोग भएको डाक्टरहरुले बतएका छन् । यो ...
ज्यालामा १ सय ४ किशोरीको कुमारित्व भंग गरेका ‘हायना’ पक्राउ
किशोरीहरुको कुमारीत्व भंग गर्ने इरिक एन्भिया पक्राउ परेका छन् । हालसम्म १ सय ४ किशोरीको कुमारीत्व भंग गरिसकेको बताउने उनी मालवीको दक्षिणी क्षेत्रका ‘हायना’ हुन् । दक्षिण मालवीका विभिन्न समुदायले आफ्नी छोरीको यौन शुद्धिकरणका लागि उनलाई भाडामा लिन्थे र कुमारीत्व भंग गराउन लगाउँथे । परम्परागत यो प्रचलनको आलोचना हुँदै आएको थियो । उनमा एचआईभी रहेको बताइएको छ तर उनले भाडामा लिनेलाई नभन्ने बताइएको छ । केही समयअघि मात्रै बीबीसीले यो विषयमा ला ...
सबैभन्दा अग्ला महिला लाट्भियाका र पुरुष नेदरल्याण्डका
११ साउन, काठमाडौं । शोध पत्रिका इलाइफले गरेको अध्ययनले युरोपेली देश लाट्भियाका महिला संसारभरिका अरु देशका महिलाभन्दा अग्ला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भर्खरै सार्वजनिक रिर्पोट अनुसार पुरुषहरू भने नेदरल्याण्डका सबैभन्दा अग्ला हुन्छन्। नेदरल्याण्डका पुरुषको औसत उचाई १ सय ८३ सेन्टिमिटर हुन्छ भने लाट्भियाका महिलाको औसत उचाई १ सय ७० सेन्टिमिटर हुन्छ। सो पत्रिकाका अनुसार ग्वाटेमालाका महिला संसारका अरु देशका महिलाभन्दा होचा हुन्छन् भने पूर्वी टिमोरक ...
इन्टरनेट इतिहासमै याहुको दुःखद् अन्त्य
कुनैबेला इन्टरनेट उद्योगको बादशाह मानिने अमेरिकी कम्पनी याहुले आफ्नो ब्यबसायिक यात्राको दुःखद् अन्त्य गरेको छ । कुनै बेला माइक्रोसफ्टले ४४ अर्ब डलर दिादा पनि बेच्न अस्वीकार गरेको याहुले अहिले जम्मा ५ अर्ब डलरमा स्वामित्व गुमाउनुपरेको छ । निरन्तरको घाटापछि केही महिना पहिले आफुलाई बिक्रिमा राखेको याहुलाई अमेरिकी दुरसञ्चारकम्पनी भेरिजोनले ५ अर्ब डलरमा किनेको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा इन्टरनेट कम्पनीहरु जुन दरमा खरिदबिक्रि भइरहेका थिए, त्यसको तुलनामा याह ...
बच्चीको पेटभित्र हुुर्किदै जुम्ल्याहा भ्रुण
एक नवजात शिशु आफू जन्मेको केही बेरपछि नै उनको पेटमा एक जोडी जुम्ल्याहा बच्चा खेलिरहेका थिए । अचम्म हुनुभयो हैन रु तर हंगकंगमा यस्तो घटना भएको छ । त्यहाँ एक नवजात शिशुको पेटभित्र जुम्ल्याहा बच्चा पाइएका छन् । अस्पतालमा जन्मिएकी एक बच्चीको पेट असामान्य भएको पाइएपछि डाक्टरहरु अचम्ममा परे । ती बच्ची जन्मिँदै ४ किलोकी थिइन् । उनको पेट निकै ठूलो देखेपछि डाक्टरहरुले सुरुमा त त्यो ट्युमर भएको हुनसक्ने आशंका गरे । तर पछि जाँच गर्दा पो पत्ता लाग्यो ती ती न ...
पुरुषत्वको अनौठो परम्परा, जहाँ मुख मैथुन गराएर विर्य खान लगाइन्छ !
दुनियामा केही यस्ता परम्परा छन् जो सुन्दैमा आश्चर्य लाग्छ । पपुवा न्युगिनीमा बस्ने साम्बिया आदिवासीमा एउटा यस्तै अनौठो तथा अमानवीय जस्तो लाग्ने परम्परा रहेको छ । त्यहाँ सानै उमेरका बालकहरुलाई मर्द बनाउन भन्दै निकै अमानवीय कार्यमा लगाइन्छ । ७ देखि १० वर्ष उमेरका बालकहरुलाई आफुभन्दा ठूला पुरुषहरुको विर्य खान लगाइन्छ । उक्त समुदायका बालकहरुले १५ वर्षभन्दा माथिका अविवाहित किशोर तथा युवाहरुको लिंग मुथमैथुन गरिदिनु पर्दछ । अनी यसरी ओरल सेक्स गरेपछि निस ...
बिश्वमा पहिलो इमेल पठाउने यि व्यक्ति
काठमाडौं । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सन् १९७१ मा कम्प्युटर इन्जिनियर रे टोमलिन्सनले पहिलो पटक आफैंलाई परीक्षण सन्देश पठाएर इमेलको सुरुवात गरेका हुन् । उनले उक्त इमेल म्यास्याच्युसेटस्थित क्याम्ब्रिजमा रहेको एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पठाएर इमेलको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेका थिए । उनले त्यसबेला प्रयोग गरेको कम्प्युटर नेटवर्क प्रविधिलाई ARPANET भनिन्थ्यो । यो आधुनिक र जटील नेटवर्कहरुको बिश्वब्यापी सञ्जाल इन्टरनेटको प्रारम्भिक रुप थि ...
चीनले यसरी बनायो आकाशबाट पानी बर्साउने र रोक्ने प्रविधि (भिडियो)
चीनले मौसम परिवर्तन गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरेको छ । उसले आधुनिक प्रविधिको विकास र त्यसको उपयोग गरेर पानी पारिदिने र आकाशमा भएको बादल हटाएर पानी पर्नबाट रोकिदिने प्रविधिको विकास गरेको छ । उसले यो प्रविधि केही वर्षअघि बेइजिङमा आयोजित विश्व ओलम्पिक खेलकुदको बेलामा पनि उपयोग गरेको थियो । हेरौँ आकाशबाट पानी बर्साउने र रोक्ने प्रविधि भिडियोः- ...
यि २० बर्षिय युवती २ वर्षमा नै ६ वटा बच्चाकी आमा बनिन्
अमेरिकामा एउट घटना सार्वजनिक भएको छ जसका बारेमा सुन्दैमा हैरान हुनुहुनेछ तपाइँ । अमेरिकाको कन्सासमा एक २० वर्षकी युवती ६ बच्चाको आमा बनिसकेकी छिन् । दनेशा काउचा नामकी ती युवतीले २६ महिनामै ६ बच्चा जन्माएकी छिन् । उनले २६ महिनाको अवधिमा ३ पटक गर्भवती भएर बच्चा जन्माइन् र तिनै पटक जुम्ल्याहा जन्माइन् । दनेशाले पहिलोपटक सन् २०१४ को अपि्रल १३ मा जुम्ल्याहा छोराहरु डेनेरियस र डेसमन्डलाई जन्माइन् । तर डेसमन्डको जन्मेकै केही समयमा मृत्यु भयो । उनले फेरि ...
सेक्स गर्दा यौनांगको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
पूर्ण रुपले उत्तेजित हुँदा पुरुषको लिंग ५ देखि ७ इन्चको हुन्छ भने १५ डिग्री माथितिर फर्किएको हुन्छ, जबकि सामान्य अवस्थामा लिंगको आकार ३ देखि ५ इन्चको हुन्छ । – अण्डकोषको आकार २ इञ्च लम्बाई, ५.३ सेमि हुन्छ । देब्रे अण्डकोष तल हुन्छ भने दाहिने अलिक ठुलो हुन्छ । – सामान्य अवस्थामा महिलाको योनिको गहिराई ३ इञ्च र ०.८ इन्च फराकिलो हुन्छ । तर, सेक्सका दौरान गहिराई पनि बढ्छ र २.५ इञ्च फराकिलो हुन्छ । – योनिको झिल्ली (हाइमन)को बाक्लोपन ० ...
एकैदिनमा ५ सय पटक यौनसम्पर्क, हलिउडमा समेत हंगामा
कहिले सेक्स भिडियो त कहिले नग्न तस्विरका कारण चर्चामा रहिरहने अमेरिकी टेलिभिजन सेलिब्रेटी किम कार्दाशिनले आफ्नै विषयमा अनौठो अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । उनले आफू बच्चा जन्माउन आतुर रहेको र त्यसकै लागि दिनमा ५०० पटक सम्म यौन सम्बन्ध राखेको बताएपछि हलिउडमा समेत हंगामा भएको छ ।आफ्नै टेलिभिजनको रियालिटी शो ‘किपिङ अप विद द कार्दाशिन्स’मा बोल्दै किमले एक दिनमै ५ सय पटक यौन सम्बन्ध राखेको बताएकी हुन् । ...
टिकट लिएरै कयौंपटक विमानमा उडे तर कहिल्यै रकम तिरेनन् यिनले
५ साउन, काठमाडौं । देश–विदेश घुम्न जोकोहीलाई मन लाग्छ तर घुम्नकै लागि रकमको जोहो गर्न भने धेरैले सक्दैनन् । त्यसैले कतिपयले आफ्नो रहरलाई त्याग्नु परेको हुन्छ । भारत, जोधपुरका अनितेश गिरी गोस्वामी यस्तै रहर भएका युवा हुन् । २३ वर्षीय गोस्वामीलाई घुम्न त मन थियो र उनीसँग पर्याप्त रकम थिएन । आइटीका ज्ञाता उनले केही समय किंगफिशर र एयर इन्डियाजस्ता एअरलाइन्स कम्पनीमा जागिर पनि खाए । त्यतिबेलाको अनुभवले विमान कम्पनीको टिकट कसरी बुक गरिन्छ भन्नेक ...
यस्तो छ एक छाक खानाको २२ करोडा रुपैयाँ तिर्नुपर्ने होटल
एकातिर कुनै कम्पनीहरुले सबैखाले ग्राहक लोभ्याउनका लागि अनेक प्रकारका हतकण्डा अपनाउँछन् । अर्कोतर्फ भने केही कम्पनीहरु अर्वपति धनाढ्य ग्राहकहरुका लागि मात्र खुलेका हुन्छन् । उनीहरुले धनाढ्यलाई मात्र सेवा दिन्छन् र सर्वसाधारणहरु त्यसको सेवा लिने हिम्मत नै गर्दैनन् । तपाइँले होटेलमा एक छाक खाना डिनरको कति सम्म तिर्नुपर्ला ? भन्ने कल्पना गर्नुहुन्छ ? एक छाक डिनरको २२ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्ने कुरा सायद कल्पना गर्नै गाह्रो पर्छ । तर सिंगापुरमा एउट ...
सर्वसाधारण देखि सेलिब्रेटीहरु ‘पोकेमन गो’ को मज्जा लिदै
‘पोकेमन गो’लाई अमेरिकन सफ्टवेर कम्पनी नियान्टिक इन्कले डेभलप गरेको हो । उक्त गेम आइओएस तथा एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा राखिएको छ । पोकेमन गो रिलिज भएका देशहरुका प्रयोकर्ताहरुले आफ्नो ग्याजेटहरुमा उक्त गेम सजिलै डाउलोड गरेर गेमको मज्जा लिन सक्छन् । उक्त गेममा सिङ्गल तथा मल्टिप्लेयर मोडहरु रहेका छन् । भर्चुवल रियालिटि रहेको पोकेमनमा क्यामरा तथा जिपिएसको प्रयोग गरि गेमको अझै मज्जा लिन सकिन्छ । पोकेमन गो जुलाई ६ अर्थात आजभन्दा १३ दिन अगाडी उत् ...
बाँदरले खाना पस्किने, यो कस्तो रेष्टुरेन्ट !
विकाशक्रमको हिसाबले बाँदर र मानिसलाई नजिकका प्राणी मानिन्छ र बाँदरको बुद्धि पनि मानिसकै हाराहारीमा हुने विश्वास गरिन्छ । यदि यो कुरालाई यथार्थमा देख्न चाहनुहुन्छ भने जापानको टोकियास्थित काबुकी रेष्टुरेन्टमा जानुपर्छ । जान सम्भव भएन भने पनि यो समाचार पढ्दा नै आश्यचर्यजनक तथ्य थाहा पाउनुहुनेछ । काबुकी रेष्टुरेन्ट यसकारण चर्चामा छ की त्यहाँ वेटरको काम बाँदरले गर्दछ । बाँदर वेटरले केवल मेनू देखाउने मात्र होइन खानाको अर्डर लिने र अर्डर बमोजिमको खानेकु ...
फेसबुकमा भुलेर पनि नगर्नुस् यी ८ हर्कतहरु, जुन हर्कतले तपाइको अकाउण्ट नै ब्लक हुनसक्छ !
फेसबुकमा आफ्नो फोटो अपलोड गर्ने, स्टाटस सेयर गर्ने, अरुका फोटो तथा स्टाटस लाइक तथा कमेन्ट गर्ने सामान्य कुरा हो । तर के तपाइँलाई थाहा छ रु फेसबुकमा कतिपय कुराहरु शेयर गर्दा फेसबुकले तपाइँको अकाउण्ट नै ब्लक गरिदिन सक्छ । यस्ता ८ प्रकारका चिजहरु फेसबुकमा शेयर गर्नुभयो भने तपाइँको अकाउण्ट केही घण्टा देखि केही दिनसम्मकै लागि पनि ब्लक हुनसक्छ । १. हालै फेसबुकमा एक बच्चाको फोटो भाइरल भएको थियो । जसलाई फेसबुकमा शेयर गर्दा वा कसैलाई फरवार्ड गर्दा प्रयोगक ...
एलियन खोज्न चीनले बनायो '३० फुटबल मैदान बराबरको' संसारकै शक्तिशाली दुरबिन
चीनले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार र वैज्ञानिक चुनौती असम्भव छैन भन्ने लगातार प्रमाणित गरिसकेको छ। यसको थप एक उदाहरण हो, चीनको गुइझौ प्रान्तमा हालसालै निर्माण भएको फास्ट टेलिस्कोप (दुरबिन)। विश्वकै सबैभन्दा विशाल र शक्तिशाली यस टेलिस्कोपको मुख्य उद्देश्य ब्रह्मान्डका अन्य ग्रहमा मानिसजस्तै बुद्धिमान जीव ९एलियन० खोज गर्नु हो। हालै पत्ता लागेका गुरुत्वाकर्षण तरंग, ब्रह्मान्ड उत्पत्तिका सुरुआती समय लगायत समकालीन खगोलशास्त्रका अन्य महत्वपूर्ण विषय पनि यस ...
थोरै सुत्दा लाग्न सक्छन्, यस्ता भयानक रोग !
रातमा आवश्यकताअनुसार ननिदाउने व्यक्तिलाई बिहान गुलिया र ‘जंक फुड’ खान मन लाग्छ । धेरै गुलिया परिकार खाँदा रगतमा सुगरको मात्रा बढेर मधुमेहको सम्भावना रहन्छ । शरीरभित्रबाट फोहोर तत्व बाहिर निस्किनु भनेको शरीर ‘रिपेयर’ भएजस्तै हो । बिहान धेरै पानी पिउँदा शरीरभित्रका बिकार पिसावमार्फत बाहिरिन्छन् । राति पूरा नसुत्दा ‘ब्लड प्रेसर’को सम्भावना रहन्छ, जसले हृदयाघात र ‘स्ट्रोक’को सम्भावना बढाउँछ । राति कम नि ...
भारतको केरलामा मोटोपन तथा बिहारमा समोसा कर !
कर के के कुरामा लाग्छ रु धेरैलाई जानकारी होला । भारतको केरला राज्य सरकारले मोटोपनमा समेत कर लगाएको छ । राज्यमा मोटोपन बढ्दै गएको भन्दै मोटोपन निम्त्याउने खानामा कर लगाएको छ । केही दिनअघि मात्रै पेश गरेको बजेटमा ब्रान्डेड आउटेलेटबाट बेचिने जंक फुडमा १४।५ प्रतिशत मोटोपन कर लगाएको हो । पिज्जा, वर्गर, दोनट, स्यान्डविचलगायतका खानेकुरा खानका लागि यो कर तिर्नुपर्नेछ । केरल सरकारको यो निर्णयपछि राज्यमा जंकफुडको मूल्य आकाशिने देखिएको छ । तर, यस राज्यका यु ...
सधैलाई काम लाग्ने कुराहरु, जुन दुर्इ मिनेटमै कम्प्युटरमा सिक्न सकिन्छ !
यदि कुनै कुरा जम्मा २ मिनेटमै सिक्न सकिने र त्यो सिकेको कुरा निकै काम लाग्ने रहेछ भने अरु के नै चाहियो र रु म्प्युटरमा दुइ मिनेटमै सिक्न सकिने केही ट्रिकहरु पनि निकै काम लाग्दा हुँदा रहेछन् । दुइ मिनेटमै सिक्न सकिने उपयोगी ट्रिक यस्ता छन्ः इन्टरनेट स्पीड बढाउने ट्रिक यसको लागि Start मेनुमा गएर Runमा जानुहोस् अनि Gpedit.msc टाइप गर्नुहोस् । त्यसपछि ok थिच्नुहोस् । यो सँगै कम्प्युटरको स्क्रिनमा एक ट्याब खुल्नेछ । उक्त ट्याबमा र ...
हस्तमैथुन तथा सानो लिंग भ्रम र यथार्थ
आफ्नो यौनांग चलाई यौन आनन्द लिने क्रियालाई हस्तमैथुन भनिन्छ । प्रायः हातको प्रयोग गरिए पनि यसका लागि विभिन्न वस्तु, साधन वा खेलौना (सेक्स टोइज) पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । चाँडै र सजिलै सिक्ने भएकाले किशोरहरूलाई हस्तमैथुनको लत लाग्छ । विश्वमा ९० प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गर्ने गरेका छन् । हस्तमैथुन गर्नाले मुखमा दाग आउने, आँखा कमजोर हुने, दुब्लाउने, नपुंसक हुने, शीघ्र पतन हुने, विवाहपछि यौन सन्तुष्टि नमिल्ने भ्रम छन् । हस्तमैथु ...
यौनशक्ति बढाउने ७ तरिका, जानी राखौ
१. चिन्तामुक्त रहने के हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? जस्ता कुनै पनि प्रकारका यौन अपेक्षाबाट आफ्नो दिमागलाई पूर्ण तरिकाले मुक्त राख्नुस् । सेक्सका बेला कुनै पनि प्रकारको चिन्ता या दबाब महशुस नगर्ने । यदि तनाव हुन्छ भने ध्यान गर्नुस् र आफ्नो मूड बदल्नुस् । साथै, राम्ररी निद्रा पर्ने गरी सुत्नुपनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । २. लुब्रिकेशनको प्रयोग‘द जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिन’ को एक अनुसन्धानअनुसार जो पु्रुष लुब्रिकेशन र कण्डम प्रयोग गर् ...
के के गर्न सक्छन् भारतीयहरु ! (तस्बिरहरू)
एक वेवसाइटमा अपलोड भएका केही तस्बिरहरु अहिले भारतमा भाइरल बनिरहेको छन्। भारतीयहरुले कसरी कुनै कुराको जुगाड गर्छन् भनेर राखिएका ती तस्बिरहरु सुरुमा विश्वास नै गर्न गाह्रो पर्छ। तर केही भारतीयहरुले यस्तो गरिसकेको छन्।मानिसहरुले यी तस्बिरहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा बहस पनि थालेका छन्। एकातिर तस्बिर भारतीयले गर्व गर्नुपर्ने चिज नभएको बताउने पक्ष छन् भने केही मानिसले यी तस्बिरले भारतीयहरु कसरी साधन स्रोतको कमीमा पनि काम गर्न सक्छन् भनेर देखाउँछ भनेक ...
अब नाडीमा बाँध्ने स्मार्टफोन
आउँदो पाँच वर्षमा तपाइँको नाडीमा बाँध्न सकिने मोबाइल फोन बजारमा आउने छन् । लेनेभो मोबाइल बिजनेस ग्रुपका सह अध्यक्ष एमार डी लेंक्वेसेंगले एक अन्तरवार्ताका क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सन् २०२० सम्ममा मानिसको नाडीमा बाँध्न सकिने खालका लचिलो स्मार्टफोन बजारमा आउनेछन् । हालै आयोजित लेनेभो टेक वल्र्डमा कम्पनीले यस्तो लचकदार फोनको प्रोटोटाइप पेश गरेको छ । लेनोभो टेक वल्र्डमा चिनिया निर्माता कम्पनी लेनोभोले फरक फरक डिग्रीसम्म घुमाउन सकिने दुइव ...
फेसबुक प्रोफाइलमा राख्न नहुने ११ कुराहरु, जानी राखौ !
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । तर यो कहिले काँही हाम्रो लागि समस्याा पनि बन्नसक्छ । हाम्रो नीजि जानकारी फेसबुकमा हुने भएका कारण मानिसहरुले यसको गलत फाइदा उठाउने गर्दछन् । यस्तोमा हामी तपाईंलाई फेसबुकमा हाल्न नहुने ११ कुराबारे जानकारी दिँदैछौंः फोन नम्बरमोबाइल नम्बर तुरुन्त हाइड गर्नुहोस् । फेसबुक पेजमा कहिले पनि फोन नम्बर नहाल्नुहोस् । मानिसहरुले यसका गलत फाइदा ढिलो चाँडो तपाईंबाट उठाउनेछन् । जन्मदिनह्याकरले तपाई ...
आफ्नै श्रीमानले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि !
आफ्नै श्रीमतीसँग बिनास्वीकृति यौनसम्बन्ध राख्न खोज्दा ओखलढुंगामा एक जनाले जेलसजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । आफ्नै श्रीमानले बलात्कार गरेको भन्दै श्रीमतीले उजुरी दिएपछि ओखलढुंगा, च्यानमका २९ वर्षीय नारायणबहादुर बस्नेतले ३ वर्ष कैद भोग्नुपर्ने भएको हो ।कैदसँगै बस्नेतलाई २५ हजार जरिवानासमेत गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उनकी श्रीमतीले दिएको जाहेरीमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले उक्त फैसला ग ...
ट्वीटरकै कार्यकारी निर्देशकको ट्वीटर एकाउन्ट ह्याक
२६ असार, न्यूयोर्क । पछिलो केही महिनादेखि नाम चलेका व्यक्तिहरूको ट्वीटर एकाउन्ट ह्याक भइरहेका खबर आइरहेका छन् । अब स्वयं ट्वीटरका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक दोरसेको एकाउन्ट नै शनिवार ह्याक भएको छ । ‘आवरमाइन’ नामक एक समूहले ट्वीट गरेर अन्य ट्वीटर एकाउन्ट हैक गरेको जिम्मेदारी लिएको छ । यसअघि यही समूहले फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग र गूगलका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुन्दर पिचाईको एकाउन्ट पनि ह्याक गरिसकेको छ । प्रौद्योगिक वेबसाइट एनगैज ...
विश्वको यो सबैभन्दा सानो देश, जुन देशमा २७ जना मानिस बस्छन्
विश्वमा एउटा यस्तो पनि देश छ जुन दुई पिल्लरले टिकेको छ । जुन देशमा जम्मा २७ जना मानिस बस्छन् । इंग्ल्याण्डको साफोल्स समुन्द्री तटबाट १० किलोमिटर टाढा रहेको यो देश विश्वको सबैभन्दा सानो देश हो । जुन समुन्द्री किल्लाको दुई पिल्लरले टिकेको छ । जसको नाम सील्याण्ड हो । यस देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मालिक भनेको रोय बेट्स नामक एक ब्यक्ति थिए । सन् २०१२ मा उनले आफूलाई त्यस देशको मालिक घोषित गरेता पनि उनी अहिले यो संसारमा छैनन् र त्यस देशको ...
नुहाउने बेला पिसाब फेर्न मन लाग्छ, थाहा पाउनुस् कारण !
सडक किनारामा तथा छेउँछाउँ कुनाकाप्चामा यसो छेको पारेर पिसाब गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । तर कतिपय मानिसहरु भने स्विमिंग पुल, नदी तथा नुहाउने बेला बाथटबमा समेत पिसाब फेर्दछन् । मान्नुस् नमान्नुस् धेरै मानिसहरुको नुहाउने बेला पिसाब फेर्ने बानी हुन्छ । त्यस्तै कतिपय मानिसको स्विमिंग पुलमा पौडी खेलिरहेको बेला, खोलामा पौडि खेलिरहेको बेला पनि पिसाब फेर्ने बानी हुन्छ । मानिसहरुले यसरी अनेक ठाउँमा पिसाब फेर्ने कुरालाई विभिन्न मानिसले विभिन्न ढंगले व्याख्या ...
कट्टु समातेर श्रीमानको उद्धार
एजेन्सी । चिनमा एक महिलाले अचम्म तरिकाले आफ्नो श्रीमानलाई आत्महत्या गर्नबाट जोगाएकी छिन् । अपार्टमेन्टको छैटौँ तलाबाट हाम फालेका श्रीमान्लाई उनले कट्टुुमा समातेर खस्नबाट रोकेकी हुन् । चीनको चाङ्चुनमा भएको सो घटनामा लिङ सुले आफ्ना ४५ वर्षीय श्रीमान् वाङ लीलाई २० मिनेटसम्म कट्टुुकै भरमा थेगेकी थिइन् । त्यसपछि मात्र प्रहरी र उद्धारकर्मी आएर वाङलाई उद्धार गरेका थिए । आत्महत्या गर्ने मनसायले वाङ २० मिटरमाथि रहेको आफ्नो फ्ल्याटको झ्यालबाट फाल हाल्न पु ...
समुन्द्रमा देखियो ‘भुत माछा’ (भिडियो सहित)
प्रशान्त महासागरमा ‘घोष्ट फिस’ अर्थात ‘भूत माछा’ फेला परेको छ । अनुसन्धानमा खटिएका ओकिएनस एक्सप्लोररले प्रशान्त महासागरको उत्तरी मारियाना द्वीपको यात्राको क्रममा ‘भूत माछा’लाई आफ्नो क्यामरामा कैद गरेका हुन् । विशेषगरी हलिउड फिल्ममा देख्न पाइने यो माछा अहिले भने प्रत्यक्ष रुपमै पहिलोपटक समुद्रमै जीवित देखिएको हो ।अनुसन्धानकर्ताले १० सेन्टिमिटर लामो यो माछालाई आफ्नो क्यामरामा कैद गरेका छन् । यो प्रशान्त महासागरक ...
फेसबुकमा अश्लील सामग्री र लिङ्कबाट जोगिने तरिका जान्नुहोस् !
अचेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अश्लील फोटो तथा भिडियो ट्याग तथा म्यासेजले अधिकांश प्रयोगकर्तालाई तनावग्रस्त बनाउने गरेको छ । कुनै लिङ्कमा क्लिक गरेकोलगत्तै आफ्ना सञ्जालमा रहेका मित्र तथा आफन्तजनलगायत सबैमाझ स्वतः अश्लील सामग्री शेयर हुने गरेको छ । फेसबुक एकाउण्टबाट प्रयोगकर्ताको जानकारी र अनुमतिविना नै यस्ता सामग्री शेयर हुने समस्या अहिले व्याप्त छ । यस्तै, समस्याबाट जोगिन यहाँ केही उपाय प्रस्तुत गरिएको छ स् – अश्लील सामग्री शेयर भएको जानकारी ...
किन रोज्दैछन् महिलाहरुले आपराधीक बाटो ?
अपराधको दुनियामा सधै पुरुषकै बोलवाला रहने गरेको छ । तर पछिल्लो एक तथ्यांकले भने अब महिलाहरु पनि आपराधिक मोर्चामा पुरुषहरुसँगै काँधमा कदाँध मिलाउँदै अघि बढ्न थालेको देखाएको छ । सन् १९९९ दखि २००० र सन् २००७ देखि २००८ को बीचमा महिला अपराधीको संख्या दोब्बर भएको छ । बेलायत र वेल्सका जेलहरुमा सन् १९९३ देखि २००५ को बीचमा महिला अभियुक्तहरुको संख्या ३ गुणाले बढेको थियो । यद्यपि हाल उक्त संख्यामा कमी आएको छ । तर नब्बेको दशकको तुलनामा ती बेलायत र वेल ...
विश्वमा फास्ट इन्टरनेट भएका यि देशहरु
विश्वमा सबैभन्दा तिव्र गतिको इन्टरनेट भएको देश कुन हो ? अमेरिकास्थित क्लाउड सर्भिस प्रदायक संस्था अकामाइले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दक्षिण कोरिया विश्वमा सबैभन्दा तिव्र गतिको इन्टरनेट भएकेा देशमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । रिपोर्ट अनुसार दक्षिण कोरियाको औषत इन्टरनेट स्पीड २९ एमबीपिएस रहेको छ भने पिक स्पीड १०३.६ एमबीपीएस रहेको छ । औषत कनेक्सन स्पीडमा नर्वे दोश्रो स्थानमा छ भने स्विडेन तेश्रो, हंगकंग चौथो, स्विजरल्याण्ड पाँचौ स्थानमा रह ...
महिला पुलिससँग अश्लील कुरा गर्ने प्रहरी ‘आईजी’ यसरी परे फन्दामा छत्तीसगढ, २० असार । भारतको छत्तीसगढ राज्यको बिलासपुर क्षेत्रका पुलिस महानिरीक्षक (आईजी)लाई मुंगेली जिल्लाकी महिला आरक्षक (कन्स्टेबल)ले यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छिन् । छत्तीसगढ राज्यका गृह मन्त्रीले यो विषयलाई अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । राज्यका वरिष्ठ पुलिस अधिकारीहरूले शनिबार रायपुरमा भनेका छन्, ‘बिलासपुर क्षेत्रका पुलिस महानिरीक्षक पवन देवका विरुद्ध छिमेकी जिल्ला मुंगेलीकी महिला कान्स्टेबललाई यौन हिंसा ...
१९२ किलोग्रामका दश वर्षीय बालक (फोटो फिचर)
२० असार, काठमाडौ । इन्डोनेशियाको पश्चिमी जावा प्रान्तको एक दश वर्षीय बालक विश्वको सबैभन्दा मोटा भएको डेली मेलले जनाएको छ। १९२ किलो तौल भएका आर्या पेर्माना विश्वको सबैभन्दा मोटो व्यक्ति भएको खुलेको छ। आर्याले दिनमा पाँच पटक खाना खान्छन् र निकै मोटो भएकाले हिँड्न गाह्रो भए पनि स्कूल जान भने छोडेका छैनन्। ‘पेर्माना जन्मदा ३।२ किलो मात्रै थियो। तर, दुई वर्षपछि अकस्मात रूपमा मोटो हुन थालेको थियो,’ उनकी आमाले भनिन्। हाल उनले हरेक दिन एक पटक ...
जानीराखौ बारम्बार वीर्य फाल्नाले प्रोटेस्ट क्यान्सर संभावना न्युन रहन्छ
बारम्बार वीर्य फाल्ने पुरुषलाई प्रोटेस्ट क्यान्सरको सम्भावना न्यून हुने एक अमेरिकी अध्यनले देखाएको छ । बढी वीर्य नाश गर्दा स्वास्थ्यमा कस्तो अशर गर्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र बहस चलिरहेकै बेला अनुसन्धानकर्ताले यो निस्कर्ष निकालेका हुन् । १८ वर्ष लामो यस अध्ययनमा ३२ हजार पुरुषलाई सहभागी गराइएको थियो । सन् १९८२ देखि २०१० को अवधिमा करिब ४ हजार पुरुषको प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार गरिएको थियो । अध्ययन अनुसार महिनामा कम्तिमा पनि २१ पटक वीर्य निस्काशन गर्ने ...
जानिराखाैँ – शरिरको यी ५ अंगमा कोठी हुने महिलाहरु अत्याधिक कामुक हुन्छन् स्तरेखा विज्ञानले हातका रेखा मात्र नभएर शरीरका अन्य अंगमा हुने बनावट र चिन्हकोबारेमा पनि चर्चा गरेको छ । समुन्द्र शास्त्र पनि भनिने यो शास्त्रले शरीरमा हुने कोठी र मुसाको अर्थ समेत बताएको छ । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार शरीरका कतिपय अंगमा भएका कोठीले त्यस्ता ब्यक्ति अत्याधिक कामुक हुने संकेत गर्छ । यस्ता ब्यक्तिलाई कामकुतका कारण समस्या समेत हुने समुन्द्र शास्त्रको दावी छ । कुन अंगमा कोठी हुने व्यक्ति कामुक? १. यदि ओंठमा कोठी छ भने ...
यी महिलाले जन्माइन् १७ मिनेटमा ११ छोरी
तपाईले अहिलेसम्म जुम्ल्याहाँ, तिम्ल्याहाँ र चम्ल्याहाँ जन्माएको त सुन्नुभएको होला तर, यहाँ त एक महिलाले दुई ती होइन कि पुरै ११ बच्चा जन्माएकी छिन् । त्यो पनि १७ मिनेट भित्रमा । विश्वमै पहिलोपटक भएको यो चामत्कारिक घटना भारतको नयाँ दिल्लीस्थित इंडियानाको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ४२ वर्षीय मारिया हर्नानडेस नामकी महिलाले १७ मिनेटमा ११ छोरी जन्माएर सबैलाई चकित पार्दै विश्व रेकर्ड कायम गरेकी छिन् । जब मारियालाई डेलिवरीका लागि अस्पताल लगियो तब ...
गर्मीमा अपनाउनुस् यी सावधानी
गर्मीमा सजगता अपनाउनु राम्रो हो । अझ घरपरिवार तथा जागिर दुवै सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिगत सजगता बढी आवश्यक हुन्छ । यो मौसममा छाला पोल्ने, खाना रुचि नहुने तथा असह्य गर्मीका कारण देखा पर्ने अन्य विविध समस्याका कारण जीवनशैली कष्टकर हुन्छ । तथापि गर्मी मौसमको विभिन्न प्रभावबाट बच्ने धेरै उपाय छन् जसलाई अपनाएर सुन्दर तथा स्वस्थ रहन सकिन्छ । छालाको हेरचाहसूर्यको अल्ट्राभ्वाइलेट किरणबाट बच्न छाता तथा सनग्लास अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । छालालाई सूर्यको ...
आइसल्याण्डबारे ७ रोचक तथ्य, जुन कुराले तपाईंलाई चकित पार्ने छ !
उत्तर युरोपेली मुलुक आइसल्याण्डको नामै पनि विश्वभरका फुटबलप्रेमीले सुनेको सायद धेरै भएको छैन । फुटबलमा त झन् गुमनाम थियो । तर, युरोकप २०१६ मा आइसल्याण्ड एकपछि अर्को सनसनी मच्चाइरहेको छ । सुपरस्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोको टोली पोर्चुगललाई १-१ को बराबरीमा रोक्दा धेरैले यसलाई ‘भाग्य’तिर लगेर जोडे । रोनाल्डोल स्वयंमले पनिज आइसल्याण्डको खेलशैलीबारे गर्दै भने कि पोष्टमा बस नै पार्क गर्‍यो । रोनाल्डोको टिप्पणीपछि आइसल्याण्डले विश्वफुटबलम ...
त्रिभुवन विमानस्थलमा फेसबुक र युट्युव प्रतिबन्द
१५ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्षमा आगवागमन र प्रस्तान दुबै तर्फ कर्मचारीका लागि फेसबुक र युट्युव बन्द गरिएको छ। केही दिन अघि अध्यागमनका कर्मचारीले कम्प्युटरमा फेसबुक चलाएको फोटो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा फेसबुक र युट्युब बन्द गरिएको विमानस्थल अध्यागमन विभागका निमित्त प्रमुख उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए। ‘हामीले असार ७ गतेदेखि विमानस्थलको अध्यागमन अन्तर्गत आवागमन र प्रस्था ...
धेरै भोकाउने बच्चा छ ? विचार गर्नुस ठूलो भएपछि रिसाहा हुनसक्छ !
यदि तपाईंको बच्चालाई बढी भोक लाग्छ भने ठूलो भएपछि ‘इम्पल्स कन्ट्रोल प्रोब्लम’ नामक समस्या आउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ रिस नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो । बच्चा ठूलो भएपछि साना साना कुरामा पनि रिसाउने हुने बताइन्छ। अनुसन्धानमा जो मानिसहरु बाल्यकालमा बारम्बार भोक लाग्ने गरेको बताउथे, उनीहरुमध्ये ३७ प्रतिशतमा बानीमा निकै परिवर्तन आएको पाइएको थियो । उनीहरु निकै रिसाहा र रिस नियन्त्रण गर्न नसक्ने समस्या उनीहरुमा थियो । तर बारम्ब ...
९० प्रतिशत स्मार्टफोन खतरामा
यदि तपाइँ एन्ड्रोेइड फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो खबरले चिन्ता थपिदिनेवाला छ । हालै यस्ता धेरै एपहरुको बारेमा पत्ता लागेको छ जसले अहिले तत्कालै दुनियाका ९० प्रतिशत एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई एकसाथ आफ्नो चपेटामा पार्न सक्दछन् । तर यस्ता खतरनाक एपहरु गुगल प्ले स्टोरमै उपलब्ध छन् र यिनीहरुलाई स्मार्टफोनमा डाउनलोड गर्नका लागि समेत सुरक्षित मानिँदै आएको छ । मालवेयर एपको यस्तो समूहरुलाई गडलेस एप नाम दिइएको छ । यिनीहरुले ९० प्रतिशत स्मार्टफोनलाई प्रभावित ग ...
एक युवकको सामूहिक बलात्कार गर्ने १० महिला
तपाईले महिलाको बलात्कार भएको र धेरै पुरुषहरुले एकै महिलाको सामूहिक बलात्कार गरेको त धेरै सुन्नुभएको होला । तर, महिलाले पुरुषको बलात्कार गरेको सायदै सुन्नु भएको होला र सुन्दा तपाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, अष्ट्रेलियाका एक युवकलाई १० जना युवतीले मिलेर सामूहिक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो घटना अहिले संसारभर भाइरल भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमका अनुसार युवक हरेक विहान घरनजिकै मर्निक वाकमा जान्थे । यसैक्रममा एक विहान उनी मर्निक ...
१२ असार, पोखरा । सूचना प्रविधि विभागको सहयोग एवम् हाई वन होप सामुदायिक पुस्तकालय, भरतपोखरीको संयोजनमा लेखनाथ नगरपालिका– १८ बर पाण्डेथुममा हाई वन होप ई– भिलेज केन्द्र आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण वस्तीमा नविनतम प्रविधिको अधिकतम उपयोग गराउँदै त्यहाँको कृषि, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारलाई थप सहज एवम् सरल बनाउन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । केन्द्रका अध्यक्ष केशवराज लम्सालका ...
तपाईलाई थाहा छ लिचीको प्रयोगले के हुन्छ ? जानी राखौ !
गर्मीको मौषममा हामी धेरै नै फलहरूको मजा लिन सक्छौँ । विभिन्न फलहरूको आ–आफ्नै विशेषता रहेको छ । गर्मीमा पाइने फलहरू मध्ये एक फल हो लिची ।लिचीको उत्पादन विशेष गरी चीनमा बढी पाइन्छ तर आजभोली विश्वभर यसको उत्पादन हुन्छ । विश्वभर निकै नै लोकप्रिय फल लिची जसको फाइदाहरू धेरै नै छ । लिचीलाई एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टीको रुपमा लिन सकिन्छ । हुन त प्राय फलहरूमा फ्लेवर्ड र एन्टीअक्सीडेट्स हुन्छ जसले क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ । तर लिचीमा कीमोप्रोटेक्टिव इफेक् ...
यी युवतीकहाँ यौन सम्बन्ध राख्न लाइन लागेर आउथे पुलिस अफिसरहरु
एजेन्सी । १८ वर्षीय एक किशोरीको सनसनीपूर्ण खुलासाले सबैलाई चकित पारेको छ । किशोरी गुएप (नाम परिवर्तन)ले मरकरी न्यूज अखबारसँग कुरा गर्दै भनेकी छन्- २४ पुलिस अफिसर यौन सम्बन्ध राख्न लाइन लागेर उनको घर आउथे । र पैसा पनि दिन्थे । घटना अमेरिकाको अकल्याण्डको हो । किशोरीको यस्तो खुलासा एक पुलिस अफिसरले आत्महत्या गरेपछि भएको हो । किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राख्ने मध्येका एक पुलिस अधिकारीले हालैमात्र आत्महत्या गरेका थिए । आत्महत्या गरेका ओ ब्रीन नाममा पु ...
नमिलेको ब्रा लगाउँदा पखालासमेत लाग्न सक्छ !
अधिकांश महिलाले विचार नै नपु¥याईकन ब्रा किन्ने गर्छन् । ब्राकै कारण शरीरमा असहज भयो भनेर पनि त्यति चासो देखाउँदैनन् वा औषधिउपचार गर्र्र्दैनन् । बरु पीडा सहन्छन् । विज्ञहरुका अनुसार फिटिङ नमिलेको ब्राले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुन्छ । आफूलाई फिट नहुने ब्रा लगाउँदाका बेफाइदा स् यदि तपाईको काँधमा नीलो डाम वा छाला कोतरिएको छ भने निश्चय नै तपार्इंले आफूलाई नमिल्ने ब्रा लगाउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा तपार्इंमा संक्रमण ९फन्गल इन्फे ...
हाकिमलाई खुसी पार्न आफ्नै पत्नीलाई शारीरिक सम्पर्क राख्न लगाउँदा…
जेन्सी । बाराणसीमा एक महिलाले आफ्नै श्रीमानको हत्या गर्ने प्रयास गरेकी छिन् । श्रीमानले मालिकलाई खुसी पार्न घरमै बोलाएर मालिकसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न बाध्य पारेपछि अन्तिममा मालिकसँगै मिलेर श्रीमानको हत्या गर्न खोजेकी हुन् । सुरुमा शारीरिक सम्पर्क राख्न नमानेकी महिलाले आफ्नो फाइदाका लिन श्रीमान मनीष सेठले दिनदिनै मालिकसँग सम्बन्ध राख्न लगाउँदा ती महिलाको मालिकसँगै प्रेम परेको थियो । त्यो प्रेम उत्कर्षमा पुगेपछि महिलाका श्रीमान झण्डै मारिएका थिए । ...
ट्विटरमा अब पहिले भन्दा लामो भिडियो अपलोड गर्न सकिने
टि्वटरले आफ्नो टि्वटको लिमिटलाई १४० क्यारेक्टरबाट बढाउने नबढाउने विषयमा विभिन्न खाले अड्कलबाजी चलिरहेका बेला उसले प्रयोगकर्तालाई पहिले भन्दा लामो भिडियो अपलोड गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । अबदेखि टि्वटरमा १ सय ४० सेकेण्डको भिडियो अपलोड गर्न सकिने भएको छ । आम प्रयोगकर्ताले १४० सेकेण्डको भिडियो अपलोड गर्न पाउनेमा कतिपयले भने १० मिनेटसम्मको भिडियो अपलोड गर्न सक्नेछन् । टि्वटरमा अहिलेसम्म ३० सेकेण्ड सम्मको भिडियो अपलोड गर्न सकिन्थ्यो । भिडियो ...
यी हुन्, महिलाले पुरुषसँग लुकाउने कुराहरु
एजेन्सी– धेरै कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन महिलाले आफूभित्र लुकाएर राखेका हुन्छन् । तर, केही कुराहरु यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरु कसैसँग शेयर गर्दैनन्, खासगरी आफ्नै श्रीमानसँग पनि । यस्ता छन् ती कुराहरु:- १. तपाईंको पार्टनर आफ्नो बेस्टफ्रन्डसँग बिस्तारामा तपाईंको क्रियाकलापका बारेमा सबै भन्न तयार हुन्छन्, तर यदि तपाईं उसँग यस्ता कुरा शेयर गर्नुभयो भने उसले असहमती जनाउने छे । २. तपाईंसँग बिहे हुनुभन्दा पहिले उसको कति जनासँग शारीरिक सम्बन्ध थ ...
स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ सावधान ! गर्भवती भइएला
सबैले बुझेको कुरा के हो भने प्राकृतिक रुपले महिला गर्भवती हुनका लागि उनको पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध भएकै हुनुपर्छ । तर अमेरिकाको फ्लोरिडामा एउटा यस्तो घटना भएको छ, जसले उल्लेखित मान्यतालाई चुनौति दिएको छ । त्यहाँ एक पौडी पोखरीमा नुहाएसँगै १६ जना किशोरीहरु गर्भवती भएका छन् । यी किशोरीहरु १३ देखि १७ वर्षसम्मका थिए । उनीहरु कुनै पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर गर्भवती भएका होइनन् र अहिलेसम्म उनीहरुले कुनैपनि पुरुषसँग यौन सम्पर्क गरेका पनि छैनन् । यस्त ...
अनलाइनमा पोर्न फिल्म हेर्नुअघि थाहा पाउनुपर्ने कुराहरु !
इन्टरनेटमा एकसाथ एकातर्फ फेसबुक चलाइरहने र अर्कोतर्फ पोर्न साइट हेर्ने गर्नुहुन्छ रु खबरदार १ यदि यसो गर्ने गर्नुहुन्छ भने अबदेखि बानी बदल्नुहोस् र पोर्न साइट हेर्नेबेला फेसबुक अकाउन्ट लगआउट गर्न नभुल्नुहोस् । यदि तपाइँले फेसबुक अकाउन्ट लगआउट नगरीकनै कुनै पोर्न साइट हेर्नुभयो भने फेसबुकले तपाइँलाई ट्रयाक गरिरहेको हुनसक्छ । अझ यदि उक्त पोर्न साइटमा फेसबुक प्लगइन रहेको भए त तपाइँको पोर्न साइट सफिर्ंगलाई फेसबुकले ट्रयाक गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । फ ...
महिलामा उत्तेजना जगाउने जी स्पट के हो ?
‘जी स्पट’ जर्मन गाइनाकोलोजिस्ट अन्स्र्ट ग्राफेनबर्गका नामबाट राखिएको हो । त्यसैले यसलाई ग्राफेनबर्ग स्पट पनि भनिन्छ । यो महिलाको योनीको दुई इन्च भित्र हुन्छ । क्लिटोरिसको पछाडितिर योनीको अगाडिको भित्तातिर हुन्छ । यो सिमी आकारको हुन्छ । सिमी आकारको र स्पन्जजस्तो हुन्छ यो । सम्भोगको बेला ‘जी स्पट’ उत्तेजित हुनेगर्छ । ‘जी स्पट’ रगतका नसा र स्नायुहरुको जालोले बनेको हुन्छ । यो अति नै संवेदनशील हुन्छ । सम्भोगको बेला ...
यौनसुखका लागि एन्ड्रोइड सेक्स डल
अब यौन सम्पर्क राख्न वा यौन सुख प्राप्त गर्नका लागि कुनै सेक्स पार्टनरको आवश्यकता पर्नेछैन । जब तपाइँको मन जाग्नेछ तब सहवासका लागि तयार हुन सकिनेछ । तपाइँको यो यौनचाहनलाई पूरा गरिदिनेछ एन्ड्रोइड सेक्स डलले । सेक्स डलबाटै तपाइँ आफ्नो यौनसुख पूरा गर्न सक्नुहुनेछ । आगामी दिनमा युवा पुस्ताले सेक्स रोबोटका मद्धतबाट यौनसुख लिन सक्नेछन् । एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमबाट चल्ने यस्तो सेक्स डल हाल अमेरिका र जापानका बजारमा उपलब्ध छन् । यी यौन रोबोट खेलौना बोल् ...
तपाइको थरको विकास कसरी भयो ? थाहा पाउनुहोस् !
खसजातिका थरहरु धेरै छन् । तपाइलाई लाग्न सक्छ यो थर परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको हो र मेरो आफ्नै पेवा हो तर त्यस्तो केहि होइन । तपाइ यदि भ्रममा हुनुहुन्छ भने हामि तपाइको भ्रम चिर्दै छौ । तपाइका यी थरहरु कसरी रहन गयो ? थाहा पाउनुहोस । अधिकारी, कार्की, भट्ट जस्ता थर सरकारी दर्जाबाट उत्पन्न भएका हुन् भने कोइराला, रिजाल, पराजुली जस्ता थरहरु कर्णाली अञ्चलका गाउँहरुबाट उत्पति भएका हुन् । आफ्नो थर के हो र कसरी उत्पति भयो भन्ने जिज्ञासा छ भने तलको सूच ...
समुद्री मार्गबाट नै विश्व भ्रमण गर्दै कुखुरा (फोटोफिचर)
एजेन्सी - पेरिस, जीवनमा एउटा कुखुराले कति यात्रा गर्ला ? घर, करेसाबारी, खोरमा सीमित हुने कुखुरा विश्व भ्रमणमा निस्कियो भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । एक फ्रेन्च नागरिकले आफूसँगै कुखुरालाई लिएर विश्व भ्रमण गर्दैछन् । समुद्री मार्गबाट विश्व भ्रमण गरिरहेका तीन युवक र कुखुराको तस्वीर हालै फ्रेन्च मिडियामा प्रकाशित भएपछि यसले विश्वव्यापी चर्चा पाएको हो । २४ वर्षीय गुइरिक सोडीले कुखुरालाई लिएर विश्व भ्रमण गरिरहेका हुन् । दुई वर्षदेखि यात्रारत उनले श ...
दिर्घजिवी बन्नुछ ? बाख्राको दूध पिउनुहोस् !
एक अध्ययनले आमाको दुध पछि बाख्राको दुध अत्यन्त उपयोगी हुने देखएको छ । अध्ययन अनुसार बाख्राको दूधमा पोषण तत्व र यसले विभिन्न रोगहरुलाई निको पार्न सक्ने औषधीबद्र्धक गुण हुने भएकाले लाभदायक हुने बताइएको छ । अमेरिकी बैज्ञानिक डा।रवर्ट एच। सोर्जले यस सम्बन्धमा धेरै खोज अनुसान्धान गरेका छन् । उनले अध्ययनबाट नियमित बाख्राको दूधको सेवनबाट मानिस तन्दुरुस्त हुनुका साथै बढो नहुने आश्चर्यजनक रहस्य पत्ता लगाएको आफ्नो सोधमा उल्लेख गरेका छन् । उनले सोधमा भनेका ...
स्तनको निप्पल विश्वमै आठ किसिमको ! (प्रकारसहित)
महिलाको स्तनको निप्पल (मुन्टो) कति किसिमका होलान् रु यो प्रश्नको जवाफ अध्ययनकर्ताहरुले खोजेका छन् । विश्वभरमै महिलाहरुको स्तनको निप्पल जम्मा आठ किसिमको हुन्छ । १. प्रोट्रयुडिङ – निप्पल क्षेत्रको केही मिलिमिटर छाडेर माथि उठेको निप्पललाई प्रोट्रयुडिङ भनिएको छ । २. फ्ल्याट– यस्तो निप्पल छालाबाट धेरै माथि उठेको हुँदैन । तर छालासमान पनि हुँदैन । ३. पफ्फी– पफ्फी निप्पलको टुप्पोसँगै निप्पलको क्षेत्र पनि केही माथि उठेको हुन्छ । दुवै स्त ...
यार्सागुम्बाले हेपाटाइटिस बि देखि फोक्सो र मृगौलाको क्यान्सरसम्म निको पार्छ
यार्सागुम्बा दुर्गम हिमाली जिल्लाको पाखा–पखेरा हिऊमुनि पुरिएर रहने एक प्रकारको लाभ्रे किरामा ढुसी लागेर उम्रिने च्याऊ हो । यसको टुप्पो खैरो र फेद फिका पहेंलो हुन्छ । अत्यन्तै शक्तिबर्धक र यौन क्षमता बढाउने , यो वनस्पती मानव जीवनको लागि सञ्जीवनी बुटि नै सावित भएको छ । विहान बेलुका मह मिलाएको दुधसँग एक–एक वटा यार्सागम्बा खाने हो भने यसले हेपाटाइटिस बि भाइरसलाई समेत नष्ट गरिदिन्छ । अत्याधिक यौन शक्ति पैदा गर्छ । फोक्सो र मृगौलाको क्यान्स ...
जंगबहादुर राणाको तलब
जंगबहादुर राणा कतिपयलाई दन्त्यकथाको नायकजस्तो लाग्छ। यही नेपाली माटोमा जन्मेर राजदरबारमा राजा, रानी र युवराज तीनमुख भएको बेला अनेक किसिमका खेल खेली शक्ति आफ्नो हातमा लिएर राजालाई खोपाको देउता बनाउने शासक हुन्, उनी। उनैले बीजारोपण गरेको जहानिया राणा शासनले नेपालमा लगातार एक सय चार वर्ष एकछत्र राज गर्‍यो। जंगबहादुर राणा सत्तामा आउनुमा उनको पारिवारिक विरासत र शक्तिशाली मावली खलकको प्रभावले पनि भूमिका खेलेको छ। उनका जिजुबुबा रामकृष्ण कुँव ...
होचो हुनुमा पनी फाइदा छ, जान्नुहोस्
के तपाईलाई अग्लो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । निःशन्देह अझै पनि धेरै मानिस अग्लो हुन नै मन पराउँछन् । अग्ला मानिस धेरै हिड्न सक्ने, आर्कषक र सफल हुने आम विश्वास छ । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा महिलाको उचाईलाई धेरै महत्व दिइन्छ । अग्ला महिला पुरुषको तुलनामा अझ बढी आकर्षक देखिन्छन् भन्ने मान्यताले पनि आम महिलामा उचाई बढिदियोस् भन्ने चाहना बढिरहेको पाइन्छ । हो, मानिसहरु आफ्नो उचाईबारे गुनासो गरिरहेकै बेला होचो हुनु (पुड्को होइन, औषत उचाइ) स्वास्थ्यका ल ...
दिनहु कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ ?, सावधान अपनाउनुहोस्
कम्प्युटर अहिले हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । जीवनका हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटरको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन । तर लगातार कम्प्युटरको अगाडि बस्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । एक नयाँ अध्ययन अनुसार दिनमा लगातार ३ घण्टा कम्प्युटर चलाउनाले आँखाको समस्या देखा पर्दछ । जोन रिटानो अमेरिकाको एक कलेजमा इतिहासका प्राध्यापक हुन् । उनले इतिहासका कैयन् उत्कृष्ट पुस्तक लेखेका छन् । उनले धेरै समय कम्प्युटरमै बिताउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ तथ दिनभरजसो नै कम ...
जेठ ३० - काठमाडौं ।‘नमस्कार, प्रहरी जवान सवल सापकोटा।’ ‘हेल्लो के छ खबर भेट्ने होइन त ?’‘हजुर के भन्नु भएको ?’‘भेटौ भनेको।’‘यो प्रहरी कन्ट्रोल हो केही समस्या छ भने भन्नुहोस् ’‘मायाको समस्या भयो सुल्झाइदिनुहोस् नत।’महानगरीय प्रहरी कार्यालयको आकस्मिक १०० नम्बरमा अहिले प्रहरी जवान सापकोटाले झेल्ने ब्लफकलको विविध सम्वादमध्ये एक हो यो।आयुक्तको परिचालक कक्ष मेट्रो कन्ट्रोलमा क ...
सित्तैमा सेवा दिएर गुगलले अरबौँ कमाउँछ, जान्नुहोस् सूचना प्रविधिको यो युगमा गुगल सर्च इन्जिनमा खोज्दा आफुलाई चाहिएको जानकारी पाइन्छ । गुगल सर्च इन्जिनमा निशुल्क रुपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सित्तैमा सेवा दिने गुगलको कमाई भने अरबौँ छ । आखिर सित्तैमा सेवा दिएर कसरी हुन्छ त अरबौँ कमाई ? एक तथ्यांक अनुसार गुगलले एक मिनेटमा झण्डै डेढ लाख डलर कमाइ गर्छ गुगल सर्च इन्जिन मार्फत । जसमा मुनाफा २३ हजार डलर जति हुन्छ । गुगलले जुन जानकारीहरु प्रयोगकर्तालाई सित्तैमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ त्यस्ता सामाग्र ...
के तपाइलाई बाडुली लाग्छ ? रोक्न के गर्ने ?
बाडुली लाग्ने अनेक कारण हुन सक्छन् । जसमा छिटो–छिटो खाना खानु, बढी पिरो खानु अथवा अत्याधिक रक्सी सेवनका कारणले बाडुली लाग्न सक्छ । कहिलेकाही हामी खाना ठीकसंग खाँदैनौं, जसको परिणामले बाडुली लाग्न सुरु गर्छ । खानाको टुक्राको बीचमा हावा मिसिनाले बाडुलीको समस्या सुरु हुन्छ । तर कुनै बेला त्यसै केह ...
सेक्सको बेला यसरी पाउन सकिन्छ चरमसुख
यौनसम्पर्कको बेला विभिन्न आसनका प्रयोगले पुरुष र महिला दुवैलाई नयाँपन महसुस गराउनुका साथै यौनांगका विभिन्न संवेदनशील भागहरूका बीचमा घर्षण हुने मौका पनि प्राप्त हुन्छ । चरमसुख प्राप्त आसनको परिर्वतन महŒवपूर्ण माध्यम हुन सक्छ । चरमसुखको बेला पुरुषको जस्तो महिलामा वीर्य वा अन्य कुनै पदार्थ स्खलन हुँदैन । केही महिलामा योनीको भित्तामा रहेका ग्रन्थीहरूबाट पानीजस्तो कीटाणुरहित र सङ्लो पानीजस्तो पर्दाथ भने निस्कन सक्छ । यद्यपि, सबै महिलामा यस्तो हु ...
गुगलको ‘बेवकुफ’ बनाउने व्यापारले तनावमा सेवाग्राहि
जेठ २७ - काठमाडौं । ‘हेर्नुहोस् कोरियामा बस्ने केटीहरूको चर्तिकला’, ‘आफ्नी श्रीमतीसँग अर्कैलाई भेटेपछि‘’, ‘दरबार हत्याकाण्डको रहस्य खुल्यो’, ‘चीनको एक घरमा बिरालोले कुकरको छाउरो जन्माएपछि मालिकलाई तनाव’ लगायतका समाचारहरू कहिलेकाहीँ फेसबुकमा देखिनै रहनुभएको होला । कति पटक त तपाईं पनि झुक्किएर त्यस्ता लिङ्क क्लिक गर्नुभएको होला । सनसनीपूर्ण हेडलाइन्स् देखेर क्लिक गरेको लिङ्कमा समाचार नभेटेपछि तप ...
दाँत चम्काउने घरेलु उपाय, जानीराख्नुस !
मनिसको सुन्दरतामा विशेष प्रभाव पार्ने दाँत पहेलो हुनु हिजो आज धेरै को समस्या हो । सहि तरिकाले दाँत को हेरचाह नगर्नु, चुरोट, सुर्ती, पराग, जस्ता कुराहरु बढि सेवन गर्दा दाँत पहेँलो हुने समस्या हुने गर्दछ । आफ्नो अनुहारको सुन्दरताको तत्व पहेँलो होस् भन्ने केहि पनि चाहादैनन् । दाँतको पहेलोपन हटाउने केहि घरेलु औषधी: हाम्रो गाउघर तिर नुन र तेल ले दाँत सफा गर्ने चलन अझै पनि छ, नुन मा २९४ थोपा शुद्ध तोरीको तेल मिलाएर दांत सफा गर्ने गर्नाले केहि दिनमै दाँ ...
यौन सम्पर्क अस्विकार गर्ने १९ महिलालाई जिउँदै जलाइयो
कुर्दिस समाचार एजेन्सी एआरएका अनुसार आईएसआईएसले आफ्नो कब्जामा रहेका १९ यजिदी कुर्दिस महिलाहरुलाई जिउँदै जलाएको छ । ती महिलाहरुले यौन कामदार बन्न अस्विकार गरेका थिए । यस घटनालाई सयौँले प्रत्यक्ष हेरेका थिए । कुर्दिस न्यूज एजेन्सीले अब्दुल्ला अल–मालालाई हवाला दिदैँ यि कामदारहरुले इस्लामिक स्टेट फाइटर्ससँग यौन सम्पर्क गर्न अस्विकार गरेका कारण उनीहरुलाई जिउँदै जलाइएको बताएको छ । स्थानीय सैनिक स्रोतका अनुसार यस हमालामा सयौँको मृत्यु भएको थियो । ...
संसारकै अनौठो सेक्स संग्राहलय (फोटो फिचर)
संग्राहलय भन्नेबित्तिकै हामि पुराना सरसामानहरुरुको भन्डार भन्ने बुझ्छौ । कतिपय संग्राहलय त्यहि पुराना सामानहरुको भन्डार पनि हुन्छन् । तर संसारमा यस्ता संग्राहलय पनि छन्, जहा सेक्स सम्बन्धी जानकारीहरु मात्र पाइन्छ । हामिले त्यस्तै एउटा नमुना संग्राहलयको फोटो फिचर प्रस्तुत गर्दै छौ । फोटो फिचर: ...
चायाँले हैरान पारेको छ ? निर्मुल पार्ने उपायहरु यस्ता छन् !
चायाँ मान्छेको टाउकोमा मात्र नभइ कसैकसैको अनुहार, हात, खुट्टामा पनि पर्ने गरेको पाईन्छ । प्राय धेरै जसो मानिसको भने टाउकोमा नै पर्छ । सरसफाईमा ध्यान दिदा दिदै पनि एक दुई दिन ननुहाउदैमा चायाले सताउने गर्दछ । चायाँ छालासम्बन्धी एक प्रकारको समस्या हो । टाउकाको छालाबाट मरेका कोषहरू बाहिर निस्केपछि हामी त्यसलाई नै चाँया भन्ने गर्दर्छौँ । चायाँ सबैलाई पर्ने भएपनि यसबाट सबैले मुक्ति चाहेकै हुन्छन् । चायाँका कारण अरुले हेर्ने दृष्टिकोण र आफ्नो सुन्दरताको ...
पेटमा बोसो बढ्यो ? त्यसो भए यसो गनुहोस् !
कागती पानी खानुहोस् तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान सेवन गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंको मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्नमा पनि मद्दत मिल्छ । काँचो लसुन खानुहोस्बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस् । बिहान लसुनको दुई या तीन पोटी चपाएपछि तातोपानीमा कागती हालेर पिउनाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाट शरीरको रक्तप्रवाह पनि सुचारु हुन्छ । यसले शरीरलाई निकै फाइदा पनि गर्छ । बदामको प्रयोग गर्नुहोस्बदाममा भिटामिन इ तथा प्रोटिन ...
भर्जिनिटी टेस्टमा फेल भएको भन्दै सम्बन्ध तोड्ने पुरुष
पति/पत्नी भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। जसमध्ये एक मात्रको अभाबमा पनि सम्बन्ध अधुरो रहन्छ। तर आजको आधुनिक जमानामा पनि यो सम्बन्ध भर्जिनिटी टेस्टमा टिकेको छ भनेको सुन्दा आश्चर्य नमाने हुन्छ । यस्तै भारतको महाराष्ट्र राज्यमा भर्जिनिटी टेस्टको एउटा घटना बाहिर आएको छ । महाराष्ट्रको नासिकमा भर्जिनिटी टेस्टमा पत्नी फेल भएपछि एक व्यक्तिले बिहेको ४८ घन्टामै सम्बन्ध तोडेका छन् । पत्नीको भर्जिनिटीमाथि शंका भएपछि ती व्यक्तिले पञ्चायतमार्फत परीक्षण गराएका ...
प्रेम हत्या र आत्महत्याको प्रमुख कारण प्रेमकै कारण संसारमा केही पात्रहरु अमर रहेको बेला यहा कयौं पात्रहरु यस्ता पनि छन् जसले प्रेमकै कारण अल्पायूमै मृत्युवरण गरे । प्रेमका परिभाषाहरु नभई प्रवृत्तिहरु वदलिदा पछिल्लो समय नेपालमा पनि हत्या र आत्महत्याको दर बढिरहेको छ । माया, विश्वास, समर्पण र घात,त्यसपछि मृत्यु । यो अहिले नेपाली परिवेशमा प्रेमको अर्को परिभाषा बन्न थालेको छ । ‘के तपाईं कहिल्यै प्रेममा पर्नुभएको छ रु भयानक हुन्छ, होइन त रु यसले तपाईंलाई साह्रै नाजुक बनाउँछ । यसले तप ...
काखीको दुर्गन्धबाट कसरि छुटकारा पाउने
गर्मी महिना लाग्नासाथ अत्याधिक पसिना आउने समस्या प्रायः सबैलाई हुन्छ। धेरैलाई दैनिक नुहाइधुवाइ गरेर कपडा फेर्दा पनि पसिनाको दुर्गन्धले सताइरहेकै हुन्छ । काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडितहरुका लागि गर्मी महिना अभिशाप जस्तै बन्छ । दुर्गन्ध कसलाई मन पर्छ र रु जो कोहिपनि सुगन्ध प्रति आर्कशित हुने त हो । त्यसैले त विकसित मुलुकका जनहरु घरमा बस्दा होस् वा घर बाहिर जानुपरोस् मगमग बास्ना आउने अत्तरले आफ्नो पहिरण सुगन्धीत पारेर हिड्छन् । त्यसोत अविकसित ...
स्मार्टफोनलाई भाइरसमुक्त बनाउन यस्तो उपाय गर्नुहोस्
तपाइँको स्मार्टफोन हरेक समय इन्टरनेट सँग जोडिएको हुन्छ भने स्मार्टफोनमा भाइरस आक्रमणको खतरा पनि हरेक समय रहिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ ह्याकरहरुका कारण तपाइँको स्मार्टफोनमा भाइरस पुग्नसक्छ । अक्सर यो सल्लाह दिने गरिन्छ की यदि फोनमा भाइरस छिर्यो भने फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुपर्छ ता की भाइरसलाई पूर्ण रुपमा दूर गर्न सकियोस् । तथापि फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुमा यो समस्या रहन्छ की तपाइँको स्मार्टफोनमा भएका डाटा, गेम्स, फोटो, मेसेजन आदि सबै मेटिन् ...
थाहा पाउनुस् घरमा लक्ष्मी भित्रिन लागेको जानकारी यी संकेतले दिन्छन् तपाईको घरमा लक्ष्मी (धन) भित्रिन लागेको जानकारी लक्ष्मीले कहिले र कसरी आफ्नो कृपा तपाईहामीमा बर्साउँछिन् त्यो हामी कसैलाई पनि थाहा पाउन निकै मुस्किल पर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले लाखौ कोशिस गर्दा पनि केही फल नपाएपछी निराशाले घेर्न सक्छ । शास्त्रका अनुसार केही यस्ता संकेतहरु हुन्छन् जसले तपाईलाई अब तपाईको भाग्य चम्किँदैछ र लक्ष्मीले तपाईको जीवनमा प्रवेश गर्दैछिन् भन्ने थाहा दिन्छ । केही यस्ता संकेतहरू छन् जसले तपाईलाई तपाईको भाग् ...
चीनको लुगा धुने पाउडरको रंगभेदी विज्ञापन (विज्ञापन सहित )
चीनको एक लुगा धुने पाउडर को विज्ञापनको व्यापक आलोचना भएको छ । विज्ञापनमा एक कालो जातिका युवालाई वासिङ मेसिनमा डिटरजेन्टसहित लुगा धुने मेसिनमा हालिएको छ । केही बेरपछि ती काला व्यक्ति वासिङ मेसिनबाट गोरो भएर निस्केको विज्ञापनमा देखाइएको छ । यो अहिलेसम्मकै सबै भन्दा रंगभेदी विज्ञानपन भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । विज्ञापनले रंगभेदी भावनालाई बढाउनुका साथै कालो जातिको अपमान गरेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका हुन् । विज्ञापनमा एक चिनियाँ युवतीले अुनहारमा ...
अनौठो बच्चा, जन्मिने बित्तिकै भुइमा बस्यो
भारतमाको बिहार राज्यको पूणिर्या जिल्लास्थित पहाड टोलमा रहेको मीरगन्ज अस्पतालमा हालै एउटा अद्भुत बच्चा जनिमएको छ । उक्त बच्चा जन्मिनेबित्तिकै बसेको छ । जन्मिने बित्तिकै बच्चा बसेको देखेर त्यहाँका डाक्टर तथा नर्स सबै आत्तिए र वरिष्ठ डाक्टरहरुलाई खबर गरे । यस्तो अनौठो खबर सुनेसँगै वरिष्ठ डाक्टरहरु पनि उक्त अद्भुत बच्चा र उसको आमालाई हेर्न गए । एक कान दुइ कान मैदान हुँदै खबर फैलियो र अस्पतालमा एकाएक ठूलो भिड जम्मा भयो बच्चा हेर्नेहरुको । स्थानीय चहबज ...
नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट अफर, यसरी चलाउनुहोस् अनलिमिटेड डाटा
काठमाडौं–नेपाल टेलिकमले मोवाइल इन्टरनेट डाटामा अफर ल्याएको छ। इन्टरनेसनल टेलिकमेनिकेसन डेको अवसरमा जेठ ४ देखि जेठ १८ गतेसम्म जिएसएम प्रिपेड र सीडिएमए प्रिपेड र पेस्पेड मोवाइलको लागि टेलिकमले अफर ल्याएको हो। टेलिकमले यो सुविधाको लागि ग्राहकले बरबाहेक ९० रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने छ। डाटा प्याकेज बेलुका ११ बजे देखि बिहान ५ बजे सम्म अनलिमिटेड हुने जनाएको टेलिकमले जनाएको छ।प्याकेजको लागि प्रयोगकर्ताले nightdata टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर ...
एप डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनुहोस्
नाम सुनेर वा त्यसबारे थाहा पाएर हामी विभिन्न एप डाउनलोड गर्छौं । स्मार्टफोनको सहजताले यी कुरा सजिलो पनि भएको छ । तर, हामीले यो सोच्दैनौँ कि यस्ता एप कति जोखिमयुक्त छ ? एक अनुसन्धानका अनुसार डाउनलोड गर्ने एप्लिकेसनले प्रयोगकर्ताबारे गोप्य कुरा पनि थाहा पाउनसक्ने देखिएको छ । जब कुनै मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड हुन्छ, त्यतिबेला प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनबाट धेरै जानकारीको खोजीमा हुन्छन् एप निर्माता । त्यसैले कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नअघि डाउनलोड गर ...
अब फेसबुक चलाएर डलर कमाउनुस् !
यदि तपाइ फेसबुक क्रेजी हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि खुसीको कुरा छ । अब तपाइले फेसबुक चलाएरै डलर कमाउन सक्नु हुन्छ । यो कुनै रमाइलो गफ होइन साचो कुरा हो । फेसबुकले एक नयाँ आकर्षक फिचर ल्याउने भएको छ । छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उक्त फिचरमार्फत प्रयोगकर्ताले राम्रो पोष्ट गरि कमाई गर्न सक्ने छन् । ‘टिप् जार’ नामक फिचर ल्याउने तयारी गरेको फेसबुकको यो फिचरका कारण प्रयोगकर्ताले गरेको पोष्टमा लाईकको स्थानमा नगद टिप पाउने अनुमान गरिएको ...
सेक्सअघि ध्यान दिनुपर्ने यि कुराहरु
एलर्जीको औषधि नखानेसेक्सअघि औषधि खानाले यौनरस कम निस्किन्छ, जसले सेक्सलाई पीडादायक बनाउँछ। एलर्जीको औषधि लिने गर्नुभएको छ भने सेक्सको मज्जा लिइसकेपछि मात्रै लिने गर्नुस्। मसलायुक्त खाना मसलायुक्त खानाले पेट ढुस्स हुन्छ। ढुस्स पेट लिएर सेक्समा उत्साहजनक रूपमा सरिक हुन सकिँदैन। त्यही भएर हल्का खाना खाएर सेक्समा सरिक हुनुपर्छ। मसालेदार खानाले योनीमा नराम्रो गन्ध सिर्जनासमेत गराउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्।बढी मदिरा नखानेहल्का मदिरा खाँदा मुड ...
डिजिटल चिहान बन्दै फेसबुक
मेरी काकीको निधन भएको दिन मैले विलियम सेक्सपियरका रचनाहरूको संकलनको पहिलो पृष्ठमा उहाँले मेरा लागि लेखेको प्रेमपूर्ण वाक्य फेला पारेँ–'लिपिबद्ध शब्द तिम्रा लागि कति महत्वका हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा छ। तिम्रा लागि भनेर मैले जोहो गरिदिएको उपहार यही हो। उही तिम्री काकी ज्याकी।' मेरा निम्ति उनले छोडेको अन्तिम सन्देश पढेपछि भावुक हुँदै मैले ल्यापटप खोलेँ र उनको फेसबुक पेज हेरेँ। फेसबुक पेजमा उनका तस्बिर र ठट्यौला पोस्ट देखेर थोरै भए पनि रा ...
विकिपेडियालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
विकिपेडिया ! जब अनलाइनमा केही जानकारी खोज्नुछ तब विकिपेडियामा गएर विस्तृतमा जानकारी हात पार्न सकिन्छ । निशुल्क विश्व ज्ञानकोषको रुपमा रहेको विकिपेडियाबाट धेरै ज्ञानकुनका कुरा तथा तथ्यहरु थाहा पाउन सकिन्छ । तर कहिलेकाहीँ विकिपेडियामा पाइएको जानकारीमा पूर्ण रुपमा भर पर्न भने सकिँदैन । किनकी विकिपेडियाको पेजलाई जो सुकैले पनि सम्पादन गर्न सक्दछ र आफ्नो जानकारी हालिदिन सक्दछ । जुन आधिकारिक नहुन सक्दछ । कहिलेकाहीँ यस्तो इडिटिंगलाई अनलाइन रोबोट तथ ...
अर्चना पनेरुको पोर्न फिल्म बजारमा भाइरल बन्दै
नेपाली फिल्म उधोगमा प्रवेश गर्नु अघिनै पोर्न स्टार बन्छु भनेर चर्चामा रहेकि अभनेत्री अर्चना पनेरु अन्तत: पोर्न फिल्म आफ्नै आमाबाट खिचाएर चर्चामा रहेकि छिन्। हालै मात्र उनको पोेर्न फिल्म पोर्न हबमा उपलब्ध छ। उनको पोर्न फिल्म दुइ लाख बिस हजार भन्दा बढिले हेरिसकेका छ। ...
१–दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । २–कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । ३–दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । का ...
फेसबुकमा दुई शव्द लेख्दा जेल सजायँ एजेन्सी - ‘आइ सी’ यो तीनै दुई शव्द हुन्, जुन फेसबुकमा लेखेका कारण एक विधवा महिलालाई राजाको अपमान गरेको आरोप लगाइएको छ । यो घटना हो थाइल्याण्डको, जहाँ राजाको अपमान गर्नु सबैभन्दा ठूलो अपराध मानिन्छ र १५ बर्षसम्म जेल सजायँ हुन सक्छ । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककको बाहिरी क्षेत्रमा मानि ...
५० घन्टा १५ मिनेट योगा गरेर उत्तमले बनाए विश्व रेकर्ड
८ जेठ, काठमाडौं । नेपालका उत्तम मोक्तानले ५० घन्टा १५ मिनेटसम्म योगा गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डले उत्तमको कीर्तिमानलाई मान्यता दिएको छ र सबैभन्दा लामो म्याराथन योग पुरुष अब उनको नाममा भएको छ । यसअघि भारतका योजराज सीपीको नाममा ४० घन्टा १५ मिनेटको रेकर्ड थियो । तर, काभ्रे फेक्सिन्टार ३ का उत्तमले त्यसलाई तोडेका छन् । विश्व दर्शन अभियानमा आवद्ध उत्तमले २०१५ डिसेम्बर १७ देखि १९ सम्म ५० घन्टा १५ मिनेट गोग गरेका थिए । ...
यो तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल बन्दा
एजेन्सी - बाथरुममा सावरको मुनी पिताको काखमा बसेको बच्चाको तस्वीर फेसबुकमा पछिल्लो समय हजारौं पटक शेयर भएको छ । यस क्रममा फेसबुकले यो तस्वीरलाई धेरै पटक हटायो पनि । तर, हरेक पटक यो तस्वीर फेसबुकमा फेरि स्थान बनाउन सफल भएको छ । पहिलो नजरमा यो तस्वीर सामान्य लाग्छ । बच्चा बिरामी छ, जसलाई उनका पिताले काखमा लिएका छन् र पानीको फोहोरा मुनी दुबै नङ्गै छन् । अमेरिकाको एरिजोनाका फोटोग्राफर हिथर व्हिटनले यो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे । तस्वीरमा ...
सेक्स पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न अपनाउनुपर्ने उपायहरु
मानिसमा यौन र यौन सम्पर्कप्रति निकै नै चासो रहेको पाइन्छ । यौन सम्पर्कले मानिसलाई एउटा चरम उत्कर्षमा पुर्याउँछ । तर कतिपय समयमा पुरुष तथा महिला दुवैले आफूलाइ तथा आफ्नो सेक्स पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिरहेको अवस्था पनि हुन्छ । आफ्नो पार्टनरलाई पूर्ण सन्तुष्टी दिन अपनाउनुस यी उपायाहरू : प्राक क्रिडाको आनन्द लिनुहोस् सेक्स गर्नुअघि यदि तपाईले प्राकक्रिडा बढी ध्यान दिनु भयो भने तपाईको सेक्स उत्कर्षमा पुग्न मद्दत पुर्याउँछ त्यसैले सेक्सअघि प्राकक्र ...
रहर, परम्परा तथा कान छेडाउनुका ६ फाइदाहरु
परापुर्व कालदेखिनै महिलाले त कान छेड्दै आएका थिए पछिल्लो समय फेसनको चक्करमा अधिकांश पुरुषहरुले पनि कान छेडाउने गरेका छन् । कान छेडाउनुको वैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन् १. मानसिक क्षमतामा वृद्धि वैज्ञानिक दृष्टिका अनुसार कान छेडाउनाले मानिसको दिमागमा ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकारले हुन्छ । दिमागमा रगतको सन्चार राम्ररी हुनाले बौद्धिक क्षमतामापनि वृद्धि हुन्छ । सम्भवतः यसैले हुन सक्छ, पहिले गुरुकुलमा जाने हरेक विद्यार्थीको कान छेड्नुपथ्र्यो । यसबाट विद्यार ...
स्टालिनका यी चर्चित भनाईहरु, जान्नुहोस्
एजेन्सी - विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चर्चा गर्दा स्टालिनको नाम स्वतः जोडिएर आउँछ । लेनिनपछि रुसमाथि भएको बैदेशिक आक्रमणहरुका विरुद्ध लडेर विशाल शोभियत युनियनलाई जोगाउने श्रेय उनैलाई जान्छ ।पेरिस कम्युनपछि पहिलो पटक सानदार रुपमा स्थापना भएको समाजवादी सत्तालाई टिकाउन उनले जुन भूमिका निर्वाह गरे, त्यसको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उच्च मूल्याङ्कन गरिएको पाइन्छ । तर शोभियत संघ पतनको पूर्वसन्ध्यामा उनले आफ्नै कमिटीमा कयौं नेताहरुको हत्या गरे । हत ...
कुन देशका पुरुषको लिंगको आकार कति ?
पुरुषको लिंगलाई लिएर विभित्र देशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भैरहेका हुन्छन् । लिंगको आकार र प्रकारको विषयमा पनि विशेष चासो राखेको देखिन्छ । विशेष गरी यौन सन्तुष्टीमा लिंगको आकारले फरक पार्छ भन्ने भ्रम पनि फैलिरहेको पाइन्छ । तर लिंगको आकारले भने यौन जीवनलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर पनि यसको आकारलाई लिएर बेला बेलामा चर्चा परीचर्चा भै नै रहन्छ । लिंगको आकार देश, वर्ण आदि अनुसार फरक फरक हुन्छन् । विश्वका विभिन्न मानिसहरूको वर्ण तथा रहनसहन फरक फरक छ । सोह ...
स्मार्टफोन किन्नुभयोको छ ? यी काम गरिहाल्नुस्
आफुलाई मन परेको वा आवश्यकता परेकेा स्मार्टफोन किन्ने बित्तिकै चलाउन हतार कसलाई नहोला र ? तर नहतारिनुस् । तपाइँले आफ्नो स्मार्टफोनलाई टिकाउ, सुरक्षित तथा सुन्दर बनाउनका लागि केही उपाय अपनाइहाल्नुपर्छ । फोन खरीद गरिसकेपछि गर्नुपर्ने ५ काम यी हुन् :- डिस्प्लेको सुरक्षाः बजारमा विभिन्न थरीका स्मार्टफोन हुन्छन् । कतिपय प्रिमियम क्वालिटीका स्मार्टफोनको डिस्प्ले थोरै ठक्कर खाँदा वा खस्दा पनि टुट्ने खालको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो स्मार्टफोनको डिस्प्ले ...
चाणक्यका ११ उपदेश जसले परिवर्तन गर्न सक्छ तपाईको जीवन तपाई हामी सबैलाई थाहा नै छ चाणक्यका नीति तथा उपदेश जीवन उपयोगी हुन्छन् । तीनै उपदेशहरू मध्येका केही महत्वपूर्ण उपदेशलाई पालना गर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा पनि केही परिवर्तन पक्कै पनि हुन्छन् । यदि तपाई पनि आफ्नो जीवनलाई सुखी तथा उत्तम बनाउन चाहनुहुन्छ भने यी ११ उपदेशलाई ख्याल गर्नुहोस् । १) तपाई खुशी रहनु नै तपाईको दुश्मनको लागि सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । २) धेरै सोझो भएर बस्नु भएन बनमा गएर हेर सोझा रुखहरू नै काटिन्छन् र बाङ्गा चाँही उभिएकै हुन ...
यसकारण धनी लोग्ने खोज्छन् केटीहरु, जान्नुहोस्
एजेन्सी - भनिन्छ प्रेममा पैसा तथा मानिसको हैसियतले कुनै प्रभाव पार्दैन । तर जब बिहेको कुरा आउँदछ यी सबै चिजहरु मुख्य बनेर खडा हुन्छन् । अझ महिलाहरुको मामिलामा प्रायः भन्ने गरिन्छ की उनीहरु प्रेम तथा बिहेको कुरालाई लिएर निकै गम्भीर हुन्छन् र विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दछन् । विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने महिलाहरु यस्तो जिवनसाथीको खोजीमा हुन्छन् जो सँग पर्याप्त धनसम्पत्ति हुन्छ र जिवन व्यवस्थित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो सोँच्नु ठिक ...
यि कमजोर २५ पासवर्ड, कतै तपाइँले राख्नु भएको छ कि ? जान्नुहोस्
गत मे ५ मा विश्वमा पासवर्ड दिवस मनाइयो । यो दिवस विश्वभर सुरक्षित तथा राम्रो पासवर्डको प्रयोग गर्नेबारेमा जागरुकता फैलाउने उद्धेश्यका साथ मनाउने गरिन्छ । विश्वमा साइबर अपराध बढ्दैछ र अनलाइन चोरीहरु पनि व्यापक हुँदैछन । यसको प्रमुख कारण भनेको कमजोर पासवर्ड पनि हो । स्पेस डाटा नामक एजेन्सीले हरेक वर्ष इन्टरनेटको दुनियामा प्रयोग भएका सबैभन्दा खराब पासवर्डको सूचि सार्वजनिक गर्दछ । पछिल्लोपटक उसले गत वर्ष सन् २०१५ मा लिक भएका २० लाख पासवर्डको सूचिको ...
३१ औँला भएका यि बालक
सामान्य रुपमा मानिसको हात र खुट्टामा गरी २० औँला हुन्छन् । तर चीनमा भने एकजना बच्चाका ३१ वटा औँला छन् । हुनान प्रान्तको पिंगजंग्ची काउन्टीमा जन्मिएको हंगकंग नामक उक्त बालकको दुइ हातमा गरी १५ र दुइ खुट्टामा गरी १६ औँला अर्थात् कुल ३१ औँला छन् । गत जनवरीमा जन्मिएको यो बालकमा यसरी धेरै औँला हुनुलाई चिकित्सा भाषामा पोलिडेक्टाइलिज्म भनिन्छ । मानिस, कुकुर तथा बिरालो लगायतमा यो समस्या जन्मजात नै देखिने गरेको छ । जसका कारण हात खुट्टामा अतिरिक्त औँला पला ...
नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध संसारमा जम्मा १२ राशी रहेको छ र राशी अनुरुप स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । आफ्नो नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध कुन स्त्री या पुरुष सँग कस्तो रहन्छ । १.मेष राशी जुन मान्छेको राशी मेष हो उसको लागि मेष, सिंह या धनु राशी हुने हरु सबैभन्दा राम्रो हुनेछन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ ...
सफल बन्न चाहनुहुन्छ ? चाहनु हुन्छ भने यि बानीहरु त्याग्नुहोस् काठमाण्डौ - सफलता प्राप्त गर्न हरेक मानिसले चाहन्छन् । सफलताका लागि मेहनतका साथै केही अन्य कुराहरु जरुरी हुन्छन् । विशेष गरी मानसिक र शाररिक स्वास्थ्यलाई ख्याल पु¥याउनुपर्छ । मान्छे स्वस्थ रहन उसका बानी स्वस्थ हुनुपर्छ । स्वस्थ बानीले मात्रै सफलता दिलाउन सक्छन् । १.असफलता देखी डराउनेसफलता सधैँ हात लाग्दैन । असफलता त पाइलैपिच्छे भेटिन्छ । असफलता नै धेरै समय आफूसँग रहन्छ भने किन यो देखि डराउने । त्यसैले असफलतासँग डराएर दिमागमा यसलाई हावी ...
बाउको नाममा ‘भाइ’ थप्न र आमाको नाममा ‘भाइ’ हटाउन अदालतको आदेश
भारतका गुजराँतीहरुको नाममा भाइ तथा बेन भन्ने शव्द झुण्डिएको हुन्छ । यो शव्दले हाँसो उठाउँदैन मात्रै, गुजराँत बाहिर भारतका अन्य क्षेत्रका मानिसहरु यो कुरालाई लिएर खिसिट्युरी पनि गर्छन् । मानिसहरुले चाहे जे भनुन् तर गुजराँतीहरुका लागि यो शव्दले ठूलो माने राख्छ, किनकी यी शव्द सम्मानसूचक शव्द हुन् । सायद यहीँ भएर होला एकजना गुजराँती यिनै शव्दका लागि स्थानीय निकायको विरुद्धमा उच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् । गुजराँतका घनश्याम तलाविया नामका व्यक्तिको आर ...
८० वर्षदेखि ड्राइभरी पेशा गरिरहेका यी १०३ वर्षे वृद्धको कथा
१ सय ३ वर्ष उमेरका जियोभन्नी रोजो बेलायतका सबैभन्दा पूराना ड्राइभर हुन् । उनी आठ दशकदेखि निरन्तर चालक पेशामा संलग्न छन् र यति लामो समयसम्म गाडी चलाउँदा उनले चलाएको गाडी एकपटक पनि दुर्घटनामा परेको छैन । उनी यो उमेरमा पनि गाडि चलाउन हिच्किचाउँदैनन् । बेलायतको क्याम्ब्रिजमा बस्ने जियोभन्नीको आइसक्रिम तथा दूधको व्यवसाय छ । अघिल्लो वर्ष उनकी श्रीमतीको निधन भयो । त्यसयता उनको दैनिकी हरेक दिन आफ्नो २३ वर्ष पूरानो मित्सुबिसी लन्सर कार गुडाएर सुरुमा श्रीम ...
उत्तर कोरियाले बनायो ह्यांगओभर नहुने रक्सी
कम्युनिष्ट मुलुक उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम बनाएर अहिले दुनियालाई थर्कमान बनाइरहेको छ । हाइड्रोजन बमको खबरले विश्व अझ भनौँ अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुलाई ह्यांग भैरहेको छ । आफ्नो बमका कारण दुनियालाई ह्यांग भएको बुझेर होला उत्तर कोरियाले ह्यांगओभर नहुने रक्सीको आविष्कार गरेको छ । यसअघि पनि क्यान्सर, एड्स तथा इबोलाको उपचारका लागि एक बनस्पतीको जराबाट चामत्कारिक औषधि पत्ता लगाएको दाबी गर्ने उत्तर कोरियाले अहिले फेरि अर्को अपत्यारिलो दाबी तेर्सा ...
अन्तरीक्षमा पहिलोपटक फूल फुल्यो
अन्तराष्ट्रिय अन्तरीक्ष स्टेशनमा पहिलो पटक फूल फुलाइएको छ । अमेरिकी अन्तरीक्ष संस्था नासाका अन्तरीक्ष यात्री स्कट केलीले टि्वट मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् । अन्तरीक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकहरुले लामो समयदेखि फूल फुलाउने कार्यमा जुटिरहेका थिए र हालै यो सफलता प्राप्त गरेका छन् । स्मरण रहोस्, अन्तरीक्ष स्टेशनमा यसअघि नै गोभी फलाइसकिएको छ । अन्तरीक्षयात्री स्कट केलीले आफ्नो टि्वटमा अन्तरीक्षमा फुलेको फूलको तस्वीर समेत पोष्ट गर्दै भनेका छन्: अ ...
चीनमा ८७० जना जिउँदा गौतम बुद्ध
भगवान गौतम बुद्धको मृत्यु आजभन्दा करीब २५ सय वर्ष पहिले नै भएको हो । तर चीनमा भने अझै ८ सय ७० जना आधिकारिक जिवित बुद्ध छन् । नक्कली बुद्धहरुले आफु पनि जिवित बुद्ध हुँ भन्दै मानिसहरुबाट पैसा असुल्न थालेपछि चीन सरकारले देशमा रहेका आधिकारिक जिवित बुद्धहरुको सूचि नै सार्वजनिक गरेको हो । सिन्ह्वाका अनुसार धार्मिक मामिला राज्य प्रशासनले आफ्नो वेबसाइटमै जिवित बुद्धहरुको नाम, तस्वीर तथा उनीहरुको ठाउँ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूचिमा आफ्नो नामपनि देखेपछि ड ...
लामो दाह्री विरुद्ध प्रहरीको अभियान, कलमी गरियो १३ हजार पुरुषको दाह्री हामीकहाँ कुनैबेला प्रहरीले डन भन्दै लामो कपाल पालेका युवाहरुलाई च्याप्प समाएर कपाल काटिदिने अभियान नै चलाएको थियो । पछि निकै विवाद भएपछि त्यो रोकियो । अहिले मध्य एसियाली देश ताजकिस्तानमा भने त्यहाँको प्रहरी युवाहरुको दाह्री कलम गरिदिने र खौरिदिने अभियानमा लागेको छ । ताजकिस्तानको प्रहरीले देशका झण्डै १३ हजार पुरुषलाई समाएर उनीहरुको दाह्री काटिदिएको छ । सरकारका अनुसार इस्लामिक अतिवाद तथा बाह्य असरका विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी अभियानका रुपमा प्रहरीले ल ...
पानीमाथि दौडिन सक्छन् यी व्यक्ति (भिडियो सहित)
पानीमा पौडिने तथा तैरिने त धेरै मानिस देखिएको छ । तर के तपाइँले कोही मानिस पानी माथि दौडिएको देख्नुभएको छ ? सायद छैन होला । पानीमा दौडिने भन्ने कुरा असम्भव नै हुन्छ । तर बेलायतका एक युवकले हालै यो असम्भवलाई सम्भव तुल्याउँदै पानीमाथि दौडिएर सबैभन्दा तिनछक पारेका छन् । बेलायतको नर्थबरल्याण्ड निवासी २७ वर्षका स्कट क्रस्बीले लण्डनमा हालै यस्तो चटक देखाएका छन् । पेशाले जादूगर क्रस्बी हालै १२५ मिटर लामो पौडी पोखरीको पानीमाथि दौडिए । भिडियो हेर्नुहोस् उ ...
अर्बपतिको कुकुरलाई उपहारः एप्पलको स्मार्ट घडी
कुकुर भएर के भो ? यो दुनियाका करोडौँ मानिसले लगाउन नपाएको चिज लगाउन पाएपछि । चीनमा एउटा कुकुर दुनियाका करोडौँ मानिसभन्दा भाग्यमानी छ । सायद वांग नामको उक्त कुकुरका लागि भगवानले पनि निकै फुर्सदमै भाग्य लेखिदिए जस्तो छ । नत्र एउटा नाथे कुकुरले उपहारको रुपमा दुइ दुइ वटा महंगा एप्पल घडी पाउन असम्भव नै थियो । चीनको यो कुकुर कुनै लरतरो मालिकले पालेको कुकुर होइन । चीनका सबैभन्दा धनी मानिसले पालेको कुकुर हो । अघिल्लो दुबै खुट्टामा एप्पलको स्मार्टवाच बाँध ...
उमेर अनुसार फिट भए/नभएको जाच्नुहोस्
एजेन्सी – वृद्ध पिता तन्दुरुस्तीका साथ फूर्तिलो भएर काम गरिरहेका बेला तन्नेरी उमेरको तपाईं घरको भ¥याङ पनि चढ्न नसकेर हैरान त हुनुभ ...
स्वास्थ्य मन्त्रालय क्यान्सरको उपचारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउदैँ
काठमाडौं, वैशाख १७ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यान्सर रोगको उपचार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारी थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य विभागको व्यावस्थापन महाशाखाले आइतब ...
मीठो निद्रा चाहियो ? यी ३ चिज खानुहोस्
सर्पदंशका बिरामीलाई निको पार्ने काम थालियो
गर्मीमा किन कम भोक लाग्छ ? यस्तो छ कारण
१७ बैशाख । सर्पले मसाज गर्ने, अण्डाले मेकअप गर्ने जस्ता दुनियाका अनेक खालका कृत्यहरुका बारेमा त सुन्नुभएकै होला । र, अहिले चाहीँ बञ्चरोले कपाल काट्ने अनौठो कृयाकलापको समाचार बाहिर ...
काठमाडौं, वैशाख १६ । मानिसहरु सानो बच्चा हुँदा नाक कोट्याउने र ‘स्नोट’ खाने गर्दछन् । कसै–कसैमा यो बानी ठूलो हुँदा जाँदासमेत छुट्न सक्दैन । जसलाई समाजमा एकदमै फोह ...
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट, नेपाल समाचारपत्र, कारोबार, राजधानी र नेपाल साप्ताहिकमा छापिएका कार्टुनः ...
सरकारलाई एमालेका तीन सर्त
१७ बैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले तीन सर्त पूरा गरे बजेटअघि गर्नेगरी स्थानीय तहको चुनाव मिति सार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थायी कमिटिको शनिबारको बैठकल ...
आर्थिक समाचारः पूर्ननिर्माणमा अझै तीन खर्ब बजेट नपुग
सिमकोटको छात्रावासको हरिबिजोग, ७० विद्यार्थी नौ महिनादेखि आधा पेट !
जेठदेखि इन्धन ट्यांकरमै लकिङ
Contact Designed by : Z-indexmedia Pvt.Ltd